ငြိမ်းဝေ: April 2010
တရက်ထက်တရက် အဖမ်းအဆီးများ ပို၍တင်းကျပ်လာသည်။ ဤရက်များတွင် မှောင်ခိုသူများ တဦးချင်း လက်လျှော့စွန့်ခွာ သွားနေသည်။ ထိုအထဲ၌ လူငယ်များနှင့် အစဉ်အမြဲ ကလေးကလား စကားပြောပြီး ရယ်မော နေတတ်သော ဦးပေါ်လာကြီး၊ မခင်လှ၊ မခင်သိန်း၊ မိသိန်း၊ ကုလားမ မိသန်း၊ သူတို့တတွေလည်း ပါသွားသည်။
လိုက်ပါနေကြသူများမှာလည်း ရက်စဉ်ရက်ဆက် မဟုတ်ကြတော့ပေ။
“ဦးပေါ်လာကြီးက မလိုက်ဘဲ နေလို့လဲ နေနိုင်တာပေါ့တော်....၊ နောက်ပိုင်းမှာ စားစရာရှိတဲ့လူ မှုတ်လား။ ကျမတို့ဘဲ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်ဖမ်းနေနေ၊ ဟောဒီက ကိုရင်မောင်ကြီးနဲ့ ရိုးမြေကျပေါင်းနေရမှာ၊ ကျမတို့ဘဲ သစ္စာအရှိဆုံးနော်”
အေးအေးစက်စက် နေတတ်သော မမြသိန်း၏ပြက်လုံးမှာလည်း ရွှင်လန်း ကြည်နူးစရာ ပြက်လုံး မဟုတ် တော့ ပေ။
ဤ ပြက်လုံး၏ နောက်စွယ်၌ ညည်းတွားရေရွတ်သံ၊ သက်မချသံများ ပါနေသည်။ ဖြစ်လိုရာ ဖြစ်စေတော့ဟု စိတ်လျှော့ချလိုက်သံ၊ အားကိုးရာ မျှော်လင့်ရာမဲ့စွာ ငိုကြွေးလိုက်သံများသည် ပြက်လုံးနောက်ဆွယ်ရှိ နှလုံးသားများအပေါ်၌ ထပ်ဟပ်နေသည်။
တောင်တွင်းကြီး ရှာဖွေရေးများသည် ဘူတာရုံမှသာမဟုတ်၊ မြို့အဝင်မှလည်း မြင်းလှည်းများကို စောင့်ဖမ်းနေသည်။ နယ်ကျော်ကာ နတ်မောက်အထိ တောင်တွင်းကြီးရှာဖွေရေးများ ချီတက်လာကာ ကြွားဝင့်စွာ စောင့်ဖမ်းလာကြသည်။
ကျောက်ပန်းတောင်းတွင်လည်း ရှာဖွေရေးများနှင့် ထန်းလျက်ဖြန့်ချိသူတဦး ဈေးမတည့်သဖြင့် ပဋိက္ခဖြစ် လာ ကာ ရှာဖွေရေးချင်း ခြေချင်းလိန်နေသည်။
ပင်းချောင်းရုံပိုင် ဂျပုသည်လည်း ပထမတွင် မှောင်ခိုသူအချို့နှင့် မတည့်ရာမှ ခုအခါတွင် ဤလမ်းတာဝန်ခံ လက်မှတ်စစ် အဖွဲ့နှင့်ပင် မသင့်မတင့်ဖြစ်လာကာ သူ ဖမ်းဆီးနိုင်ကြောင်း အာဏာကုန်ပြလာနေသည်။
ထိုအခါတွင် မြှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့စွာဖြင့် စက်ရုပ်များကဲ့သို့ လိုက်ပါနေကြသည့် မှောင်ခိုသူများမှာ တဆယ် ထက် ပို၍ မတင်ဝံ့။ သူတို့သည် တပိဿာစီအထုပ်ကလေးများ ပြုလုပ်ကာ အနှံ့ လျှောက်ဝှက်ထားသည်။ ဖမ်းမကုန်၍ ကျန်သည့် အထုပ်ကလေးများကို ဆဒံ္ဒုချောင်းမှ ထွက်လာလျှင် အမှောင်ထဲ၌ လိုက်လံစုဆောင်းသည်။ တောင် တွင်းကြီးအဝင် သဖန်းကုန်းရွာထိပ်၌ စက်ဗိုလ်များသည် ရထားကို ဖြေးနှေးစွာ ခုတ်ပေးသဖြင့် သူတို့ ဆင်း ကျန်နေရစ်ခဲ့သည်။
သူတို့ထံမှ လက်မှတ်ခ၏ တဝက်မျှကိုပင် ကျနော်သည် မယူရက်တော့။ မီးရထားရဲများမှာမူ လစာ နည်း ပါးကြသူများ ဖြစ်သဖြင့် မယူချင်သော်လည်း ယူနေကြရသည်။
“ငါတို့ ပိုက်ဆံတောင်မယူချင်တော့ဘူးဟာ၊ နင်တို့မြင်ရတာ စိတ်ကိုမောနေတာဘဲ“
ပိန်ပိန်ပါးပါး ရဲကြပ်ကြီးတဦးက ညည်းတွားလေသည်။
ညိုညိုသည်လည်း အခါနှစ်ဆယ်ထက်မနည်း အဖမ်းခံရပြီးပြီ။
မကြာမီ သူ့ လက်ပေါ်မှ လက်စွပ်ကလေးသည် လည်းကောင်း၊ နားပေါ်မှ နားတောင်းကလေး သည် လည်းကောင်း ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ သူ့ ကိုယ်ပေါ်မှ အဝတ်များသည်လည်း မတောက်ပတော့။ သူ့ မျက်နှာ မှာလည်း ညှိုးမှိန်လာနေပြန်ပြီ။
သူကား ထမင်းပင်ထုပ်မလာနိုင်သည့် ကုန်စိမ်းသည် ဘဝ၏ အဆိုးဆုံး အခြေအနေနှင့် မခြားနားတော့ပေ။ ထိုအခါကမူ သူသည် မှောင်ခိုလုပ်လျှင် ထွက်ပေါက်ရှိသေးသည်။ ယခုမူ သူ့ တွင်း၌ ရှိသမျှ အသက် ရှူပေါက်များအားလုံး ပိတ်ဆို့နေပြန်ပြီ။ သူ့ အမေ၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေမှာလည်း ဆေးဝါး များ လျှော့လိုက်ရသည်နှင့်တပြိုင်နက် ပြန်၍ဆိုးလာနေခဲ့ပြီ။
ညနေခင်းများ၌ ရထားပေါ်တွင် သူ့ နံဘေး၌ ယှဉ်ထိုင်နေစဉ်၌ သူတွေ့ကြုံခံစားနေရသည့် အပူရှိန်များသည် ကျနော့် ကိုလာ၍ ရိုက်ဟပ်နေသလိုပင်။
သူ့ ခေါင်းမှ ပဲဆီအနံ့ များသင်းနေပြန်ပြီ။ သူ့ ဂုတ်ပေါ်၌ ဆံစကလေးများ ဝဲနေသည်။ သူသည် အပူရုပ်ကို မပူရုပ်ဆင်ကာ သူ့ မျက်နှာကို ရွှင်လန်းအောင် ကြိုးစား၍ ပြုံးရယ်နေပုံမှာ စိတ်ထိခိုက်ဖွယ်ရာ ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ညနေ ခင်းများ၌ ဝင်လုဆည်းဆာ နေခြည်ဟပ်သဖြင့် သောကဝေနေလျက်နှင့် သူ့ မျက်နှာကလေးမှာ ဝင်းပ နေ တတ်ပြန်သည်။
ရထားကြီးသည်လည်း တံလျှပ်ထကာ အပူရှိ်န်ပြင်းထန်သည့် ကွင်းပြင်ကြီးထဲ၌ ဖြတ်သန်းနေရသည်။
သံလမ်းနှင့် မနီးမဝေးမှလိုက်ပါလာသည့် ယင်းချောင်း သဲပြင်ကျယ်ကြီးပေါ်၌ အပူရှိန်တံလျှပ်များသည် ကောင်းကင်သို့ တရှိတ်ရှိတ်တက်နေသည်။ နေဝင်တော့မည်ဆိုလျှင် တဖက်တောင်ကုန်းနိမ့်ကလေးများပေါ်ရှိ သစ်ပင်တောအုပ်ကလေးများမှာ ညှိုးယော်သွားနေသည်။ ချောင်းပြင်ပေါ်ရှိ ဆည်းဆာပန်းချီကားချပ်မှာ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ အရောင်လေးကြီးများဖြင့် မှိုင်းညစ်လာနေသည်။
“နေကြီး ဝင်တော့မှာ ကြည့်ရတာ စိတ်မောစရာကြီးနော်၊ နီနေလိုက်တာ စူးနေတာဘဲ၊ ရင်ထဲမှာကို လာပီး ပူနေတယ်၊ မောနေတာဘဲ”
သူက လှည့်မကြည့်ဘဲ ပြောနေတတ်သည်။
“မင်းကြည့်ရတာလဲ မောနေတာဘဲ” ဟူ၍ ကျနော်သည် သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ချင်သော်လည်း ငြိမ်သက် နေလိုက်သည်။
ရထားခုတ်မောင်းနေစဉ်၌ ပြတင်းဝမှ ဝင်လာသော လေထဲတွင်လည်း အပူငွေ့များပါနေကာ အေးချမ်းမှုကား ဘယ်နေရာတွင်မျှ မရှိနိုင်ဟု ထင်လာမိပြန်သည်။
“ဗေဒင်တွက်တတ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာနော်... ဘယ်နေ့မှာ ဘယ်က ဖမ်းမယ်၊ ဘယ်နေ့မှာ ဘယ်က ဖမ်း ဘူးဆိုတာ သိရင်သိပ်ကောင်းမှာ၊ အဲဒီလိုဆို သူများပစ္စည်းကို သူတို့ယူတာ ဘယ်ခံမလဲ၊ သူတို့ဖမ်းမယ့်နေ့ မှာ အိမ်မှာဇိမ်နဲ့ အိပ်နေလိုက်မှာပေါ့နော်”
သူသည် ကလေးလိုတွေးနေ၏။ ထိုအတွေးကြောင့် သူ့ မျက်နှာပေါ်မှ အားငယ်နေမှုများသည်ပင် လျော့သွား သည်ဟု ထင်နေရပြန်သည်။ အမှန်ကား ထိုစိတ်ကူးယဉ်အတွေးများမှာ တွေးပြီးလိုက်လျှင် ချက်ခြင်းငြိမ်းသေ သွား သည်။
အမှန်၌ ခုအချိန်တွင် စိတ်အေးချမ်းနေသူဟူ၍ မရှိနိုင်ပေ။
အလွန်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်သော ကိုရွှေယောက်ကြီးပင် အခါတိုင်းကလို ရယ်ရယ်မောမောမနေနိုင်။ ကိုရွှေယောက်ပင် ရထားပေါ်၌ ရံဖန်ရံခါသာ ပါလာတော့သည်။
ကိုရွှေယောက်၏သားတယောက်မှာ ဆဒ္ဒုံချောင်းဘူတာ၌ ထန်းလျက်အိပ်များကို မြင်းလှည်းပေါ်သို့တင်ရင်း မြွေကိုက်သေဆုံးသွားခဲ့ရသည်။ ခုအခါ၌ ရထားပေါ်တွင် ကိုရွှေယောက်၏ သားနှစ်ယောက်သာ လိုက်ပါနိုင်တော့သည်။
ကိုရွှေယောက်သည် ထန်းလျက်များကို မြင်ပင် မမြင်ချင်တော့ပေ။။
“မထူးပါဘူးဆရာရယ်၊ မကောင်းမှု လုပ်ရတာချင်းအတူတူ ဓါးပြတိုက်တာကောင်းပါတယ်” ဟု သူတွေးလာသည်။
သို့သော် သူသည် ဓါးပြလည်းတိုက်ရဲသူမဟုတ်၊ ထန်းလျက်မတင်၍လည်း မဖြစ်။ သူ၏ထန်းလျက် အဖမ်းမခံရအောင် တင်နေနိုင်သည့် မီးရထား အိမ်သာတခုမှ ခေါင်းမိုးပေါက်က်ိုလည်း မစွန့်ပစ်နိုင်။
သူသည် သူ့သားနှင့် သွားခဲ့ လာခဲ့ ပြေးခဲ့ လွှားခဲ့သည့် နေရာများကို မကြည့်မြင်ချင်။ ညနေတိုင်ရောက်လာပြီး နေရောင်မှိန်လာလျှင် သူ့ သား မြွေကိုက်ခံရသည်ကို သတိရလာကာ သူ့ မျက်နှာ တပြင်လုံးမှာ နီမြန်းလာတော့သည်။ ထို အချိန်၌ သူသည် မည်သူ့ ကိုမျှ စကားမပြောတော့ပေ။
ကိုရွှေယောက်၏ အဖေါ်တဦးဖြစ်သည့် ကိုထွန်းခင်သည်လည်း ရထားကြီးကို စွန့်ပစ်ထွက်ခွါပြေးရလေသည်။
ကိုထွန်းခင်သည် ထန်းလျက်များ အကြိမ်ကြိမ် အဖမ်းခံရသဖြင့် ကြွေးများ လည်ပင်းအထိနစ်နေသည်။ သူသည် နောက်ဆုံးအခေါက်က ဆတ်သွားမြို့မှ မျှင်ငါးပိတပုံး အကြွေးယူပြီး တင်လာခဲ့သည်။ သူ့ တွင် ကြွေးထူလှသဖြင့် သူသည် ထိုငါးပိပုံးကိုလည်းကောင်း၊ ရဲသားများကို အသိမပေးတော့ပေ။
ထိုသို့အသိမပေးသည်ကို ရဲသားတဦးက သူတို့ကို မထီလေးစားလုပ်သည်၊ သူတို့အဏာကိုဖီဆန်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး ငါးပိပုံးကို ပင်ချောင်းဘူတာ၌ ဖမ်းအပ်လိုက်တော့သည်။
ပင်းချောင်းမှ ရထားကြီး ထွက်ခွာလာခဲ့သောအခါ ကိုထွန်းခင်သည် ယောကျာ်းကြီးတန်မဲ့နှင့်ကြူကြူချ ငိုခဲ့ရသည်။
“ကျနော် ရိုင်းတဲ့လူ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ... အမြဲတန်း ပေးသင့်တာ ပေးနေတာပါ၊ ခု တခေါက်သာ ပိုက်ဆံမ ပေးမိတာပါ၊ ကျနော့်ကို ဒါလောက် မရက်စက်ဖူးလို့လဲ ထင်လုိ့ပါ” ဟု သူသည် ဖမ်းဆီးသူ ရဲသားရှေ့၌ တတွတ်တွတ် ပြောငိုသည်။
ရဲသားသည်လည်း ခရီးလွန်ပြီးဖြစ်သဖြင့် ဘာမျှ မတတ်နိုင်တော့ပေ။ ရဲသားမှာ စိတ် မကောင်းလည်း ဖြစ်နေစဉ်... သူ့ စိတ်ထဲမှ “နောက်ကို ကျုပ်တို့ကို ဖုတ်လေတဲ့ငပိ လုပ်ရဲသေးလား” ဟု ရင်ကော့ကာ မေးမြန်း နေသည်။
အတာစန်းကုန်းတွင် ရထားဆိုက်ရပ်လိုက်လျှင် ကိုထွန်းခင်ကြီးသည် မျက်ရည်သုတ်ပြီး ရထားပေါ်မှ ဆင်းသွားတော့သည်။
သူသည် အတာစန်းကုန်း ထန်းလျက်တဲ ဘူတာကလေးသို့ ခြေထော့ကျိုးဖြင့် လျှောက်သွားနေသည်။ သူသည် ကိုယ်ရေပြားရောဂါသည်ဖြစ်၍ ခြေထောက်တဖက် မကောင်းတော့ပေ။ ကင်းပတ်ရှူး အနီကို စီးထားသည်။
ရထားကြီး ထွက်လာခဲ့သောအခါ ဤကိုယ်ရေပြားရောဂါသည် မှောင်ခိုသမား ဒုက္ခိတ၏ ထော့ကျိုးတော့ကျိုး လျှောက်သွားနေဟန်မှာ ဝေးသည်ထက် ဝေးလာသည်။ နောက်ဆုံး အမဲစက်ကလေးအဖြစ်မှ ပျောက်ကွယ်သွားလေသည်။
ထိုအခါမှစ၍ ကိုထွန်းခင် ရထားပေါ်၌ မမြင်တွေ့နိုင်တော့။
မညွန့်ရီကြီးကိုပင် ရထားပေါ်၌ မှန်မှန် မမြင်တွေ့ရတော့ပေ။
“မတတ်နိုင်ဘူး၊ ကိုရင်မောင်၊ လုပ်စားလဲ မိုးခေါင်၊ ခိုးစားလဲ ခွေးဟောင် မှုတ်လား၊ မအေးမြင့်တို့ မအေးရွှေတို့လို ဘိန်းကုန်ကူးနေတာဘဲ ကောင်းမယ်၊ ဘိန်းကမှ အန္တရာယ်ကင်းသေးတယ်၊ ကျမလဲ ရှမ်းပြည်ဖက် သွားဘို့ စိတ်ကူးနေဘီ”
ညနေခင်းများတွင် ကျနော်သည် ညိုညို့နံဘေးတွင် ထိုင်ရင်း သူ့ အတွက် လမ်းစများကို ရှာဖွေကြည့်နေမိသည်။
လမ်းစများ အားလုံးမှာ ပျောက်ကွယ်နေကြပြီ။ မျှော်လင့်ချက် ဟူ၍လည်း ဘယ်မှာမှ မမြင်နိုင်။ စိတ်များသည် အလိုလို မောလာမိ၏။ သူသည် သူ့မိသားစု၏ စားဝတ် နေရေးကို ဖြေရှင်းရင်း ဖါဖြစ်သွားလျှင်လည်း ထိုအတွက် အပြစ်တင်နိုင်စရာ မရှိ။
ကျနော်သည် ခု ချက်ခြင်း သူ့ ကို လက်ထပ်ပစ်ရန်လည်း တွေးကြည့်သည်။ သူ့ အိမ်ထောင် မိသားစုနှင့် ကျနော့် မိဖများ အိမ်ထောင်စု နှစ်ခု တာဝန်ကို ခု အချိန် ကုန်ဈေးနှုန်းများ မိုးထိမြင့်တတ်နေဆဲ၌ ကျနော် မည်သို့မျှ တာဝန်ယူနိုင်မည်မဟုတ်။ ထိုအတွေးမှာ မဖြစ်နိုင်သော စိတ်ကူးယဉ် အတွေးအဖြစ်ဖြင့် သူ့ဖာသာ ပျောက် ပျက် သွားနေသည်။
နောက်တော့ မွန်းကျပ်လွန်းနေချိန်၌ သူ့ အတွက် အသက်ရှုပေါက်ကလေး တခုတလေကို အခွင့်အရေးရလျှင် ရသလို ဖွင့်ပေးရန်သာ တွေးလာရသည်။
ကျနော်သည် ထန်းလျက်များကို ခရမ်းချဉ်သီးများ ဖုံးကာ ခရမ်းချဉ်သေတ္တာ အယောင်ဆောင်ပြီး တင်ပေးရန် တွေးလာမိသည်။
အင်တောကျယ်မှ ခရမ်းချဉ် သေတ္တာများ တင်လေ့ရှိသည်။ အင်တောကျယ်မှာ ကျနော် တန်ဆာလုပ်ပေးရသည့် ကျနော်ပိုင်ဘူတာလည်းဖြစ်သည်။ တန်ဆာကို အခြားသူ တဦးဦးကို လုပ်ခိုင်းပြီး ကျနော်ပိုင်သည့် ဆဒ္ဒုံချောင်း ဘူတာတွင် ချယူလျှင် အန္တရာယ်လည်း မရှိနိုင်။ သည်ကြားထဲ ရှာဖွေရေးများသည်လည်း တန်ဆာလုပ်သည့် ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးလေ့မရှိ။ အကယ်၍ စစ်ဆေးလျှင်လည်း ကျနော်မသိကြောင်း ငြင်းကွယ်၍ ရနိုင်သည်။ တန်ဆာလုပ်ရာ၌ အချိန်တိုကလေး အတွင်းတွင်မည်မျှ အားလုံးကို စစ်ဆေးနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
တညနေ၌ ကျနော်သည် သူ့ ကို ထိုအစီစဉ် အတိုင်း ပြုလုပ်ရန် ပြောခဲ့သည်။
သူသည် ကျနော်ပြောသမျှကို နားထောင်ရင်း ခေါင်းကိုသာ တွင်တွင် ခါနေသည်။
သူသည် ရထားတွဲထောင့်ဖက်တွင် ကျနော့်လက်ကို သူ၏ ချွေးစေးထန်းနေသည့် လက်များဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ထားသည်။ သူ့ မျက်လုံးများဖြင့် ကျနော့် တကိုယ်လုံးကို ထွင်းဖေါက်ကြည့်နေသည်။ မျက်လုံးအိမ်များထဲ၌ မျက်ရည်များ ပြည့်လာနေသည်။ သူ့ စိတ်၌ နာကျင်စူးရှနေသည့် ခံစားရမူများသည် အကြောအမျှင်များအတိုင်း စီးဆင်းလာသည်။ သူ့ လက်ချောင်းကလေးများမှ တဆင့် ကျနော့် စိတ်နှလုံးပြင်ပေါ်သို့ ဆင်းသက်လာနေသည်။
“ဟင်အင်း.... ဟင်အင်း... အဲတာတော့ မလုပ်ဖူး၊ သူ့ ကို ထိခိုက်မှာပေါ့၊ သူ အလုပ်ပြုတ်သွားရင် သူများကိုသူများ သတ်သေမှာ”
သူသည် ကတုန်ကယင်ဖြင့် ပြောနေသည်။
“မပြုတ်ပါဘူး၊ မင်း ရဲတွေကိုသာ ပိုက်ဆံပေးထား၊ သူတို့လဲ တာဝန်ရှိတာဘဲ၊ဖြစ်လာရင် သူတို့က ကိုယ့်ကိုလွှဲချ၊ ကိုယ်က သူတို့ကို လွှဲချ၊ ဘယ်လိုရှောင်ရမယ်ဆိုတာ ကို သိပါတယ်၊ မင်းအမေ နေမကောင်းဘူး မှုတ်လား၊ သင်းသင်းက ပြောတယ်၊ မင်း ကို့ ကို ဖွင့်မပြောပေမယ့် ကို သိပါတယ်၊ ခု တော့ ဒီနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းရုံဘဲ၊ ဒီရက်တွေမယ် ထန်းလျက်တင်တဲ့ လူတွေလဲ ပါးနေတယ် မှုတ်လား၊ လသာတုန်း ဗိုင်းငင့်ပေါ့ကွယ်၊ ဒီ တခါတော့ များများ စားစား လုပ်ပလိုက်၊ ထန်းလျက် လေးရာလောက်တင်ပလိုက်။ ဒီလို လုပ်ရတာဘဲ၊ ကြွေတလက် ကြက်တခုန်ပေါ့၊ မင်းမှာ အရင်းအနှီး မရှိတော့ဘူး မှုတ်လား”
သူသည် အချိန်များစွာ ကြာအောင် ငိုင်နေသည်။ ကျနော်သည် ထပ်ပြန်တလဲလဲ တိုက်တွန်းနေ၏။ ယာယီလွတ်မြှောက်ခွင့် ရရန် သူ့ တွင် ထိုနည်းလမ်းမှတပါး မရှိ။ ကျနော့် လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားသည့် သူ့ လက်ချောင်းကလေးများမှာ တစတစ ခွန်အားကုန်ခမ်းကာ ပြေလျှော့လိုက်လာနေသည်။
ဆဒ္ဒုံချောင်းနား နီးလာလျှင် အမှောင်ရိပ်များ ဆိုင်းလာသည်။ အရာဝတ္ထု အပေါင်း၏ ရုပ်ပုံဖေါ် ကောက်ကြောင်းများမှာ အမှောင်ထုကြီး ဖြစ်လာပေပြီ။ ဤ အမှောင်ကား အသက်ရှူပေါက် ကလေးပင် မရှိတော့အောင် ပိတ်သည်းနေသည့် အမှောင်။ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ အမှောင်။ မကောင်းဆိုးရွားများ စားမည်တကဲကဲပြုကာ ကြိမ်းဝါး ခြိမ်းချောက်သံကြီးများသာလျှင် အဆက်မပြတ် မြည်ဟိန်းနေသော အမှောင်။
ကျနော်သည် သူ့ လက်ကလေးကို ဆုပ်ကိုင်ရင်း ထပ်၍ တိုက်တွန်းနေသည်။
သူသည် အမှောင်ထဲ၌ သက်ပြင်း တချက် ညည်းတွားလေသည်။
“အရင်းအနှီးတော့ သေသေ ချာချာ ပြောပြရင် အကြွေးပေးကြမယ့် လူတွေရှိပါတယ်”
ထိုစကားများကို ပြောနေစဉ်တွင် သူ့ စကားသံ တိုးတိုးမှာ တုန်ယင်အက်ကွဲနေခဲ့သည်။်
မကြာမီ တရက်တွင် ထိုအစီစဉ်အတိုင်း လုပ်ဖြစ်သည်။
သူသည် ထန်းလျက်သေတ္တာများကို ခရမ်းချဉ်သေတ္တာအဖြစ် အင်တောကျယ်မှ မိန်းမတဦးကို တန်ဆာ လုပ်ခိုင်း ထားသည်။
သူ ကိုယ်တိုင်မှာ အမြန်ရထားဖြင့် ရှေ့မှ ကြိုတင် ပြေးနှင့်သည်။်
လမ်းတလျှောက်လုံးတွင် ကျနော်နှင့် တကွ ရဲသားများထိတ်လန့် လာခဲ့ကြသော်လည်း ပင်းချောင်းကို ကျော်လွန်လာခဲ့သည်။ အခြား ဘူတာများမှလည်း အစစ်အဆေး မရှိ လွတ်မြောက်လာသည်။ နတ်မောက်ကို လွန်လာခဲ့လျှင် စိုးရိမ်ရန် မရှိတေ့ာပေ။
မြို့သစ်မှ လွတ်မြောက်လာခဲ့လျှင် ရင်ထဲ၌ ရှင်းလင်း ပေါ့ပါးနေကာ ကျနော်သည် လူစီးတွဲတတွဲ၏ တွဲဝတွင် ရပ်ရင်း သူ့ ကို ချက်ခြင်း မြင်တွေ့ချင်လာသည်။
မြို့လုင်၌ သူသည် ဦးကောင်းဇုံ ဆိုင်ရှေ့တွင် အသင့်စောင့်နေသည်။ ရထားရပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက် ကျနော်ရှိရာသို့ ပြေးလာသည်။
ရထား ထွက်လာသော အခါ သူနှင့် ကျနော်သည် တွဲဝအမှောင်ရိပ်ထဲ၌ အတူ ယှဉ်ရပ်လာခဲ့ကြသည်။
သူသည် အေးတိအေးစက် လုပ်နေသည့် ကျနော့် ကို လက်မောင်း အတင်းဆွဲလှုပ်ရင်း ကတုန်ကယင် ဖြင့် မေးလာခဲ့သည်။
မှောင်ရီ ဆိုင်းစ၌ မြို့လုင်မှာ အေးငြိမ်းနေသည်။ အလင်းရောင် အကြွင်းအကျန်များသည် ဟိုသည် ကွက်ကြား ထွန်းနေသည်။ ချက်ခြင်းပင် မြို့လုင်သည် အဝေး၌ ငြိမ်သက် နေရစ်ခဲ့သည်။
ကျနော်သည် လွတ်လပ်သော ဤရထားတွဲဝ၌ သူ့ ကျောပေါ်သို့ လက်ကို အသာအယာတင်လိုက်သည်။ သူ့ မျက်နှာကလေးကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေသည်။ ကျနော်သည် မပြုံးမိရန် စိတ်တင်းထားသည်။ မရတော့ပေ။ သူကလည်း ငြိမ်သက်ပြီး ကျနော့် ကို ပြန်ကြည့်နေသည်။ သူ့ ပခုံးပေါ်မှ တဘက်စ တခုမှာ မိုမောက်နေသည့် သူ့ ရင်သားညွန့် ပေါ်တွင် ဝဲကျနေသည်။
“သေတ္တာတွေ ပါခဲ့သေးရဲ့လား၊ ရင်ထဲပူနေတာဘဲ၊ အေးတိအေးစက် လုပ်မနေစမ်းပါနဲ့”
ကျနော်သည် သူ့ ကို စကားမပြောဘဲနေကာ နောက်ပြောင်နေသည်။ သူသည် ကျနော့် လက်မောင်း ကြွက်သားများကို အားမလို အားမရဖြစ်ပြီး လိန်ဆွဲနေသည်။်
အတော်ကြာမှ “ရင်မောင်တို့ လုပ်ရင် ပိရိပါတယ်” ဟု ကျနော်သည် နှုတ်ခမ်းမဲ့ကာ ရုပ်ရှင် လူကြမ်းဟန်ဖြင့် ပြောဆိုရယ်မောလာခဲ့သည်။
“မောနေတာဘဲ၊ ရှာတွေ့ကုန်ရင် သူ အလုပ်ပြုတ်သွားမှာ၊ နောက်တော့ ဒါမျိုး မလုပ်တော့ဘူး၊ အမြန် ရထားနဲ့ တုန်းက သူများ ရင်လေးလိုက်တာ၊ သူများ ရင်လေးလာရင် တခုခု ဖြစ်မယ်ဘဲ ထင်တာ၊ နိမိတ်ကလဲ မကောင်းဘူး၊ မျက်ရည်ခံတွေ တဆတ်ဆတ်လှုပ်နေတာ၊ အဲတာ အိမ်သာထဲဝင်ပြီး ငိုရတယ်”
သူ့ အသံသည်လည်း တုန်ယင်နေသည်။
ဆဒ္ဒုံချောင်း၌ သူသည် အသင့်စောင့်ကြိုနေကြသူများဖြင့် သေတ္တများကို ချယူကာ ဆင်းနေရစ်ခဲ့သည်။
ကျနော်သည် လူစီး တွဲဝအမှောင်ထဲတွင် တယောက်တည်း ရပ်မြဲ ရပ်လာခဲ့သည်။
ခု တခဏအတွက်ကား သူ့ ကို ကျနော် ကူညီနိုင်ပြီ။ နောင် အရှည်အတွက်မူ ရင်၌ လေးလံ ပင်ပမ်းနေရဆဲပင်။
ကျနော်သည် မိမိကိုယ်ကို အပေါ်ယံသာ ကြည့်ရှုသူ... ပေါ့ပေ့ါဆဆမျှသာ ခံစားတတ်သူ၊ အစိုးရိမ် သောက မရှိသူ ဖြစ်ချင်လာသည်။
ဘာကြောင့် နောင် အရှည်အဝေးအတွက် တွေးနေရသလဲ။
ဘာကြောင့် မရေရာသော အရာများကို အမှောင်ထဲ၌ ကြိုးစားရှာဖွေနေသူ ဖြစ်နေရသလဲ။
နွေ၏ နောက်ဖက် အစွန်ပိုင်း ရက်များ၌ မှောင်ခိုသူများ အတွက် အသက်ရှူပေါက်များ တကြိမ် ရလာကြပြန်သည်။
ပင်းချောင်း ရှာဖွေရေးများ၊ တောင်တွင်းကြီး ရှာဖွေရေးများသည် အနာရောဂါဆိုးတခု ခဏမျှ မြုံနေသလို ငြိမ်သက်နေပြန်သည်။
မညွန့်ရီ၊ မအေးသွယ်၊ သင်းသင်း၊ နုနု၊ မခင်သိန်း၊ မခင်လှ၊ မအေးမြင့်၊ ကိုအောင်စ်ိန်၊ ကိုစိုးမောင် စသူများ တကြော့ပြန်လိုက်လာကြသည်။
“အတင်း မွေးတဲ့ ခလေးကတော် ကိုရင်မောင်ကြီးနဲ့ တရုပ်ထဲ၊ ကိုရင်မောင်ကြီးလို နှာခေါင်းချွန်းချွန်းနဲ့၊ ပါးချိုင့် ကလေးနဲ့၊ နဖူးကလဲ မောက်မောက်၊ အရပ်ကလဲ မြင့်မြင့်၊ ခါးကလဲ ကုန်းနေသေးတယ်”
မအေးသွယ် နောက်ပြောင်သည် ကို အားလုံး ဝိုင်းဝန်းရယ်မောလာကြပြန်သည်။
ဤရက်များအတွင်း၌ ကျနော်သည် ကျောက်ပန်းတောင်းဈေးသို့လည်း ညိုညို ထန်းလျက်ဝယ်သည့် နေရာများသို့ လိုက်ပါသွားသည်။
တခါတရံ၌ ကျနော်သည် သူ့ ကိုချိန်းဆိုထားပြီး ကျောက်ပန်းတောင်း ဘူတာရုံ နောက်ကြောဖက်ရှိ ကျောက်တောင်ကြောပေါ်မှ သုံးဆူတန်း စေတီကုန်းမြင့်ပေါ်တွင် သူ့ ကိုစောင့်နေသည်။ ထိုနေ့တွင် သူသည် ဈေးသို့ ကမန်း ကတမ်း သွားပြီး ကျနော်ချိန်းရာသို့ ရောက်လာသည်။
သူသည် ကုန်းမြင့်ပေါ်သို့ မတ်မတ်ရပ် လှေကားမြင့်ကြီးအတိုင်း စွန့်စားတက်ရောက်နေရစဉ်၌ အသဲတထိတ်ထိတ် ရင်တဖိုဖိုဖြင့် ကြောက်ရွံ့နေသည်။ အပေါ်သို့ ရောက်လျှင် ကျနော်ရပ်နေရာ ဇရပ်အတွင်းသို့ ပြေးဝင်လာသည်။
ကျနော်သည် သူ့ ကို ငေးကြည့်ရင်း ပြုံးရုံသာ ပြုံးနေခဲ့သည်။ သူကမူ ဤ လွတ်လပ်ကာ လူသူကင်းပြတ်သည့် နေရာ၌ သူ့ကို အငမ်းမရ ပွေ့ဖက်ဖျစ်ညစ်မည်ထင်ကာ ရင်ဖိုနေသည်။ သူ့ မျက်နှာမှာ ရှက်သွေးကြွနေပြန်သည်။
ကျနော်သည် သူ့ကို ပွေ့ဖက်လိုသည့် စိတ်များကို ချုပ်တည်းကာ သူနှင့်အတူ ဘုရားဝတ်ပြုသည်။ ဝတ်ပြုစဉ်၌သူသည် အသံမထွက်ဘဲ တတွက်တွက် နှုတ်ခမ်းလှုပ် ရွတ်ဆိုသည်။
သူ ဘာဆုတောင်းသည်ကို ကျနော်သည် မမေး။
ဘုရားဝတ်ပြုပြီးလျှင် သူနှင့် ကျနော်သည် ကျောက်တောင်စွန်း၌ ဘေးချင်း ယှဉ်ရပ်ကာ ငြိမ်သက်နေကြသည်။ သူ စကားပြောမည်ပြုလျှင် ကျနော်သည် လက်ကာ ပြထားလိုက်သည်။ သူသည်လည်း ကျနော်၏ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နေစေလိုသည့် ဆန္ဒကို သဘောပေါက်လာသည်။ ကျနော့် နံဘေး၌ မလှုပ်မရှက်ငြိမ်သက် ရပ်နေသည်။
ဤ ကျောက်တောင်ကုန်းထိပ်မှာ ငြိမ်သက်အေးငြိမ်းနေသည်။တောင်ခိုးများ ဝေ့လာသည်၊ လေများတိုးဝှေ့ လာသည်။ အောက်ဖက်ရှိ ကမ္မဌာန်းကျောင်းတိုက်များသည်လည်း ငြိမ်သက်နေသည်။ ဟိုဖက် တောင်စဉ် တောင်တန်းများပေါ်ရှိ ရွှေတောင်ဦး၊ လွမ်းစေတီ၊ အခြား စေတီတော်များမှ ဆွဲလဲသံများ ပျံ့လွင့်လာသည်။ အခြားတောင်ကုန်းများသည် ဤ ကျောက်တောင်ကုန်းအောက်၌ ငြိမ်သက်နေသည်။ အဝေးရှိ ပုပားတောင်မကြီးမှ မြူခိုးများ ဝေ့လာနေသည်။ ကျောက်ပန်းတောင်း တမြို့လုံးကို စီးမြင်နေရသည်။
သူသည် ကျနော့် ရင်ခွင်အတွင်းသို့ လှဲမှီလိုသဖြင့် သူ့ ပခုံးကို ကျနော့် ဖက်သို့ ညွတ်ကိုင်းသည်။
ကျနော်သည် မသိမသာ နောက်ဆုတ်ကာ သူ့ ကိုလက်ကာပြလိုက်ပြန်သည်။
သူသည် ကျနော့် ကို ရိုက်နှက်ပစ်လိုသော်လည်း သည်းခံနေရပုံမျိုးဖြင့် ငြိမ်သက်နေသည်။ အတော်ကြာလျှင် သူသည် “ဘာမှ ပြောစရာမရှိဘူး မှုတ်လား” ဟု ခပ်တိုးတိုးမေးသည်။
ကျနော်သည် ခေါင်းကိုသာ ယမ်းပြလိုက်၏။
သူသည် ကျနော့်ကို နှုတ်မဆက်ဘဲ ဆင်းသွားလေသည်။ နောက်ပိုင်းရက်များတွင် ဤ သုံးဆူတန်းစေတီ ကျောက်တောင်ကုန်းထိပ်၌ နှစ်ယောက် တွေ့ဆုံကြလျှင် သူသည်လည်း စကားမပြောရန်၊ အတတ်နိုင်ဆုံး တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်စွာ နေရန် အကျင့်ရလာသည်။ ကျနော့် ကို နားလည်လာသည်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ကျနော့် လိုပင် ငြိမ်သက်သော၊ သိမ်မွေ့ အေးငြိမ်းသော ကြည်နူးမှုကို ခံစားတတ်လာသည်။
ဤကဲ့သို့ ချစ်သူ နှစ်ဦး လွတ်လပ် တိတ်ဆိတ်သည့် နေရာ၌ တွေ့ဆုံပြီး စကားမပြောဘဲ ဘုရားအတူဝတ်ပြု၊ အတူရပ်ကာ၊ က္ကုနြေ္ဒကြီးမားစွာ နေရသည်ကို သူ နှစ်သက်လာသည်။
ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် ဤ ကုန်းတော်ပေါ်၌ နေရချိန်များနှင့် ရထားပေါ်တွင် နေရချိန်များမှာ ငရဲနှင့် နိဗ္ဗာန်လိုခြားနားပေသည်။
ရထားပေါ်သို့ ပြန်ရောက်လျှင် ဆူညံရှုပ်ပွေမှုများဖြင့်သာ ရောထွေးနေတော့သည်။ မညွန့်ရီ၏ ထန်းလျက် တောင်းများ လူအလိမ်ခံလိုက်ရသည်ဆိုသော အသံမျိုးကို မကြား၍ မရ။ ဘယ်မိန်းကလေးကို ဘယ်သူတွေက ဖျက်ဆီးလိုက်ပြန်ပြီဆိုသော စကားကို မကြား၍ မရ။ မကြင်ယုံတယောက် ငရုတ်သီးများနှင့်မိသဖြင့်၊ သူ့ အဖော်များကို မဖော်ဘဲ အနစ်နာခံလိုက်သဖြင့်အမှုဖြစ် ထောင်ကျသွားပြီ ဆိုသည့် သတင်းကို မကြား၍ မရ။ ပင်းချောင်းတွင် ယခင်ဖမ်းဆီးနေသောရဲများ ပြန်လာကြပြန်ပြီဟူသော သတင်းကို မကြား၍ မရ။
ဤ အဖြစ်အပျက်များမှာ ရေလှိုင်းလို နိမ့်လိုက် မြင့်လိုက်ဖြင့် မတည်ငြိမ်နိုင်ပေ။
သည်တကြိမ်၌ ပင်းချောင်းရှာဖွေရေးများ၏ ရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုသည် ပို၍ တင်းကျပ်ပြင်းထန်လာသည်။ ထန်းလျက် တပိဿာအထုပ်ကလေးများပင် မချန်။ မှောင်ခိုသမားများ၏ အသံများမှာလည်း ကျယ်ရာမှ တိုးသက် သွားကြသည်။ ပင်းချောင်းရဲများသည် ပိုင်ရှင်များ မမိသဖြင့် ပ်ို၍ ဒေါသဖြစ်လာကြသည်။
သူတောင်းစားကြီး ပခုံးမှ ထန်းလျက်ထုပ်ကို ဆွဲယူလိုက်ပြီး မျက်မမြင် သူတောင်းစားကြီးကို ဘယ်ကဲ့သို့ အရေးယူရမည်မသိ ဖြစ်သဖြင့် ပို၍ဒေါပွနေသည်။
သူသည် သူ တောင်းစားကြီး၏ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သနေသည့် ပါးစပ်ကို လိုက်၍ ပိတ်လိုက်ချင်ပုံရနေသည်။
သူတောင်းစားသည်လည်း ရှာဖွေဖမ်းဆီးရေးများ ကြား၌ သူ့ ပခုံးမှ ထန်းလျက်ထုပ်ဆွဲယူလိုက်သည်ကို ဂရုမပြုဘဲ ဆက်လက်၍ တောင်းရမ်းသွားသံမှာ ရဲသားကို အရွဲ့တိုက်နေသလိုဖြစ်နေပြန်သည်။
“သနား ကြပါခင်ဗျ၊ သနားကြပါခင်ဗျ၊ ကျုပ်ဟာ ဟိုတုန်းက နတ်မောက်ဘူတာက ကူလီအလုပ်သမားကြီး မြဒင်ပါဗျ၊ သူတောင်းစားမျိုး မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘဝကအကြောင်း မကောင်းတော့ မျက်စိနှစ်ကွင်း အလင်းကွယ်ပျောက်လို့ ဟောဒီ မြေးကလေးတယောက်နဲ့ ရွာစဉ်ရှောက် တောင်းစားနေရပါတယ်ခင်ဗျ”
နောက်ပိုင်းရက်များတွင် ပင်းချောင်း၌ ဆိုက်ရပ်လျှင် ဤအသံများဖြင့် ဆူပွတ်လာသည်။
ပင်းချောင်း ရဲများသည် ပိုင်ရှင်ဖော်ထုတ်ရန်လည်း ကြိုးပမ်းလာသည်။
ဖြူစောထီး ဘဝမှ စုတေလာခဲ့သော ရဲသားသည် ခုံတခုံအောက်မှ တပိဿာခန့် ထန်းလျက်ထုတ်ကို ဆွဲယူလိုက်ပြီး မျက်နှာထားဖြင့် တရားခံရှာတတ်လာသည်။
ညိုညိုသည် ခါးကော့၍ ကိုယ်ကိုမတ်လိုက်သည်။
သူ့ မျက်နှာမှာ နီမြန်းနေသော်လည်း သူသည် က္ကုနြေ္ဒမပျက် စေရန် စိတ်တင်းထားသည်။
“မဟုတ်ဖူး” ဟု သံပြတ်နှင့်ဖြေလိုက်သည်။
“အေး.... အမြဲတမ်း နင်တို့ မျက်နှာတွေချည့် မြင်မြင်နေရတာ တရားခံရှာမရဘူး၊ နင်တို့ တီဘီစီပါ ဖမ်းပလိုက်မယ် သိလား၊ ခု နင်တို့ကို ငါ ဖမ်းနိုင်တယ်”
“တယ်... ငါလေ.... ဟေ့....ဒီထုပ်တွေ အောက်ချကွာ၊ ထန်းညက် တလုံးတွေ့ရင် တလုံးကိုဖမ်း၊ ဒီမှောင်ခိုတွေ အမြစ်ကို မပြုတ်ဖူး၊ ခပ်ကြမ်းကြမ်း လုပ်ရ ရမယ့်ဟာတွေ”
ဤ အသံများကြားထဲတွင် သူတောင်းစားအိုကြီး၏ “ ကျန်းမာကြပါစေ...ချမ်းသာကြပါစေ... သတ္တဝါအများ ကိုယ် စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြပါစေ” ဟု ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သသံသည်လည်း ရောထွေးနေသည်။
ရထားကြီး ထွက်ခွာလာခဲ့သော အခါ၌ကား ဤအသံအပေါင်းသည် နောက်၌ ကျန်နေရစ်ခဲ့၏။
ရထားကြီးပေါ်တွင် မည်သူမျှ စကားမပြောကြဘဲ ငြိမ်သက်လာနေခဲ့သည်။ ရထားခုတ်မောင်းနေသံသာလျှင် ဆူညံနေသည်။ မည်သူမျှ စကားမပြောချင်ကြတော့။ သူတို့ ပြောနေကျစကားများမှာ အပ်ကြောင်းထပ်နေပြီဖြစ်သဖြင့် ဤ ညည်းညူသံများကို သူတို့ကိုယ်တိုင် မည်သူ့ ထံကမှ မကြားချင်တော့ပေ။
ထိုညနေက လူအများက ညိုညို့ ကို မှောင်ခိုသမကလေး အဖြစ်ဖြင့် သိနေကြပြီကို တွေးလာမိကာ ကျနော်သည် သူ့ အတွက် ပို၍ စိုးရိမ်သောက ဖြစ်လာခဲ့၏။ သူသည်လည်း သူ့ ကို ရဲသားတဦးက စွပ်စွဲလိုက်သည်ကိုသာ တွေးလာခဲ့သည်။ သူ့ နောက်မှ သူ့ အရိပ်သည် ထက်ကြပ်မကွာ ပြေးလိုက် လာနေသည်ကို မကြောက်ရံွ့၍ မဖြစ်တော့။
တညနေခင်းလုံးလုံး သူ့ အနား၌ ထိုင်ကာ စာရင်းများ လုပ်လာခဲ့သော်လည်း ကျနော်သည် သူ့ ကို စကား တလုံးမျှ မပြောမိ။
ဤကဲ့သို့ ရထားတစင်းလုံး အဖမ်းအဆီး ခံရစဉ်တွင် လွတ်မြောက် ကျန်ရစ်ခဲ့သူမှာ ကိုရွှေယောက်နှင့် သူ့ သား နှစ်ယောက်သာ ဖြစ်လေသည်။
မြို့သစ်မှ ရထား ထွက်ခွာလာခဲ့လျှင် ကိုရွှေယောက်သည် လဖက်ရည်ဘိုး ပေးရန် ကျနော်ရှိရာသို့ ရောက်လာပြန်သည်။ ကျနော် ငြင်းဆန်သော်လည်း သူသည် ဆယ်တန်တရွက်ကို အတင်းအကျပ် ပေးနေပြန်သည်။်
သူက ညိုညို့ ကို အားပေးလေသည်။
သူသည် နေရာမှမခွါသေးပဲ ရပ်နေသည်ကို ကျနော်သည်လည်း မသိနိုင်။
မြို့ လုင်ကို ကျော်လွန်လာသည်အထိ သူသည် မခွါသေး။
“သွားတော့လေ ကိုရွှေယောက်↔ဟု ကျနော်ပြောသော်လည်း သူသည် ငြိမ်နေခဲ့၏။
နောက်ဆုံး၌ သူသည် ကျနော်နှင့် ညိုညိုကို ဤရထားပေါ်ရှိ အိမ်သာတတွဲတွင်ပါသည့် ခေါင်မိုးမှ အပေါက်အကြောင်းကို ဖွင့်ပြောလေသည်။ ဤကိစ္စမှာ သူ့ အသက်နှင့်ထပ်တူ စေါင့်ထိမ်းထားရမည့် အရာဖြစ်သည်ကို ကျနော်လည်း ခံစားရသည်။
“ဒါကြောင့် အဲဒီအိမ်သာပါတဲ့ရထားနဲ့ ကိုက်ပီး ကျနော် နှစ်ရက်မှ တပတ်လိုက်တာ↔
သူက လျှို့ ဝှက်ပြီး အသံတုန်တုန်ဖြင့် ပြောနေသည်။
“အဲဒီအပေါက်က ငါးဆယ်ဆန့် တယ်၊ကျနော်နှစ်ဆယ်၊ ကျနော့်သားသုံးယောက်ရှိတုန်းက သူတို့ ကသုံးဆယ်၊ခြေနိုင်လက်နိုင် ပြေးလွှားကောင်းရုံပေါ့ဆရာ၊ ခုတော့ ကျနော့်သားကြီးလည်း မရှိတော့ဘူး၊ အဲဒီမှာ မိညိုတဆယ်တင် ↔
သူသည် စကားပြောနေရင်း အသံတွေတုန်လာသည်။ သူ့ သားကြီးကို သတိရလာသည်။
သူ နေရာမှ ထသွားသည်အထိ ကျနော်လည်း သူ့ ကို စကားပြန်မပြော မိ။ ညိုညိုသည်လည်း သူ့ ကို ကျေးဇူးတင်သည်ဟု ပြန်မပြောလိုက်။ သူသည် နေရာမှ ငြိမ်သက်စွာထွက်ခွါသွားသည်။
အတန်ကြာသည်အထိ ကျနော်သည် ငြိမ်သက်နေမိ၏။ ဘဝတူလူသားချင်းအပေါ်၌ထားရမည်ဟု အသိမရှိဘဲ သူ့ အလိုလို နှလုံးသားမှ ပေါက်ဖွားလာခဲ့သည့် ထိုမေတ္တာတရားမှာ နက်ရှိုင်းလှသည်ဟု ခံစားနေရပြန်သည်။
အခန်း (၁၃)သို့ ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန်...
Posted by ငြိမ်းဝေ at 6:32 PM No comments: Links to this post
လွန်ခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်မတိုင်မီ ရက်ထဲမှာ
ကဗျာဆရာ (ကို)ခင်အောင်အေးဆီက စာတစ်စေါင်(သူကတော့ ဒါကို စာတစေါင်ပါလို့ ပြောတာပဲ၊ ကျနော်ကတော့ ကဗျာတပုဒ်အဖြစ်ခံစားမိလို့ ) အီးမေးလ်နဲ့ ရောက်လာလို့ဘယ်ကိုလွမ်းရမှန်းမသိတဲ့အလွမ်းတွေနဲ့ 
တစုံတရာကို ကျနော် လွမ်းခဲ့မိတယ်။ ဘဝရဲ့တောမှော်ရုံက လက်ကလေးနဲ့ တောက်ရုံနဲ့ 
ဒါကြောင့်မို့ဒီကိုယ်ရေးကိုယ်တာစာတစ်စေါင်ကဗျာကို
ကျနော့်ဘလော့မှာ ပို့ စ်အသစ်အနေနဲ့ တင်လိုက်တာပါ။
ကျနော်တို့ တတွေ နွေဦးကို ကဗျာတွေနဲ့ တုတ်နှောင်ထားမိကြပြီ။
ကျနော်တို့ အားမငယ်စတန်း ပန်းတွေပွင့်လိုက်ကြတာပေါ့။
၁၉၇၅၊ ၁၉၈၈ သေရာပါအမာရွတ် သက္ကရာဇ်များ
ခင်ဗျား နဲ့ ကျနော် ကျောင်းဝင်းထဲမှာ ပခုံးချင်းတွန်းတိုက်ဖူးကြမယ်
(တကယ်တမ်းတော့ ဦးသန့် တုန်းက ကျနော်က ချာတိတ်)
ခင်ဗျားအော်လံကြီးတထမ်းထမ်းနေ့က ကျနော်က တောင်ပိုင်းပင်လယ်
ကမ်းခြေရှိတဲ့ မြို့မှာ ပဆိုးခြုံထဲက လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြနေခဲ့တယ်။
ခင်ဗျားရဲ့တောမှော်ရုံကာလများ ကျနော့် မြို့တော်ကြီးပြန်ခို နေ့စွဲများ
ဆိုင်ကယ်တဝီဝီ ခေတ်ပြောင်းခေတ်လွဲ ခေတ်ပျက်သေဌေးကြီးတွေရဲ့
လက်သုံးတော်ခိုင်းဖတ် တဘက်မှာ အဲဒီမျက်နှာဖုံးခွာချလိုက်ရင်
အရေခွံကို ရွံရှာစက်ဆုပ်ဖက်တွယ်ရင်း မြို့တော်မှော်ရုံတောမှာ မေ့မျောမိန်းမူးရင်း
အရာအားလုံးကို ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်မောင်ဘချစ် ဒဿနအစုပ်အပြတ် အလံတော်အောက်
အစွန်အဖျားကျတဲ့မြို့၊ ဒါမှမဟုတ် ခင်ဗျားဖွဲ့ခဲ့သလို
‘သုညတွေပဲ ကျွင်းတဲ့ မြို့ကလေး’ ကို ၉၇၊ ၉၈ မှာ
ကျနော်ခြေချဖူးနေပြီ၊ အဲဒီကာလတွေကတော့ ၉၆ ရဟန်းဘောင်က
ထွက်ပြီး ဘဝကိုအသစ်လောင်း ပုံသွင်းထားတဲ့ကာလတွေ
(၉၄ ဘန်ကောက်၊ လာ့ထ်ပရောင်း၊ ကိုဝင်းခက်အခန်း၊ တဖက်ခန်းက ကိုဝင်းထွန်း(ကာတွန်းဝင်းထွန်း)၊
ခေတ်ပြိုင်အရေတည်ကာလ၊ အခန်းထဲဝင်လာတဲ့ ကွန်မင်ဒိုယူနီဖောင်းနဲ့
တဒုန်းဒုန်းဖိနပ်သံ တွေအကြောင်းကိုတော့ ထုံထောင်းက မင်းသားကြီးမှာ
ဖားအံ ဇွဲကပင်တောင်ကြီးကို အားပါးတရ မော့ကြည့်ရင်း
အဝေးရောက် စာဆိုရှင်ကြီး ဦးစကိုသာ သတိရမိတော့။
၁၉၇၈၊၁၉၇၉ ကာလများ မြေနီကုန်းညဈေးစာအုပ်တန်း
ဗိုလ်ချုပ်လမ်း စပယ်ဦးကဖေးတဝိုက် ကုလားကျောင်းတဝိုက်စာအုပ်အဟောင်းတန်း
ဒါပေါ့ ၃၇ လမ်းအောက်ပိုင်း၊ ပန်းဆိုးတန်း ဟိုက်ကုပ်ရုံးရှေ့ စာအုပ်တန်းတွေ
(အံမယ် စာအုပ်တအုပ်ထဲကိုတောင် လက်အတူတူလှမ်းပြီးမှ
ကိုတင်မြင့်၊ ကိုမြသန်း၊ အဘ၊ ကိုအောင်ခက် - နေအုန်း စာအုပ်တန်း
လူမိုက်တယောက်ရှိသေးတယ် နံမယ်မေ့နေလို့ ခုတော့ ဆုံးသွားပြီ -
နောက်မှ အရမ်းခင်မင်သွားတဲ့ ကိုကျော်ကြီး(ကျော်ကျော်ခင်)
ကဲ ကဒ်တွေ ကျော်မယ်ဗျာ
၂၀၀၆ ၊ခင်ဗျား ကိုယ့်ခေါ်သံကိုကိုယ် ပြန်မကြားပဲ ကြားနေစဉ်
ကိုယ့်ရင်ခုန်သံကိုကိုယ် မခံစားနိုင်အောင် ခံစားနေစဉ်
ဆင်စမ်းတဲ့ ပုဏ္ဏားတွေနဲ့ လက်ဖက်ရေဆိုင်ထိုင်နေစဉ်
ညှော်နံ့နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ ဒရစ်ပုလင်းကို ဖြုတ်ပေးဘို့ တောင်းဆိုနေစဉ်
သုညပဲကျွင်းတဲ့ အဲ့ဒီ အစွန်အဖျားမြို့ကလေးမှာ
ကျနော် လတ်လျားလတ်လျား လမ်းသလားနေခဲ့တယ်
ယောင်န နေခဲ့တယ် ပြုန်းစားနေခဲ့တယ် မပြိုလဲအောင် ကျားကန်နေခဲ့တယ်။
၂၀၁၀၊ ဒီဘက် ငါးနှစ်ဆိုတဲ့ကာလဟာ ဟိုဘက် အနှစ်ငါးဆယ်ကာလလိုပဲ
မနေ့က မတ်လ ၂၆ ကမှ နွေဦးအရောက်နောက်ကျတာ
တကယ်တော့ နွေဦးဟာ နောက်မကျသေးပါဘူး
‘လွမ်းလိုက်တာ နိုင်ဝင်းဆွေရယ်’ ရင်ဆို့လှိုက်လှိုက်
ဒီနေ့လဲ ‘နွေတည’ ဖြစ်နေဆဲ၊ အချိန်ကာလကို အဖြတ်သန်းခံနိုင် အစမ်းသပ်ခံနိုင်တဲ့်
အနုပညာလက်ရာသာ တကယ့်အမတ အနုပညာ
‘ဘယ်ပါရမီမျိုးနဲ့ ရေးခဲ့ပါလိမ့်’ ခင်ဗျားမှတ်ချက် အူလှိုက်သည်းလှိုက်ထောက်ခံမိတယ်။
နေ့လည်ကနေတောက်လျှောက် ည ၁၁ နာရီထိုးခဲ့တယ်
ကိုငြိမ်းဝေ ဘလော့ဂ် ပေါ်မှာပေါ့။
ကျနော်တို့အတွက် နွေဦးဟာ နောက်မကျသေးပါဘူးဆိုတာ
ယုံ လိုက်တော့။ ။
၂၇၊ မတ်၊ ၂၀၁၀ ဘန်ကောက်စံတော်ချိန် ၈း၅၅ နာရီ
(မှတ်ချက်။ ။ ကဗျာမဟုတ်ပါ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပေးစာ တစ်စောင်မျှသာ)
Posted by ငြိမ်းဝေ at 3:45 AM No comments: Links to this post
Labels: ကဗျာ, နိုင်ငံတကာကဗျာ မိတ်ဆက်
မကြာမကြာ ရထားကြီးသည် အပြန်ခရီး၌ နောက်ကျ နေတတ်သည်။
ထိုအခါ နတ်မောက် ဘူတာမှ ထွက်လာခဲ့လျှင်ပင် ဘူတာတဖက်ရှိ တောင်ကြော ကုန်းမြင့်ကလေးများပေါ်ဝယ် မှောင်ရီလည်း ဆိုင်းလာနေခဲ့ပြီ။ တောစပ်များ၊ လယ်ကွင်းပြင် များ၊ ယာခင်းဟောင်းများသည် မပီမသ ရေးခြယ်ထားသည့် ပန်းချီကားချပ် ဖြစ်လာ၏။ အ မှောင်ရိပ်သည် မှောင်ခို သမားများအတွက် ကိုးကွယ်ရာဖြစ်လာသည်။
သူတို့ မျက်နှာများမှာ မလင်းမရှင်းအလင်းရောင်အောက်၌ ပေါ့ပါးလတ်ဆတ်လာကြ သည်။ သည့်ထက်ပို၍ မှောင်လာလျှင် သူတို့သည် ချောင်ထဲ၌ ဝှက်ထားကြသော ထန်းလျက် အိတ်များတောင်းများကို လွတ်မြောက် လာကြပြီး အထိမ်း အမှတ်ဖြင့် စုဆောင်းနေကြသည်။
သူတို့ထံမှ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းလာမှုများသည် ကျနော့် ကိုပင် ကူးစက်လာနေကြသလား ထင်သည်။ ကျနော်သည် ညိုညို့ နံဘေး၌ထိုင်ရင်း ကျနော့် ကို ကျနော် မေးခွန်းတခု မေး နေသည်။ ကျနော်သည်ပင် မှောင်ခိုသမားတပိုင်း ဖြစ်လာနေခဲ့ပြီလား။
“ နေ့တိုင်း...နေ့တိုင်းနော်... ဒီလိုချည့် ရထားကြီး နောက်ကျ နောက်ကျနေရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲ”
ညိုညို၏ ရွှင်လန်းပေါ့ပါးစွာ ပြောနေသံမှာ ကျနော့် အတွေးများနှင့် လာ၍ စပ်ဟပ် ဆက်သွယ်နေပြန်သည်။ ထိုအခါတွင်ကား ကျနော်သည်လည်း သူ့လိုပင် လွတ်မြောက် လာမှု အတွက် ဝမ်းသာနေကာ သူ့ လိုပင် တိတ်တဆိတ် ဆုတောင်းနေမိသည်။
သူသည် မီးရောင်မှိန်မှိန်အောက်တွင် ကျနော့်ကို လှည့်ကြည့်နေသည်။ သူ့ မျက်နှာ ပေါ်မှ ချွေးဥချွေးစက် ကလေးများကို တို့ပတ်ပုဝါဖြင့် တို့ယူနေသည်။
“ဟုတ်တယ်... ဒီလိုဆိုရင် ကောင်းမှာဘဲ၊ ဖမ်းမှာဆီးမှာလဲ မကြောက်ရတော့ဘူး၊ အင်း....မဖမ်းဆီးပြန်ရင်လဲ ထန်းညက်ဈေးတွေ ကျကုန်မှာပေါ့၊ ဈေးတွေကျကုန်ရင်လဲ ဘယ် ကောင်းတော့မလဲ”
သင်းသင်းသည် ခပ်တိုးတိုး ရယ်မောနေ၏။
ထိုနေ့မျိုးတွင် ညိုညို၊ သင်းသင်း၊ နုနှင့် သူတို့တတွေသည် စိတ်အေး ချမ်းသာစွာဖြင့် စကားများစွာပြောလာခဲ့ကြ၏။ စကားပြောရသည်မှာလည်း လွတ်လပ်နေကြသည်။ ကျနော် သည်လည်း မှောင်ရိပ်ခုိုပြီး ညိုညို့  လက်ပေါ်သို့ ကျနော့်လက်ဖြင့် ဖိထားကာ မလွှတ်တမ်း ဆုပ်ကိုင်ထားနေမိသည်။
“ဦးပေါ်လာကြီးတို့ လှည်းတွေနဲ့ ထန်ညက်တွေ ချနေကြတာသိသလား၊ လေးအိမ်က ထန်းညက်တွေလေ....၊ သိန်းအောင်လဲပါတာပေါ့၊ အဲတာ ဦးပေါ်လာကြီး ထန်းညက် လှည်းသုံး စီးအချင်းချင်း အလိမ်ခံရလို့ ဦးပေါ်လာကြီး ကြူကြူချ ငိုရတယ်တဲ့ ...ဒီလူကြီး သနားပါတယ် နော်....ဦးပေါ်လာကြီး ငိုတော့ မညွန့် ရီလဲ မျက်ရည်တွေကျလို့တဲ့၊ ကိုရွှေယောက်ကြီး ပြောတာ”
“ဘယ်သူမှသာ မသိလိုက်တာ၊ မမသိန်းရှင် ထန်းညက်တွေကုန်ရထားနဲ့ သုံးတွဲတောင်တင်တာတဲ့၊ အင်တောကျယ်က တင်တာ၊ ဂါတ်ဗိုလ် ကိုမောင်ရီလေ...၊ တတွဲ လေးရာနဲ့ ကိုမောင်ရီထောင့်နှစ်ရာ ရတယ်တဲ့၊ ဆဒ္ဒုံချောင်းမှာ ရထားစက်ပျက်တယ်ဆိုပီး သုံးနာရီလောက် ရထားရပ်ပြီးချတာ၊ ပိုက်ဆံရှိတဲ့ လူတွေကျတော့လဲ တတ်နိုင်တယ်နော်....၊ ဒို့ ထန်းညက်တွေလဲ သူ့ဆီဘဲ သွင်းရတာ၊သူတို့ကျတော့ ဈေးထဲ ပြောင်ပြောင်ချရောင်းနေလဲ ကိစ္စမရှိဘူး၊ ဒို့ သွားရောင်ကြည့်စမ်းပါလား”
“ဒါနဲ့ အခုတလော ပင်းချောင်းကမရှာတော့တာ သိလား၊ မခင်သိန်းတို့ မခင်လှတို့ မိသိန်းတို့ မပါတော့လို့၊ အောင်နိုင်မြင့်က သူတို့ကို ညိုးနေတာ၊ ဇာတ်တွေကလဲ ရှုပ်လိုက်တာနော်၊ သပွတ်အူဘဲ၊ အဲတာ ကျောင်းတော်က ရန်စတဲ့...”
“ကိုရင်မောင် ...မနေ့က ဂါတ်ဗိုလ် ကိုစံရီကြီး ပိုက်ဆံတဆယ်တောင် ပြည့်အောင်မရလို့ သူ့ မိန်းမကို မျက်နှာ ဘယ်လိုပြရမယ်မသိဘူး ဆိုပြီး ငိုတယ်ဆို”
ကျနော်သည်လည်း စိတ်လက်ပေါ့ပါးလာကာ ကိုစံရီ ငိုရပုံကို ရယ်စရာအဖြစ်ဖြင့် ရှင်းပြနေပြန်သည်။ ကိုစံရီကား မူးလာလျှင် ငိုစရာရှာကာ ငိုတတ်သူ ဖြစ်၏။ မူးလာလျှင် ကိုစံရီ၏ မျက်လုံးများသည် မျက်ရည် အလိုလို ဝဲလာကာ ငိုရန် အသင့်ဖြစ်နေတတ်သည်။်
ကျနော်သည် ဤကဲ့သို့ စိတ်လက် ပေါ့ပါးလာခဲ့သည့် နေ့များတွင်....မှောင်ရိပ်ဖက် ထောင့်ကျကျ၌ ထိုင်ရင်း၊ ညိုညို့ လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားရင်း၊ ပြဇာတ်မင်းသားဟန်ကို ရယ်စရာ အတုခိုးကာ ခေါင်းကိုစောင်းလိုက် ငဲ့လိုက် ညုလိုက်လုပ်ရင်း၊ ညိုညို့ ကို သီချင်းတပုဒ်ပုဒ် တီးတိုး ဆိုပြ လာမိတတ်သည်။
ထိုအခါများတွင် သူ့ မျက်နှာသည်လည်း အမှောင်ရိပ်ထဲဝယ် ပြုံးနေသည်။ လရောင် မှိန်ပျပျသည် သူနှင့် ကျနော့်ကြား၌ ကျနေ၏။ သူသည် ရှက်လာကာ ကျနော့်မျက်နှာကို မကြည်ရဲတော့ပြန်ပေ။ ကျနော့် လက်မောင်းကို တချက်ဆွဲလ်ိန်လိုက်သည်။
ပြောရင်း သူသည် တခစ်ခစ် ရယ်နေသည်။
“ဟိုသီချင်း ဆိုမယ်နော်...မောင့်အနားမှာ ခင်လေးထိုင်လို့ တီတီတာတာပြောတတ်ပြန်သေးတယ်....နော်”
သူသည် ကျနော့်ကို တချက် လိန်ဆွဲလိုက်ပြန်သည်။
“အဲတာ မဆိုရဘူး.... သူများကို စောင်းပြောတာ”
ကျနော်သည် ထိုသီချင်းကိုပင် တီးတိုးညည်းညည်း ဆိုနေမိသည်။ သူ့လက်ကို ခပ်ဖွဖွ ဆုပ်ကိုင်ထားသည်။ ကျနော်သည် သူနှင့် နှစ်ယောက်ထဲနေရသလို စိတ်၌ခံစားနေရ၏။ သူ့ မျက်နှာပေါ်မှ အပြုံးရိပ်များကို အမှောင်ပျပျ၌ ရှာကြည့်နေသည်။ သူကလည်း ကျနော့် ကို မျက်လွှာကြီးပင့်ကာ ကြည့်နေသည်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးစိတ်၌မူ မေးခွန်းတခုကို တပြိင်နက်တည်း မမေးရဲမေးရဲဖြင့် မေးနေကြ၏။ “ဘယ်တော့ ကျနော်တို့ အတူတကွ နေရမှာလဲ။ ဘယ်အခါတွင် သားသမီးတွေ တလှေကြီးနှင့် စုစုရုန်းရုန်း ပျော်ပျော်ပါးပါး နေနိုင်မည့် နေ့ရက်များ ဆိုက်ရောက်လာမှာလဲ”။ ထိုနေ့ရက်များမှာ မမြင်ရသေးသည့် အနာဂါတ်၌သာ ရှိနေကြသည်ကို နှစ်ယောက်စလုံး သိနေကြ၏။
သီချင်းထဲတွင် လေပြင်းမုန်တိုင်းကျပြီး ကိန္နရီမောင်နှံ ကွဲကွာသွားကြသည့် အပိုဒ်ရောက်လာလျှင် သူသည် ဝမ်းနည်း လာနေပြန်သည်။ သူ့ မျက်လုံးထဲ၌ ကိန္နရီမောင်နှံငိုကြွေးနေကြဟန်ကို မြင်တွေးနေသည်။
သူ့ မျက်လုံးအိမ်၌ ရွှန်းလက် တောက်ပ နေမှုများသည် မှိန်ဖြော့လာနေသည်။ သူ့ နှုတ်ခမ်းပေါ်၌ ဝဲနေသည့် အပြုံးရပ်အတွန့်ကလေးသည် တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ် သွားသည်။ သူ၏ ဝမ်းနည်းတတ်သော၊ အားငယ်တတ်သော မျက်နှာကလေးမှာ ငြိမ်သက်လာကာ..တဖြည်းဖြည်း ဝမ်းနည်းရိပ်ကလေးများသန်းလာနေသည်။
“တော်တော့ကွယ်၊အဲဒီသီချင်းကို ဘယ်တေ့ာမှမဆိုနဲ့၊ အဲတာ နိမိတ်မရှိတဲ့ သီချင်းကြီး”
သူသည် ကျနော့်လက်ကို ပြန်၍ ဆုပ်ကိုင်ထားနေရင်းခပ်တိုးတိုး ပြောနေပြန်သည်။
ကျနော်သည်လည်း သီချင်း အဆို ရပ်လိုက်သည်။
သူ့ လက်ဖဝါးကလေးကို ပွတ်သပ်နေသည်။
သူ့ လက်ချောင်းကလေး တခုအပေါ်၌ မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်းကမှ သူဝယ်လိုက်သည့် လက်စွပ်ကလေးကို အမှတ်မဲ့စမ်းနေမိ၏။ “ဤလက်စွပ်ကလေးမှာ ထန်းလျက်များမှ ဖြစ်လာသည့် လက်စွပ်ကလေး၊ အမှောင်ရိပ်သံသရာမှ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ရသည့် ရွှေတို ရွှေစကလေး” ဟု တွေးနေမိပြန်သည်။
မကြာမီ သူ့ ထန်းလျက်များ အဖမ်းခံလိုက်ရလျှင် သူ့ လက်ပေါ်မှ ဤလက်စွပ်ကလေး သည်လည်း ပျောက်ကွယ် သွားရလိမ့်မည်။
ညိုညိုသည်လည်း လေး ငါး ကြိမ်ထက်မနည်း အဖမ်းအဆီးခံခဲ့ရပြီး ဖြစ်သဖြင့် ဖမ်းဆီး သည်မှာ သူ့ အတွက် ဘာမျှ မထူးဆန်းသလို ရိုးလာစပြုလာနေခဲ့ပြီ။
သူ့ ထန်းလျက်တောင်းများကို ရထားပေါ်မှ ဆွဲချနေကြစဉ်တွင် သူသည် သူ့ ပစ္စည်းမဟုတ်သလို က္ကှူနြေ္ဒရရ နေနိုင်လာခဲ့ပြီ။
သူ့ မျက်မှောက်၌ပင် သူ့ ပစ္စည်းများကို အလုပ်သမားများ ဆွဲချနေကြ၏။ဤသို့ ဖမ်းဆီးနေဆဲအချိန်များ၌မူ ရထားကြီး တစင်းလုံးမှာ အလုပ်သမားများ၏ လှုပ်ရှားနေသံမှ လွဲ၍ အခြားအသံမရှိ ၊ ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေတတ်သည်။
ကုန်ပစ္စည်များဖမ်းပြီး ရထားကြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့မှ သူသည်လည်း အခြားသူများကဲ့သို့ ငြိမ်သက်နေသော စက်ရုပ်များ အဖြစ်မှ လူပြန်ဖြစ် လှုပ်ရှားလာနေသည်။ သူ့ မျက်တောင်များကို ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ် လှုပ်ရှားလာသည်။
ရထားကြီးသည်လည်း လူ့ ဘုံလောက၌ ဘာဖြစ်နေပြီကို မသိလိုက်သော ပိတ်ပိတ်ပိန်း နားလေးနားထိုင်ကြီးကဲ့သို့...သူ့ ဖာသာ ဆူညံစွာ ဥသြဆွဲပြီး ထွက်ခွာလာသည်။ ပင်းချောင်း အထွက်၌ ထန်းတောကြီးများသည် ပတ်လည်ဝေ့ကာ ကျန်ရစ်နေခဲ့သည်။
ရထားပေါ်၌ ဆူညံသံများ ပွက်လောရိုက်လာသည်။ ငိုလုလု အသံများဖြင့် ဆဲဆိုကြ၏။ ပေါက်ကွဲမတတ် ကျိန်ဆဲသံများဆူညံလာသည်။
“ဖမ်းပေါ့..နောက်တခါဖမ်းရင် တခါတင်မယ်၊ အခါတရာဖမ်းရင် တထောင်တင်မယ်”
“ဒီလိုပေါ့ မိညိုရယ်...လွတ်တဲ့အခါလွတ်၊ အဖမ်းခံရတဲ့အခါလဲ ရှိမှာပေါ့” ဟု သင်းသင်းက ပြောနေသည်။
သင်းသင်း၏စကားလုံးများသည် သင်းသင်းကိုပင် ပြန်၍ အားပေးနေသည်။
ညိုညိုကား မွှန်ထူ ထုံထိုင်း နေသလို ငြိမ်သက်နေ၏။
ထိုအချိန်တွင် ကျနော်သည် သူ့ အနားတွင် ထိုင်နေရင်း သူ့ ကို စိတ်တွင်းမှ အားပေး နေမိသည်။ သူသည်လည်း ကျနော်ရှိနေသောကြောင့် အားရှိနေသည် ထင်သည်။ ကျနော် သည် သူ့ ဒုက္ခကို ဝေမျှခံစားနေရ၏။
သူ့ ပစ္စည်းများ အဖမ်းခံ အသိမ်းခံရခြင်းများကို ကျနော့် ပစ္စည်းများ အဖမ်းခံရသလို ထင်နေခဲ့ပြန်သည်။
တခါတရံ၌ကား ကျနော်၏ သူ့ ကို ချစ်သူလို ချစ်နေသောစိတ်မှာ ထို့ထက်များစွာ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော မေတ္တာတရား အဖြစ်သို့ပင် ကူးပြောင်းသွားနေသည် ထင်ရသည်။ သူနှင့် ကျနော့် ကြား၌ရှိသော ဖိုမ တပ်မက်မှု အမှေးပါးကလေးသည် ကွဲပျက်သွား၏။ ရင်ထဲမှ ဂရုဏာများသည် တစိမ့်စိမ့်ကြီးထွား လာနေပြန်သည်။ ထိုအခါများ၌ကား သူ့ လက်မောင်း ကလေးကို ဆုပ်ကိုင်းထားသည့် ကျနော့် လက်များမှာ တပ်မက်စိတ်မပါဘဲနှင့် ပို၍ တင်းကျပ် လာသည်။ သူ့ကို တအူတုံဆင်း ညီမကလေးလို တွယ်တာလာသည်။ သူ့ မျက်နှာ ကလေးမှာ လည်း ကျနော်နှင့် ပို၍ တူလာနေသည် ထင်မိပြန်သည်။
“မောင်ရင်တို့ကြည့်ရတာ မောင်နှမကလေး နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရသလိုဘဲ” ဟု ရထားလိုက် စာတိုတ်ဗိုလ် ကိုကျော်စိန် ပြောဘူးသည်ကို ထိုအခါများတွင် ကျနော်သည် အ မှတ်ရလာနေကာ သူ့ မျက်နှာကလေးကို ငေးစင်းကြည့်နေမိသည်။
သူ့ မျက်လုံးများမှာလည်း ကျနော့်ကို ချစ်သူကဲ့သို့ တွယ်တာနေခြင်း မဟုတ်တော့ဘဲ... အားကိုးလိုစိတ်၊ ယုံကြည်စိတ်များဖြင့် ပြည့်လျှမ်းကာ တောက်ပနေသည် ထင်မိသည်။
တခါတရံ လမ်းခုလတ်၌ ရထားကြီး စက်ပျက်နေသဖြင့် အမှောင်ထဲ၌ ရပ်ထားရ၏။
ထိုအခါများတွင် ကျနော်သည် စာအုပ်စာတန်းများကိုယူပြီး သူတို့ တွဲသို့ ကူးပြောင်း သွားသည်။
သူသည် အချိန်အတန်ကြာကပင် ကျနော့် ကို အားကိုးလိုစွာ မျှော်နေခဲ့ရှာသည်။
ကျနော်လည်း အမှောင်ထဲ၌ သူ့ အနားတွင် အသားချင်းထိကပ်ထိုင်လိုက်သည်။
“ဘာပြုလို့ ခုမှလာရတာလဲ၊ ဒီမှာဘဲ ထိုင်နေနော်...၊ ဟိုဟိုဒီဒီ ရှောက်သွားမနေပါနဲ့”
သူက သူ့ အဖော်များ မကြားစေရန် ခပ်တိုးတိုး ပြောသည်။
ရထားပေါ်၌ မီးမလင်းသဖြင့် ဟိုတကွက် သည်တကွက် ဖရောင်းတိုင်ကလေးများသာ ထွန်းညှိထားကြ၏။ လေတိုက်လိုက်လျှင် ဖရောင်းတိုင်များသည် ဟုတ်ကနဲ ငြိမ်းသွားကြ၏။ ထိုအခါ၌ကား ဘာမျှ မမြင်ရအောင် မဲမှောင်လာသဖြင့် ကျနော်သည် သူ့ အနားသို့ တိုးကပ်လိုက်ပြီး သူ့ ဂုတ်ပိုးသားကို တချက်နမ်းလိုက်၏။ သူက ကျနော်ကို တွန်းလွှတ်သည်။
“ဟိုဘက်မှာ စာအုပ်တွေ ထားရမယ်၊ နှစ်ယောက်ကြားကထား၊ အလယ်ကထား”
သူသည် ကျနော့် လက်မောင်းကို တချက်လိန်ဆွဲသည်။ ပြင်းပြင်း ထန်ထန် မဟုတ်သော တက်တချက်ခေါက်သည်။ ကျနော်သည်လည်း အမှောင်ထဲ၌ ပြုံးနေမိပြန်သည်။
ဖရောင်းတိုင်မီးများ ထွန်းညှိ ကြသောအခါ...“ဒုက္ခပါဘဲ၊ ဒီမီးတွေကို ဘာပြုလို့ ထွန်းနေကြပါလိမ့်နော်...” ဟု ကျနော်သည် ရယ်သံ တဝက်ဖြင့် ပြောနေမိသည်။
ညဉ့်နက်လာလျှင် သူ့ အဖော်နှစ်ယောက်လည်း တဖက်ခုံပေါ်တွင် တယောက်ကိုတယောက် မှီပြီး အိပ်ပျော်သွားသည်။ သမ်းဝေသံများ ကြားရသည်။ “ရထားကြီးက ဘယ်တော့ပီးမှာလဲ” ဟု ညီးညူကြသည်။ စက်ဗိုလ်သည် ရထားခေါင်းတွဲကို ထုနှက်ပြင်ဆင်နေသည်။ အဝေးတောစပ်ဆီမှ ဂျီဟောက်သံများကြားရသည်။ လရောင်ပျပျ၌ အညာကုန်းကမူ မြက်ခင်းပြင်များပေါ်တွင် ယုန်ကလေးများ နှုတ်ခမ်းမွှေးသပ်လိုက် ပြေးဆော့ ကစားလိုက် လုပ်နေသည်ကို သူနှင့် ကျနော်သည် ရထားပြတင်းဝမှ ငေးမောကြည့်နေမိကြ၏။
သူ့ အသက်ရှူသံ၌ နွေးနေပြန်သည်။
ညလေပြေများသည် တောင်ကုန်းစောင်းများ၊ ချိုင့်ဝှမ်းများဆီမှ ပြေးလာနေသည်။
ညိုညို၏ စကားပြောသံမှာ နွေးနေသော နှလုံးသားအတွင်းမှ ဖြတ်သန်းလာသည်။
“မှောင်နေတာဘဲ၊ ကြောက်စရာ ကောင်းလိုက်တာနော်...”
“အမယ်...အမယ်...သူ့ ကို ဘာလို့ ကြောက်နေရမှာလဲ”
ကျနော်သည် သူ့ မျက်နှာအနားသို့ ပို၍ တိုးကပ်လိုက်သည်။ သူ့ လက်မောင်းကို ခပ်ရွရွဆုပ်ကိုင်ထားသည်။ရယ်သံဖြင့်...
“ခုလို အခါဆိုတော့ ကိုကလဲ မတရား ကြံချင်ကြံမှာပေါ့၊ အဲတာတော့ ကိုလဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်မချရဲဘူး”ပြောနေမိသည်။
သူသည် ကျနော့် ကို တွန်းလွှတ်ပြန်သည်။
“သွား...ဒါဖြင့်သွား ...ဟုတ်တယ်၊ သူ့ ကိုလဲ ကြောက်ရမှာဘဲ၊ သူလဲ တီဘီစီမှုတ်လား၊ ကဲ ..ပြောစမ်း...ဟိုနေ့က ရထားမိုးချုပ်နေတုန်းကလေ....သူ မအေးသွယ်ကို အိမ်သာနားခေါ် သွားတာ ဘာလုပ်တာလဲ၊ မှန်မှန်ပြောစမ်း၊ မလိမ်နဲ့နော်၊ သီပီးသားသိလား”
“ကိုယ်က ဘီဘီစီပေမယ့် သူတော်ကောင်းပါ”
“အန္တရာယ်ဘဲ” ဟု သူက ပြောနေသည်။
အတန်ကြာလျှင် ကျနော်သည် စာအုပ်များကိုသူနှင့် ကျနော့်ကြားတွင် ချလိုက်သည်။ ထိုင်ခုံတဖက် အစွန်းတွင် ထိုင်ရင်းအနာဂါတ်ကာလကို မျှော်လင့်ချက်များဖြင့် မျှော်တွေးနေ မိသည်။ မိသားစု နှစ်ခု၏ စားဝတ်နေရေးအတွက် သူသည်လည်း တွေးနေပုံရသည်။ သူ့ အမေ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို မေးကြည့်သည်။ သူသည် အတော်နှင့် ပြန်မဖြေဘဲ တွေနေသည်။
“သက်တော့ သက်သာလာဘီ၊ အရင်ကလောက် ချောင်းမဆိုးတော့ ဘူး၊အရင် က လောက် ချောင်းမဆိုးတော့ဘူး၊ ပန်းနာထရင်တော့ မောမောနေတယ်၊ သူ ဝယ်လာ ခဲ့တဲ့ ဆေးနဲ့ တဲ့တယ်။ အဲတာ အမေက ခဏခဏ ပြောတယ်၊ ဘာပြုလို့ ပေးတာလဲ....ဟင်”
“ကိုတို့ ဘယ်တော့ အတူနေရမလဲတို့ တွေးနေမိလို့ပါ၊ ညိုညိုတို့ အမေနေကောင်းလာရင် သိပ်ငဲ့နေစရာမလိုတော့ဘူး မှုတ်လား”
ပြောရင်း ကျနော်သည် လှစ်ကနဲပြုံးလိုက်မိ၏။ သူနှင့်ကျနော်သည် တဦးကိုတဦး သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရဘဲနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ကာ အတန်ကြာ ငေးကြည့်နေကြသည်။ သူ့ ကိုလည်း ကျနော် မပိုင်ဟု တွေးနေမိ၏။
“အတူတူနေချင်တာ ချစ်လို့ ပေါ့၊ ဘယ်တုန်းကချစ်တာလဲလို့ မေးအုံးမယ်လို့ မှုတ်လား၊ တကယ်ပါ၊ ကို တကယ်တွေးနေတာ၊ ပီးတော့ ဒီအတိုင်း မင်းကို ကို စိတ်မချချင်တော့ဘူး၊ ပိုင်ထားလိုက်ချင်တယ်၊ စိတ်ချစရာလဲ မရှိဘူးမှုတ်လား၊ ခုတောင်မှ ကိုကာကွယ်ပေးထားလို့”
“သူများလဲ သူ့ ကို စိတ်မချဘူး၊ နေ့တိုင်းဘဲ သူ မိန်းမတွေနဲ့ ပူးပူးကပ်ကပ်နေရင် သူများ သိပ်ငိုချင်တာ၊ အော်အော် ငိုပလိုက်ချင်တာ”
သူသည်လည်း ခပ်တိုးတိုး ပြောနေသည်။
ထိုနောက် ပြောစရာ စကားများ ကုန်ခမ်းသွားသလို နှစ်ယောက်စလုံး ငြိမ်သက်နေမိကြသည်။ ရထားကြီး မီးရှိန်အားပြန်ပြည့်လာပြီး ထိုနေရာမှ ထွက်ခွာလာ ခဲ့သည် အထိ စကားမပြောဖြစ်ကြတော့ပေ။ အိပ်ပျော်နေသူများသည် နိုးလာခဲ့ကြ၏။ ရထားတွဲပေါ်ရှိ မီးလုံးများသည်လည်း ပြန်၍ လင်းလာကြပြန်သည်။
ခပ်ဝေးဝေး မှောင်ရိပ်ကျသော ခုံတခုမှ မအေးသွယ်၏ တခစ်ခစ်ရယ် သံများသည် လည်း ရထားခုတ်မောင်းနေသံဖြင့် ရောထွေးပေါ်လာနေပြန်သည်။ အစောက ရှေ့ အနား ခုံတခုပေါ်၌ ထိုင်နေခဲ့သည့် လင်ရှိအပျို မအေးမြင့်လည်း သူ့ နေရာ၌ မရှိတော့ပေ။
ကြားဘူတာတခုတွင်ကား မအေးမြင့် ပြန်တက်လာသည်။ သူသည် ကပိုကရိုဖြစ်နေ၏။ အားအင်ကုန်ခမ်း နွမ်းနယ်လာသည်။ မျက်နှာပေါ်၌မူ ကျေနပ်သော အပြုံးကလေး တခုမှာ ဝေ့ပါလာသည်။ သူသည် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျနေသော သူ့ ယောင်္ကျားးနံဘေး၌ ခပ်ဖြည်းဖြည်း ဝင်ထိုင်လိုက်လေသည်။
ကျနော်ကား စိတ်များ ရှုပ်ထွေးနောက်ကျိလာနေသည်မှာ ဘယ်အခါတွင်မှ အနည် ပြန်ထိုင်တော့မည် မဟုတ်ဟုပင် ထင်လာခဲ့သည်။
ဤ မိန်းကလေးများမှာ အမှောင်ထဲ၌ သံသရာလည်နေရ၏။ အမှောင်သည် သနားစ ဖွယ်ဖြစ်သော သူတို့ကို တစတစ ရစ်ပတ်လာကာ နောက်ဆုံး၌ ဝါးမျိုစား သောက်ပစ်လိုက်၏။ အမှောင်ကို အသုံးချတတ်သော ကျားရဲများသည် မှောင်လာလျှင် တောကြီးမျက်မည်းထဲမှ ထွက် ပေါ်လာကြသည်။
ကျနော်သည် ထွန်းမောင်လိုလူမျိုး မီးရထားပေါ်တွင် လိုက်ပါနေသမျှ မိန်းမ ကောင်းက လေးများစွာမှာ ဆုံးခန်းတိုင် ပျက်စီးသွားရမည်ကို နိယာမတရားတခုလို တွေးလာမိတတ် သည်။
ထွန်းမောင်သည် မိန်းမကျလောက်သည့် ရုပ်လည်းရှိ၏။ လိမ္မာပါးနပ်သည်။
နေ့လယ်ဖက်တွင် ကျောက်ပန်းတောင်း၌ ရထားကြီး ဆိုက်ရပ်ထားစဉ် သူသည် ရဲတွဲပေါ်မှ အခြားရဲသားများနှင့်အတူ ညိုညိုတို့ သင်းသင်းတို့ မြို့ ထဲမှ ပြန်အလာကို မျှော်နေ တတ်၏။
မှောင်ခိုသမကလေးများ ပြန်လာချိန်ကား ဘူတာရုံသို့ခရီးသည်များ မဆိုက်ရောက် သေးမီ ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင်မှ သူတို့ အတွက် ဝှက်ရ ကဲ့ရ လယ်ကူသည်။
ညိုညိုရောက်လာလျှင် သူသည် ရဲတွဲမှ ထွက်ရပ်ပြီး လက်ယပ်လှမ်းခေါ်သည်။
ညိုညိုသည်လည်း ခေါင်းပေါ်တွင် ထန်းလျက်တောင်းရွက်ထားရင်း....မျက်နှာ၌ ချွေး များဥ နေလျက်၊ ကျောပြင်တခုလုံး ချွေးများနစ်နေလျက် သူ့ ရှေ့ တွဲအောက်မှ သွားရပ် ရ သည်။
သူသည် ညိုညို့ မျက်နှာနှင့် ရင်သားများကို စိုက်ကြည့်ရင်း ထန်းလျက်မည်မျှ တင်မည် ကို မေးနေကျအတိုင်း ရယ်မောမေးသည်။
ညိုညိုက ပြန်ဖြေပြီး ဖြစ်သော်လည်း သူသည် စကား ဖြတ်မပစ်သေးဘဲ အခြားစကားစများ၊ ရယ်စရာများရှာကာ အရွန်း အပြက်များ ပြောနေသည်။
“ညိုညိုက မညိုပါဘူး၊ ဝါဝါလို့ နာမည်ပြောင်းဘို့ကောင်းတာ၊ ဒါမှ မဟုတ်ရင် လှလှလို့ ပြောင်းပါလား ကို့ ညီမက တကယ်လှတာ၊ တကယ့်ကို လှတာ၊ ကိုတို့တောင် ငေးယူရတယ်၊ ကြည့်လေ လှလေပေါ့” ဟုပြောနေသည်။
“ကဲ...ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက် ယူမလဲပြောပါ၊ ကျုပ်ဖါသာလှတာ မလှတာ တော်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး”
ညိုညိုသည်လည်း မျက်နှာထားနှင့် ပြောသည်။
သူသည် ငွေလှမ်းပေးသည့် ညိုညို့ လက်ကို ဖျတ်ကနဲဆွဲဆုပ်ထားပြီး တဟဲဟဲရယ်သည်။ ညိုညိုသည် ဆောင့်ရုန်းပြီး ထွက်လာခဲ့၏။
တခါတရံတွင်ကား ဤသို့ ဇွတ်ထွက်သွား၍ မရ။
အပြန်၌ နတ်မောက်ဘူတာမှ ရထားထွက်လာခဲ့လျှင် ညိုညိုတို့ သဘောင်္သီးသုတ် ဝယ်စားလေ့ ရှိသည်။ ထိုအခါ၌ သဘောင်္သီးသုတ်စားရာသို့ ထွန်းမောင် ရောက်လာ တတ်သည်။
သူသည် အနား၌ လာရပ်ပြီး... “ကိုတို့တော့ စားဘို့ မခေါ်တော့ဘူးလား၊ အေးလေ ဘယ်ခေါ်ချင်မှာလဲ၊ ကိုတို့က တီဘီစီလောက်မှ လခ မရှိတာကိုး” ဟု သူသည် ခနဲ့တတ်၏။
ညိုညိုသည်လည်း စိတ်ညစ်စွာဖြင့် ခေါ်လိုက်ရသည်။
သူသည် ညိုညိုနံဘေး၌ က္ကုနြေ္ဒမပျက် ဝင်တိုး ထိုင်သည်။
ချိုင့်ထဲမှ သဘောင်္သီးသုတ်ကို နှိုက်စားရင်း မျက်နှာငုံ့ကာ ညိုညို့ ပါးနှင့် နီးကပ်အောင် ကပ်သည်။
“သဘောင်္သီးသုတ်က မွှေးလိုက်တာ” ဟု သူသည် ရယ်ရင်းပြောသည်။
ညိုညို့ ပေါင်ပေါ်မှ လက်သုတ်ပုဝါကို လက်ဖြင့် အုပ်ကိုင်ပြီး လှမ်းယူသည်။
“ညိုညို ကတော့ တနေ့ တခြား ဝလာတယ်” ဟု ပြောရင်း အခြားရယ်စရာ စကားမျာစွာကို ပြောနေတတ်သည်။
ညိုညိုသည် သူ့ ကို စကားပြန်မပြောဘဲ မျက်နှာကို တခြားသို့ လှည့်ထားသည်။သူသည် သင်းသင်းတို့နှင့် စကား တဖေါင်ဖေါင် ပြောလာသည်။ သင်းသင်းကော နုနုပါ သူနှင့် မလွတ်ကင်း။ ဤ မ်ိန်းကလေးများကား သူ့ ရယ်သံအောက်၌ ရင်ခုန်နေကြပြန်သည်။
ထွန်းမောင်ပါသည့် နေ့များတွင် ကျနော်သည် ညိုညို့ အနားမှ မခွါဘဲ ထိုင်နေသည်။ တခါတရံ၌ ထွန်းမောင်က ကျနော်နှင့်ညိုညိုကို နောက်ပြောင်ချင်လာလျှင် ကျနော်သည် မျက်နှာတည်တည်ထားလိုက်သည်။ ကျနော်ကား ညိုညို့ ကို ငဲ့ညှာရသဖြင့် ပြဿနာများကို အေးဆေးစွာ ဖြေရှင်းသည့်နည်းဖြင့် ထွန်းမောင်ကို ပြုံးသည့်အခါပြုံး၊ ရယ်မောသည့်အခါရယ်ပြီး ဆက်ဆံနေရသော်လည်း ရင်ထဲတွင်မူ စက်ဆုတ် ရွှံရှာမှုများမှာ တောမီးကဲ့သို့ အရှိန်ပြင်းသည်ထက် ပြင်းလာနေသည်။
တခါတရံ၌ မခံမရပ်နိုင် ဒေါသများဖြစ်လာရ၏။ ညိုညို့ ကို ထန်းလျက် မတင်တော့ရန် တား မြစ် ချင်လာသော်လည်း ဤ စားဝတ်ရေးအတွက် ဖြေရှင်း နေရသော ရေးစီးကြောင်းကြီးကို တားဆီး၍ ရမည်မဟုတ်။
ရထားပေါ်တွင် လက်မှတ်စစ်အဖွဲ့ ပါလာသည့်နေ့များတွင် ကျနော်သည် ညိုညို့ အတွက် လက်မှတ်တစောင် ဆင်းဝယ်ပြီး သူ ထိုင်နေရာသို့ သွားပေးသည်။
သူသည် ရထားပြတင်းဝမှ ကျနော့် ကို ငုံ့ကြည့်နေရင်း သူ့ မျက်နှာမှ နားမလည်နိုင် ဖြစ်နေခဲ့သည်။ သူ့ မျက်လုံးများမှာ ရိုးသားစွာဖြင့် အဖြေရှာမရနိုင်အောင် ဖြစ်နေသည်။ သူသည် ကျနော်ပေးနေသည့် လက်မှတ်ကို လှမ်းမယူ။
“သူများ ... ဘာ... ဘာပြုလို့ ... ယူရမှာလဲ”
သူသည် အသံတုန်တုန်ဖြင့် တိုးတိုးကပ်မေးနေသည်။
“ယူစမ်းပါ၊ လက်မှတ်တစောင် ဘယ်လောက် တန်ဖိုးရှိလို့လဲ၊ သုံးကျပ်ထဲပါ”
“အဲဒီအထဲမှာ မင်းမပါဘူး၊ မင်းကို ထည့်မပြောဘူး၊ သိပ်နားဝေးတာဘဲ”
ကျနော်သည် အလိုလို ဒေါသဖြစ်လာကာ လက်မှတ်ကို ပစ်ချပစ်ခဲ့၏။ ကျနော် ဒေါသဖြင့် ထွက်လာခဲ့သည်ကို သူသည် နားမလည်နိုင်ဘဲ ကျနော့် ကျောပြင်ကို ငေးကြည့် နေမည်။
ငွေသုံးကျပ်သည် ဆင်းရဲလှသူများအတွက် မနည်းပါးသော အရေအတွက် ဖြစ်၏။ ကျနော်ကား လက်မှတ်စစ် တဖွဲ့လုံးကို ကျွေးမွေးထားပြီး ဖြစ်သဖြင့် ကျနော် စာရင်းပြလိုက်လျှင် ထိုလက်မှတ်မဲ့များကို လက်မှတ်စစ်အဖွဲ့က စစ်တော့မည် မဟုတ်ပေ။
ကျနော်သည် ထိုစာရင်းထဲတွင် ညိုညို့ကို မထည့်ချင်။
လက်မှတ်စစ်အဖွဲ့မှာ လူကောင်းဟူသော ပစ္စည်းသည် ရှားပါးလှသော ရတနာ ဖြစ်၏။ ထိုအထဲ၌ မိန်းမ ကိစ္စ အတွက်နာမည်အကြီးဆုံး လက်မှတ်စစ်တဦးမှာ တောင့်တောင့် ဖြောင့်ဖြောင့် နိုင်ငံခြား ရုပ်ရှင်မင်းသားဟန် ပေါက်နေသည်။ သူ့ ကို အထင်ကြီးမိသော မိန်းကလေးပေါင်း မြောက်မြားစွာမှာ သူတို့ လက်မှတ်စစ်တဖွဲ့လုံးနှင့် ညားကြရလေတော့သည်။ သူတပါး သားမယားလည်း ရှောင်သူမဟုတ်။
ဤဒေသရှိ ဆင်းရဲသူ တောသူ တောင်သားများ၊ ဖျင်ကြမ်းအဝတ်ကိုပင် လုံလောက်စွာ မဝတ်နိုင်ကြသူများ၊ ရိုးသား ဖြူစင်ကြသူများမှာ သူတို့ကို အထင်လည်း ကြီးတတ်ကြသည်။
သူသည် ညိုညို့ အနား ရောက်လျှင် လက်မှတ် စစ်ပြီးသွားသော်လည်း အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာကာ စကား များ နေတတ်ပြန်သည်။ တခါတရံ လက်မှတ် ဆက်၍ မစစ် တော့ဘဲ ညိုညို့ အနားတွင် ဝင်ထိုင်သည်။
သူသည် ညိုညို့ ခေါင်းကို ရင်းနှီးစွာ ပုတ်လိုက်ပြီး....
“ကိုတို့ လာမှ လက်မှတ်ယူစီးတာနော်...ဖိုးရင်မောင် ယူပေးတာ မှုတ်လား၊ ဒီကကောင် သိပ်သဝန်ကြောင်တဲ့ အကောင်၊ နောက်ကို ဘယ်တော့မှ ယူမစီးနဲ့၊ ကိုက မယူရဘူးလို့ ပြောတယ်လို့ ပြောလိုက် ကြားလား၊ မင်းနဲ့ ဖိုးရင်မောင်နဲ့ မောင်နှမဆို၊ ဖိုးရင်မောင် ကို့ကို ပြောထားဘူးပါတယ်၊ ကဲ ... ပြောစမ်း ဘယ်နှစ် ဝမ်းကွဲတော်တာလဲ၊ ဘယ်ဘက်က တော်တာ လဲ၊ မှန်မှန်ပြောနော်... လိမ်ရင် ကိုတို့က မျက်နှာကြည့်လိုက်တာနဲ့ သိတယ်။ လက်မှတ် စစ်ဆို တာ အကင်းပါးတယ်”
ညိုညိုသည်လည်း ပြုံးနေသည်။ ညိုညိုက ဤ လက်မှတ်စစ်က သူ့ ကို အကယ်ပင် ခင်မင် နေသည်ဟု တွေးချင်တွေးနေမည်၊ ထိုသို့ တွေးမိလျှင်ကား နောက်တပတ် သူတို့ လက်မှတ်စစ်အဖွဲ့ ပါလာသည့်နေတွင် ဤ ရိုးသား ဖြူစင်လှသော မ်ိန်းမကောင်းကလေးများမှာ လက်မှတ်စစ် တွဲပေါ်သို့ လိုက်ပါသွားရပြီး လူ စင်စစ်က ဖါ ဖြစ်သွားရတော့မည်။
ကျနော်ကား ညိုညို့ ကို သတိပေးသင့်သည် ထက်လည်း ပို၍မပြောချင်။
ကျနော့် စိတ်၌ကား ညိုညို၏ ချစ်သူအပေါ်၌ ထားသော သစ္စာတရားကိုလည်း အကြွင်း မဲ့ ယုံကြည် နေသည်။ စိတ်၌ သောကများလည်း ဖြစ်နေခဲ့ရပြန်သည်။ စိုးရိမ်စိတ်များသည် တမျှင်းမျှင်း အုံကြွလာနေကြပြန်သည်။
နောက်တော့ ကျနော်သည် “လက်မှတ်စစ်တွေထဲက တချို့ လူတွေအကြောင်း ကြားဖူး သလား” ဟု အရိပ်အမြွက် ပြောလာရသည်။
“သူများသိပါတယ်၊ ဒီလူတွေ ဘယ်ဘူတာမှာ မယားငယ် ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်၊ မီးရထား အမှုထမ်းချင်း မယားတောင် ရှောင်ကြတာမဟုတ်ဖူးဆိုတာအထိ သိပါတယ်၊ လူတင် ပါမှ နွားကျား ကိုတ်တာပါ၊ သူက အစိုးရိမ် သိပ်လွန်တာဘဲ”
ည်ိုညိုသည် ကျနော့် မျက်နှာကိုကြည့်ရင်း ပြုံးနေ၏။ ထို အပြုံးများထဲ၌ ခိုင်မာသော သစ္စာတရားကို မြင်တွေ့နေရသလို ထင်သည်။ သူ့ မျက်လုံးထဲတွင် တောက်နေသည့် အရောင် ထဲ၌ သူ၏ နှလုံးသားမှ ခိုင်မာမှုများ လာ၍ ထင်နေသည်ထင်မိသည်။
ကျနော့်ရင်ထဲမှ ပူလောင်သော သောကများမှာ အရှိန်ပြယ်လာသော်လည်း ပျောက် ပျက်၍ကား မသွား။ အကြွင်းအကျန်ကလေးများမှာ နှလုံးအိမ်၌ ငြိစွဲနေခဲ့ပေသည်။
နောက်ပိုင်း ရက်များ၌ တောင်တွင်းကြီးမှ အဖမ်းအဆီးများ အမိန့်အရ ပို၍ တင်းကျပ် လာသည်။
တောင်တွင်းကြီးသို့ ရထားဝင်တော့မည် ဆိုလျှင် လူတိုင်း မျက်နှာငယ်ကလေးများနှင့် ဖြစ်လာကြ၏။
ကျနော်သည်လည်း ညိုညို့ မျက်နှာကို ကြည့်မိတိုင်း စိတ်မချမ်းသာ ဖြစ်လာနေရ သည်။
သူတို့ သည် အခက်အခဲများကို ရှောင်းကွင်းနိုင်ရန် ဆဒ္ဒုံချောင်း ဘူတာတွင်ပင် ရထားပေါ်မှ ဆင်းသက်ပြီး မြင်းလှည်းများဖြင့် ညအခါ၌ တိတ်တဆိတ် တောင်တွင်းကြီးသို့ ဝင်ကြသည်။
ဆဒ္ဒုံချောင်းသို့ ရထား ဆိုက်ရပ်လိုက်လျှင် အမှောင်ထဲ၌ အထုပ်အပိုးများ အားလုံး ချကြ၏။ စက်ဗိုလ်သည်လည်း ရထားကို ကြာကြာ ရပ်ပေးသည်။ မှောင်ခိုသူများနှင့် တကွ ထန်လျက်အားလုံး မြေကြီးပေါ် ရောက်ကုန်မှ အခွံချည်းသာကျန်သော ရထားကြီးသည်လည်း အမှောင်ထဲ၌ တရွေ့ရွေ့ ဆက်လက်ခုတ်မောင်းသွားသည်။
ရထားကြီး၏ ပျော်ရွှင်ပေါ့ပါးစွာ ဥသြဆွဲလိုက်သံကို ဆဒ္ဒုံချောင်း ဘူတာကုန်းပေါ်ရှိ မှောင်ရိပ်ထဲမှ ကြားရသည်။
အလင်းရောင်များကား ရေးရေးပျပျမျှသာ ရှိတော့၏။ အမှောင်သည် ရှိစုမဲ့စု အလင်း ရောင် စုကလေးကို လိန်ရှက်နေသည်။ ကုက္ကိုပင်ကြီးများသည်လည်း အမှောင်ရိပ် မဲမဲကြီးများ အဖြစ်ဖြင့်သာ ငြိမ်သက်နေကြ၏။
ဘူတာကုန်းပေါ်၌ လူအများ အသံမထွက်ဘဲ လှုပ်ရှားပြေးလွှားကာ အသင့်ကြိုနေကြသည့် မြင်းလှည်းများပေါ်သို့ ထန်းလျက်များ တင်နေကြစဉ်၌ ကျနော်သည်လည်း ထိုလူအုပ်ထဲ၌ ပါနေပြန်သည်။
ကျနော့်ကို အများက ဝိုင်းဝန်း သတိပေး ကြသော်လည်း ကျနော်သည် လက်ဝှေ့ပွဲများ၌ စင်ပေါ် တက်ရပ် ရသလိုရင်ခုန်ကာ ပျော်နေသည်။ ဤစွန့်စားမှုကို ကျနော်သည် အပျော်တမ်း အလုပ်တခုလို ထင်နေ၏။ ကောင်းကင်ယံ၌ မီးပုံးပျံနှင့် ပျံရသလို ဖြစ်၏။ ထိုအခါများတွင်ကား ဤ မှောင်ရိပ် ထဲမှ လူသားများမှာ သူတို့ ဝမ်းရေးအတွက် ကြောက်ရွှံ့ လှပါလျက်ဖြင့် စွန့်စားနေရသည်ကို ကျနော်သည် နက်ရှိုင်းစွာ မတွေးနိုင်၊ နက်ရှိုင်း စွာ မခံစားနိုင်၊ မတွေ့ထိနိုင်။
မြင်းလှည်းများသည် အမှောင်ရိပ်ထဲ၌ အသံမမြည်ဘဲ ရွေ့လျားလာကြ၏။ ချောင်း သဲပြင်ကြီးကို တိတ်တဆိတ် ဖြတ်ကူးနေစဉ်တွင် “လရောင်မလာခင် ရောက်မှ၊ အသံ မမြည်စေနဲ့ နော်” ဟု တီးတိုး ရေရွတ်သံများမှာ ကျနော့် အတွက် အပျော်ခရီး ထွက်လာသလို ဖြစ်နေသည်။
ကျနော်သည် ထန်းလျက်များ လေးလံစွာ တင်ထားသော မြင်းလှည်းတစီးပေါ်တွင် မညွန့်ရီနှင့် ညိုညို့ ကြား၌ ရောက်နေသည်။ မညွန့်ရီ၏ ပိဿာ ခုနှစ်ဆယ်မျှသာရှိသည့် သေးသေးကွေးကွေး ကိုယ်လုံးကြီးကြောင့် မြင်းလှည်းသည် သဲပြင်ထဲ၌ တဖက်သို့ အိနေသည်။
“ဒီလူ ဘာလိုက်ရှုပ်တာလဲ၊ ဒါ အပျော်ကစားတာ မဟုတ်ဘူး”
မညွန့်ရီက အသံနှိမ့်ပြီး ပြောသည်။
“မှောင်ခိုမလို့ပေါ့ ရီရီရဲ့ ”
“ကိုရင်မောင်....တော့ကို နရင်း မအုပ်လောက်သေးလို့ ကြည့်နေတာ”
မညွန့်ရီသည် အလွန်ကြီးမားကာ ဖါးပြုတ်ကြီးလို ကုန်းထနေသည့် သူ့ လက်ဝါးကို အမှောင်ရိပ်ထဲ၌ မြှောက်ပြနေသည်။
ညိုညိုသည် အသံကျိတ်ပြီး တခိခိရယ်နေသည်။
ကျနော်သည် ညိုညို့ ခါးကို လက်ဖြင့် ရစ်ပတ်ပြီး ဖက်ထားသည်။ သူသည် မြင်းလှည်းအခုန်တွင် ကျနော်ပခုံးကို ခေါင်းလာမှီသည်။ ကျနော့် ရင်အုံပေါ်တွင် သူ့ ခေါင်းဖြင့် မသိမသာ ဝှေ့နေသည်။ ကျနော့် လက်ကို ညင်သာစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားနေသည်။
ကျနော့် အတွက်ကား ပျော်စရာ ဖြစ်နေသည်။ အကယ်၍ တနေရာရာမှာ ဖမ်းဆီး လိုက်လျှင် ကျနော်ကား မည်သို့မျှ ဖြေရှင်း၍ရမည် မဟုတ်သည်ကို ကြိုတင်တွေးခဲ့မိ သော် လည်း ထို ကြုံတွေ့လာမည့် အန္တရာယ်များကို ကျနော်သည် မေ့နေ၏။
အမှောင်ထဲ၌ရှိသော ကျောင်းကုန်းရွာကို တိုးတိုးတိတ်တိတ် ဖြတ်ကျော်လာသည်။ မကြာမီ ကျောက်ခင်းလမ်းပေါ်သို့ မြင်းလှည်းများ တက်လာကြ၏။ မြင်းခွာသံမထွက်စေရန် မြင်းလှည်းများကို အနှေးဆုံး မောင်းနေကြ၏။
လရောင်များသည် အရှေ့ဖက်တောင်တန်းဆီမှ စ၍ ဖြည်းဖြည်းချင်း လင်းလာသည်။ ရွက်သစ်များ ဝေနေသော တောစပ်များဆီမှ လေတိုးဝှေ့သံများ ပျံ့ လွင့်လာနေသည်။ လူ့ဘုံ လောကကြီးမှာ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လာနေသည်။ ခဏတာပဲဖြစ်ဖြစ် ငြိမ်သက် ငြိမ်းချမ်းမှု ကား အခိုက်အတန့်၌ ဖြစ်ပွားလာနေသည်။ ဤ ငြိမ်သက် ငြိမ်းချမ်းမှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ အချုပ် အနှောင်ကင်းမဲ့မှုမှာ ခဏတာမျှသာ ဖြစ်သည်ကိုကား ကျနော့် လိုပင် အများသည်လည်း တွေးမိကြလိမ့်မည် ထင်သည်။
“ကိုရင်မောင်ကြီး... တော့ကို ထမင်းစားခေါ်တာလဲ တခါမှ မလာဘူးတော်... ” ဟု မညွန့်ရီက ပြောနေသည်။
“တော့ အဘက သွားမရှိတော့လို့ ထမင်းမစားနိုင်တော့ဘူး ကိုရင်မောင်ရဲ့ ၊ ဆန်ပြုတ်ဘဲ သောက်နေရတာ”
“တော်စမ်းတော်... မဦးမချွတ်တွေ၊ တော်တို့ နောက်တာနဲ့ အဖိုးကြီး မျက်နှာမ ထားတတ်တော့ဘူး သိလား၊ ကျုပ်ကို ရဲရဲ မကြည့်ရဲတော့ဘူး၊ တော်ကြာ ဒါကြီးက တရား နောက် နားပါလုပ်လာမှာ၊ ကဲ... ကိုရင်မောင်၊ ဒီနေ့ ထမင်းစားလာမလား မလာဘူးလား၊ ပြတ်ပြတ်ပြော”
“တော်ကြာ မညွန့်ရီက တသက်လုံး ကျွေးနေချင်တယ် ဆိုရင် ကျနော်တော့ ဒုက္ခဘဲ”
“နောက်မနေစမ်းနဲ့ ကိုရင်မောင်.... တော့ပုံမျိုးကို ကျုပ်က တိုင်မှတ်လို့ ထုံးမသုတ်ဘူး”
ညိုညိုသည်လည်း တခစ်ခစ်ရယ်မောနေရင်း ကျနော့်လက်ထဲသို့ သူ့ လက်ကလေး တ ဖက်ကို အသာလာထည့်ထားသည်။
“လူချောပါမမရီရယ်....၊ ကျမတို့တော့ ထုံးသုတ်ရုံမကဘူး... ရွှေ တောင်ချ ထားချင် တယ်” ဟုပြောနေသည်။
ကျနော်သည်လည်း အသံကို ထိန်းချုပ်ရယ်မောနေသည်။
တောင်တွင်းကြီးမှ မီးရောင်များ ကောင်းကင်သို့ လှမ်းတက်နေသည်ကို မြင်လာနေရသည်။
မတော်တဆ ရှာဖွေရေးများ သတင်းရကာ စောင့်ဖမ်းနေမလားဟု စိုးရိမ်စိတ်များ ဝင်လာ နေကြသည်။ စိုးရိမ်စိတ်များသည် သွေးကြောမကြီးမှတဆင့် အကြောသေး အကြော မျှင် ကလေးများအတွင်းသို့ပါ တဒိတ်ဒိတ် စီးဆင်းနေသည်ဟု ထင်လာရသည်။
စကားသံများ မထွက်တော့ပေ။ သက်မချသံများ ကြားလာရ၏။ ညိုညို့ လက်ဖ ဝါးပြင်တွင် ချွေးဥကလေးများ စို့လာနေသည်။
“နောက်ကို သူမလိုက်တော့နဲ့နော်...အခုနေတုန်း ဖမ်းမိရင် လူပါ အမိခံရမှာ၊ သူများတို့က တောင်ကျချင်လဲကျ လုပ်နေကြတာ၊ သူများ သူ့အတွက် စိုးရိမ်တာ၊ အလုပ်ပြုတ် သွားမှဆိုးတာ နော်.... နောက်ကို မလိုက်တော့နဲ့”
သူက မြို့ အဝင် သင်းချိုင်းကုန်း ကို ဖြတ်ကျော်နေစဉ်၌ ထိုစကားများကို တုန်ယင်စွာ အသံ မပွင့်တပွင့်ဖြင့် ပြောနေခဲ့သည်။
ကျနော်သည်လည်း ထိုစကားလုံး ကလေးများကို ခြေရာခံကာ တီးတိုးလိုက်လံ ရေ ရွတ်ကြည့်နေမိသည်။
(အပိုင်း ၁၂ သို့ ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန်...)
Posted by ငြိမ်းဝေ at 6:59 AM No comments: Links to this post
Posted by ငြိမ်းဝေ at 11:21 PM 1 comment: Links to this post
“ပန်းဝေဝေ↔စာအုပ်အငှါးဆိုင်ကလေးထဲကမီးရောင်က ဆိုင်အပြင်ဘက် ကိုက်အနည်းငယ်အကွာအထိ လင်းနေသည်။ရထားလမ်းနှင့်စာအုပ်ဆိုင်ကလေးကြားက မြေကွက်လပ်ပေါ်မှာလည်း မီးရောင်ကရောက်နေသည်။ လွန်ခဲ့သည့်နာရီဝက်လောက်ကတော့ အဲဒီမြေကွက်လပ်မှာချထားသည့် စားပွဲဝိုင်းကလေးဘေးမှာ လူတချို့ ထိုင်နေခဲ့ကြသေး၏။ စာရေးဆရာ တက္ကသိုလ်တင်မြင့်၊ ဆရာ ဦးရမ်းမဂျိ၊ ကိုခင်မောင်ကြည်နှင့်အတူ သူလည်းပဲ လဘက်ရည်ဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်နေခဲ့၏။
ဇေယျဝတီမြို့ သကြားစက်ဝန်းကြီးထဲ ဝင်ရာ ကားလမ်းက စာအုပ်ဆိုင်ကလေးနှင့် ကိုက် ၃၀ လောက်အကွာတွင် ရထားလမ်းကို ကန့် လန့် ဖြတ်ပြီး ရှိနေ၏။ သူတို့ ဝိုင်းစုထိုင်ပြီး စကားပြောနေခဲ့ရာ မြေကွက်လပ်ကလေးကို ရထားလမ်းနှင့် ကားလမ်းဆုံရာ ကုန်းထိပ်ပေါ်ကကြည့်လျင် ပန်းချီကားတချပ်လို လှနေ၏။ ကက်ဆက်နှင့်ဖွင့်ထားသည့် ခင်မောင်တိုးရဲ့ သီချင်းသံက ခတ်သဲ့သဲ့ကြားနေရ၏။ သူတို့ လူစု လူစုကွဲတော့ ည (၁၀)နာရီထိုးပြီ။ စားပွဲဝိုင်းက နောက်ဆုံး ထပြန်သွားသူကတော့ ထုံးစံအတိုင်း စာရေးဆရာ တက္ကသိုလ်တင်မြင့်။ ပြီးတော့လည်း ဧည့်သည်တွေမရှိတော့တဲ့ စားပွဲဝိုင်းဘေးမှာ သူတယောက်တည်း ကျန်နေရစ်ခဲ့၏။ ကက်ဆက်သီချင်းကိုလည်း မဒေဝီက ပိတ်လိုက်ပြီးပြီ။
စာအုပ်ဆိုင်ကလေးထဲကို လှမ်းကြည့်တော့ မဒေဝီက စာအုပ်စင်ဘေးက စားပွဲမှာ စာထိုင်ဖတ်နေ၏။ စားပွဲဝိုင်းမှာ လူရှင်းသွားပြီဖြစ်တာမို့ သူက မဒေဝီကို လှမ်းခေါ်လိုက်သည်။ မဒေဝီက တော်တော်နဲ့ ထမလာသေးပဲ စာထိုင်ဖတ်နေသေး၏။ သူက စားပွဲခုံနှင့်ကုလားထိုင်ပုလေးတွေကို သိမ်းဖို့ ပြင်လိုက်ရတော့၏။
သူက လက်ထဲက ခုံပုလေးတခုကို ပြန်ချလိုက်ရင်း မဒေဝီကို လှည့်ကြည့်သည်။
“မနက်ဖြန်ကျရင် ပိတောက်တွေပွင့်မယ်ထင်တယ်မောင် ↔
သူက စူးစမ်းသည့်အကြည့်နှင့် မဒေဝီကို ငေးကြည့်မိသည်။
“မိုးကဖြင့် တစက်တပေါက်ပဲ ရွာသွားတဲ့ဟာ ↔
မဒေဝီက သူ့ ကို သဘောကျသည့်အပြုံးနှင့်လှမ်းကြည့်နေ၏။
“မိုးတပေါက်နဲ့ လည်း ပိတောက်ပွင့်နိုင်တယ်မို့ လားမောင်ရယ်၊ အဲဒါ ကျမပြောတာမဟုတ်ဘူးမောင်ရေ ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်ပြောတာ ကဲ..↔
ထိုအချိန်အထိ သူက မဒေဝီကို ငေးကြည့်နေတုန်းဖြစ်နေသေး၏။ သိမ်းမယ်လုပ်နေတဲ့ ခုံပုလေးကိုလည်း ကိုင်ထားနေဆဲ။
“ ဘာငေးနေတာလဲမောင်ရဲ့ ကျမပြောတာ သဘောမတူနိုင်လို့ လား ↔
“ အော် အေး အေး ဟုတ်ပ၊ မင်းပြောတာဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဆိုင်ကူသိမ်းဖို့ လည်းစိတ်ကူးဦး၊ ညဉ့်နက်နေပြီ ↔
“ ညဉ့် နက်တော့ဘာဖြစ်လဲမောင်ရယ်၊ ဒီကနေ့ ည ကျမတို့ မအိပ်တော့ပဲနေလိုက်ကြရင်ကောင်းမလားလို့ ↔
သူက မဒေဝီကို အနည်းငယ်အံ့သြဟန်နှင့် မေါ့ကြည့်သည်။ လက်ထဲက ခုံပုလေးကိုလည်း ပြန်ချထားလိုက်သည်။ မဒေဝီက သူ့ ကိုအပြုံးမျက်နှာနှင့်ပြန်ကြည့်နေသည်။ နှစ်ယောက်သား အကြည့်ချင်းခဏကြာမျှဆုံလိုက်ကြသည်။
“ မနက်ကြရင် ပိတောက်တွေပွင့်နိုင်တယ်မောင်၊ ကျမအထင် မနက် သုံးနာရီ လေးနာရီလောက်မှာ ပိတောက်တွေပွင့်မယ်နဲ့ တူတယ်၊ ကျမတို့ ပိတောက်ပွင့်တာ စေါင့်ကြည့်ရရင်ကောင်းမလားလို့↔
သူက မဒေဝီကို မဝေခွဲတတ်သည့်မျက်နှာနှင့်ကြည့်သည်။ ပြီးတော့ မဒေဝီရဲ့အတွေးကို သဘောကျစွာပြုံးမိသည်။
“ မသေချာတဲ့အလုပ်ကို ဘာပြုလို့ ဒုက္ခခံနေမလဲကွာ၊ မိုးရွာရင်ပိတောက်ပွင့်မယ်ဆိုတာ မောင်သိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ညနေကရွာသွားတယ်ဆိုတဲ့မိုးက တကယ့်ကို နည်းနည်းလေး၊ မိုးဖွဲလေးလို့ တောင်မှ မဆိုသာပါဘူး၊အေးလေ ထားပါ၊ မင်းက ဆရာမင်းသုဝဏ်နဲ့ ကိုင်ပေါက်မှတော့ မောင် မကန့် ကွက်တော့ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ပိတောက်ပင်က ဘယ်မှာရှိသလဲ၊ မင်းစဉ်းစားထားတာ တွေ့ ထားတာကောရှိလို့ လား↔
“ အော် မောင်ကလည်း ပိတောက်ပင်တွေ မောင်တို့ ညကျောင်းရှေ့ က လမ်းမှာ တန်းစီနေတာ မောင်မသိဘူးလား၊ ပြီးတော့ အဲဒီတလမ်းလုံး သကြားစက်ဝန်ထမ်းအိမ်ယာတွေဆိုတော့ မာကျူရီမီးတွေထိန်နေတာပဲ၊ ကျမက မောင်သိနေတယ်ထင်လို့ ပြောတာ ↔
“ အော် ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်၊ ကောင်းလိုက်တဲ့နေရာကွာ၊ ပိတောက်ပင် နှစ်ဆယ်လောက် လမ်းဟိုဖက်ဒီဖက် တန်းစီပြီးပေါက်နေတာ၊ ဟား ↔
“ ဆိုင်တော့သိမ်းလိုက်မယ်လေ၊ အိမ်ပြန်နားရင် အိပ်ပျော်ပြီး မတော်တဆမနိုးလို့ ဒီအခွင့်အရေးလက်လွတ်သွားရင် ဒီတနှစ်ဘယ်လိုမှ ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးမို့ လား၊ ကျမသဘောကတော့ ဆိုင်မှာပဲ မောင်နဲ့ ကျမ စာဖတ်လိုက် ဆိုင်သန့် ရှင်းရေးလေးလုပ်လိုက်နဲ့ အချိန်ဖြုန်းလိုက်မယ်လေ၊ မနက် သုံးနာရီလောက်ကြတော့ အဲင်္ဒီပိတောက်လမ်းကို မြန်းကြတာပေါ့၊ အိုကေပါတယ်နော်မောင် ↔
သူက ခေါင်းတချက်ညိမ့်ကာ ခုံပုလေးများကို သိမ်းသည်။ မဒေဝီကိုလည်း စိတ်ထဲက ကြိတ်ပြီး သဘောကျနေမိသည်။ ပိတောက်ပွင့်တာကို စေါင့်ကြည့်ကြမယ်ဆိုပါလား။ မိုးတစ်ပေါက်နဲ့ လည်း ပိတောက်ပွင့်တာပဲ ဆိုပါလား။
သူတို့ နှစ်ယောက် စာအုပ်ဆိုင်လေးကို သန့် ရှင်းရေးလုပ်ကြသည်။ မဒေဝီက မီးညွန့် ကျိုးနေသည့်မီးသွေးမီးဖိုကို မီးပြန်မွှေးကာ ရေနွေးအိုးတလုံးထပ်တည်သည်။ လဘက်သုပ်တစ်ပွဲပြင်သည်။ ညဦးပိုင်းက ထမင်းစားလို့ ကျန်နေသည့် ထမင်းကျန်ကို ပန်းကန်ပြားတွင်ထည့်သည်။ ဇွန်းနှစ်ချောင်းတပ်သည်။
သူကတော့ ဆိုင်ဘေးတဝိုက်ကို တံမျက်စည်းလှည်းသည်။ အမှိုက်ကောက်သည်။ စာအုပ်စင်များကို ဖုံခါသည်။ နေ့ စဉ် စာအုပ်ငှါးစာရင်းကို စစ်သည်။ စာအုပ်ငှါးခရငွေကို စစ်သည်။
“ ပန်းဝေဝေ ↔စာအုပ်အငှါးဆိုင်ကလေးထဲ သူတို့ နှစ်ယောက် အလုပ်ရှုပ်နေစဉ် စာအုပ်ဆိုင်ကလေးရဲ့နောက်ဖက် ရထားလမ်းဘေးအိမ်ကလေးတွေဆီက ဆဲဆိုအော်ဟစ်သံများကြားလိုက်ရ၏။ မီးရောင်နှင့်ဝေးရာ ရထားလမ်းဘေး အနိမ့်ပိုင်း ဖင်တပြန်ခေါင်းတပြန် စုပြုံတိုးခွေ့ နေကြသည့် တဲမမည့်တမည် အိမ်ကလေးတွေဆီက အော်ဟစ်ဆဲဆိုသံက တိတ်ဆိတ်နေသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို တွန်းထိုးနှိုးလိုက်၏။
“ ဘာလဲ၊နောက်ထပ် ငါက ဘာထပ်ပေးရဦးမှာလဲ၊ ဟေ့ ခင်မော်နော်၊ ခင်မော် သီးခံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာထက်ပိုပြီး လွန်လာရင် ခင်မော်က ဘယ်မအေ မှ သီးမခံဘူးဟေ့၊ ဘာ ဘာပြောတယ်၊ အောင်မယ်လေး၊ လူလည်းအိပ်ပေးရတယ်၊ ဆက်ကြေးလည်းပေးတယ်၊ အရက်ဝယ်တိုက်တယ်၊ အို အမြီးတောင် ဝယ်ပေးတယ်၊ ဒါကိုအားမရလို့ ပိုက်ဆံထပ်ပေးရဦးမယ်ဟုတ်လား၊ အောင်မယ် လာစမ်းပါ၊ နင့်သေနတ်လောက်တော့ ခင်မော်က ဟိုဟာလောက်တောင် သောက်ဂရုမစိုက်ဘူး↔
မဒေဝီက သူ့ ဘက်ကိုလှည့်မကြည့်ပဲ လဘက်သုပ်ပန်းကန်ကိုသာ ခေါင်းငုံ့ ပြီးပြင်သည်။ သူက တံမျက်စည်းလှည်းနေရာက အသံကြားရာဆီ နားကရောက်နေ၏။ မကြာခင် မခင်မော်တယောက် စာအုပ်ဆိုင်ကလေးဆီ ရောက်လာနိုင်သေးသည်ကိုလည်း သူသိနေသည်။ မီးရောင်ကြောင့် ဆိုင်မသိမ်းသေးသည်ကို မခင်မော် ကောင်းကောင်းသိနိုင်သည်။ အခြေအနေပေးလျင် မဒေဝီနှင့်သူ့ ကို သူ့ ဘဝအဖြစ်အပျက်များကို ရင်ဖွင့်ကောင်း ရင်ဖွင့်ပေဦးမည်။ မခင်မော်က အသံကုန်ဟစ်ပြီးပြောနေပေသည့် ယောင်္ကျားတဦး၏အသံကိုမူ ခတ်အုပ်အုပ်သာကြားနေရ၏။ မခင်မော်ရဲ့စကားထဲမှာ သေနတ်ဆိုတာပါလာလို့ မခင်မော်တယောက် ရဲစခန်းက တပ်ကြပ်ကြီးစာရေးနှင့် စကားများနေခြင်းဖြစ်မည်ဟု သူတွေးမိသည်။ မခင်မော်က ရဲစခန်းကို ဆက်ကြေးပေးနေရသည်ကိုလည်း သူသိသည်။ ညဉ့်နက်သည့် တချို့ သောညများဆိုလျင် ရထားလမ်းဘေး မခင်မော်တို့ တဲအိမ်ကလေးတွေဆီ မကြာခဏရောက်လာလေ့ရှိသည့် တပ်ကြပ်ကြီးစာရေးမှာ မခင်မော်၏ဖေါက်သည်တယောက်ဆိုသည်ကို သူသိသည်။အခုတော့ မခင်မော်တို့ အဆင်မပြေဖြစ်ကြဟန်တူသည်။
မခင်မော်ရဲ့ အော်သံဟစ်သံ ထပ်ပြီး မကြားရတော့။ ခွေးဟောင်သံများကြားရပြီး လူနှစ်ယောက် စာအုပ်ဆိုင်ဘေးမှကွေ့ ကာ ကားလမ်းမပေါ်တက်သည်။ လမ်းဘေးဓါတ်မီးတိုင် မီးရောင်အောက်တွင် ရဲဝတ်စုံနှင့် လူနှစ်ယောက်။ ရထားလမ်းဘေး အမှောင်ထုထဲက ခွေးဟောင်သံများရပ်သွားသည်။
သူ့ စိတ်ထဲ ခဏအကြာတွင် စာအုပ်ဆိုင်ကလေးဆီ မခင်မော်ရောက်လာနိုင်သည်ဟုတွေးသည်။ သို့ မဟုတ် မနက်ဖြန်နေ့ လည်လောက်ဆိုရင်တော့ မခင်မော်တယောက် မဒေဝီရှေ့ တွင်ထိုင်ကာ သူ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းများကို ငိုကာရယ်ကာနှင့် ရင်ဖွင့်ပေလိမ့်ဦးမည်ဟု သူတွေးမိသည်။
“ မခူချင်စမ်းပါနဲ့ 
နှစ်ဆန်း ခါတော်မီမို့ 
ခပ်သိမ်း နယ်စုံစုံသို့ 
ပွင့်ငုံကို လင့်ကုန်ကြတော့လို့ 
ခေါင်းကြွကာ ဆာဝေဝေနဲ့ 
သူနှင့်မဒေဝီတို့ နှစ်ယောက် သကြားစက်ဝန်းကြီးထဲဝင်လာတော့ မနက် သုံးနာရီထိုးပြီ။ သူက စာအုပ်ဆိုင်ကလေးထဲက ထွက်လာကတည်းက ပိတောက်ပန်းကိုဖွဲ့ တဲ့ ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ “ပန်းတောက်ပန်း↔ ကဗျာကို တွေးလာခဲ့၏။ ဆိုင်ထဲက မထွက်လာခင် ပိတောက်ပန်းအကြောင်း မဒေဝီနှင့်သူ စကားနည်းနည်းထိုင်ပြောဖြစ်သေးသည်။ ရှေးစာဆိုများက ပိတောက်ပန်းကို သိတ်ပြီးစာမဖွဲ့ ခဲ့ဘူးလို့ သူ ထင်ကြောင်း၊ နောက်ပိုင်း ကိုလိုနီခေတ်လောက်ကြမှသာ ပိတောက်ပန်းကို စာဆိုတိုင်းလိုလို ကဗျာဖွဲ့ လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သူ့ အနေနဲ့ မကြေနပ်မိကြောင်း မဒေဝီကပြောခဲ့၏။ မဒေဝီ၏ထင်မြင်ချက်ကို သူက သဘောတူသည်။ ပိတောက်ပန်းကိုဖွဲ့ တဲ့စာဆိုတွေထဲမှာ ဆရာဇော်ဂျီကို သူ့ အနေနဲ့ အထူးအလေးအနက်ထားမိကြောင်း ပြန်ပြောပြမ်ိသည်။ ဆရာဇော်ဂျီက ခေတ်စမ်းကဗျာခေတ်ကို အဲဒီ ပိတောက်ပန်းကဗျာနဲ့ တွန်းဖွင့်လိုက်တယ်လို့ သူထင်ကြောင်း၊ အထင်ရှားဆုံးအင်္ဂါရပ်ကတော့ ပိတောက်ပန်းကို သက်မဲ့ဘဝက သက်ရှိဘဝရောက်အောင် သက်ရှိသဏ္ဍာန်ဖြစ်အောင် ဖွဲ့ တဲ့ အတတ်ပညာရေး ဆန်းသစ်မှုဟာ ခေတ်ဆန်းကဗျာရဲ့ ခေတ်ဟောင်းကဗျာတွေနဲ့ မတူ လမ်းသစ် ဖေါက်လိုက်တဲ့ကဗျာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောခဲ့မိ၏။ သူက ဥပမာအနေနှင့် ပိတောက်ပန်းကဗျာထဲက “ သူလဲလေ လောကီသားလိုပါ့၊ ကြွားချင်လှပေလိမ့်မယ်↔ဆိုတဲ့စာသားက သက်မဲ့ပိတောက်ပန်းကို သက်ရှိနေရာမှာထားပြီး ရေးဖွဲ့ တဲ့စားသားဖြစ်ပြီး၊ ပိတောက်ပန်းကဗျာရဲ့ အစဦးဆုံးပါဒဖြစ်တဲ့ “ မခူးချင်စမ်းပါနဲ့ ↔ဆိုတဲ့ ပါဒကြတော့ မြန်မာကဗျာသမိုင်းမှာ စာဟန်အရေးအဖွဲ့ ရဲ့ဟန်ကိုချိုးဖျက်ပြီး စကားပြောဟန်ကို အသိရှိရှိ ထိထိမိမိ ပထမဆုံးတီထွင်အသုံးပြုလိုက်တဲ့ အချက်၊ အဲဒီအချက်တွေဟာ မြန်မာကဗျာရဲ့ အချိုးအကွေ့ တခုဖြစ်စေခဲ့တဲ့အကြောင်း ပြောဖြစ်၏်။ သူ ပြောပြတာတွေကို နားထောင်ရင်းက မဒေဝီက “ ဆရာဇော်ဂျှီပြောသလိုဆိုရင် ကျမတို့ ပိတောက်ပန်းတွေ စေါင့်ပြီးခူးလို့ ဖြစ်မှဖြစ်ပါ့မလားကွယ်၊ ဆရာက ပ်ိတောက်ပန်းကို မခူးချင်စမ်းပါနဲ့ လို့ ရေးတယ်မို့ လား↔ဟု ပြောခဲ့သေး၏။ ထိုအခါကျတော့လည်း သူက “ ဒါကတော့ တို့ က ပန်းခူးဖို့ အဓိကထားမှာမှမဟုတ်တာ ပိတောက်ပန်းပွင့်တာကိုပဲ စေါင့်ကြည့်ချင်တာက အဓိကမို့ လားကွာ ↔ဆိုတဲ့စကားနဲ့ မဒေဝီကို ပြန်ပြီး နှစ်သိမ့်ခဲ့ရ၏။
သကြားစက်ရုံဝန်းကြီးထဲက စက်ရုံအဝင်ဖက်သွားရာ၊ အရက်ပျံစက်ရုံဖက်သွားရာနှင့် ညကျောင်းရှေ့ သို့ သွားရာ လမ်းဆုံလမ်းခွကို ရောက်တော့ သကြားစက်အဝင်ပေါက်ဂိတ်က ညစေါင့်တဦးထွက်လာကာ သူတို့ ကို လှမ်းကြည့်နေ၏။ သူနှင့်မဒေဝီက ညကျောင်းဖက်သွားရာလမ်းထဲ ချိုးဝင်လာခဲ့တော့မှ ညစေါင့်သည်လည်း ဂိတ်တဲကလေးထဲ ပြန်ဝင်သွား၏။
သူတို့ နှစ်ယောက် နာရီတကြည့်ကြည့်နှင့် လမ်းလျောက်လိုက် လမ်းဘေးက ခုံတန်းတခုတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်လုပ်နေခဲ့ကြသည်။ အစ ပထမတော့ သူနှင့်အတူ ညကျောင်းတွင် စာအတူတူသင်ကြသည့် ဆရာ ကိုခင်မောင်ကြည်တို့ အိမ်ဖက်က ခွေးတကောင်က လိုက်ဟောင်နေသေး၏။ ပြီးတော့ပြန်ငြိမ်သွား၏။ သူတို့ ကလည်း အိနြေ္ဒမပျက် လမ်းလျောက်နေခဲ့ကြ၏။ မနက် လေးနာရီကျော်လာခဲ့ပြီ။ ပိတောက်ပင် ပိတောက်ကိုင်းများဆီက မည်သည့်ထူးခြားမှုမျှ မတွေ့ ရသေး။
လမ်းဘေးနှစ်ဖက် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများမှာ တိတ်ဆိတ်စွာ အိပ်မေါကျနေကြ၏။ လမ်းလျောက်လာရင်းက အိမ်တလုံးရှေ့ ကိုရောက်တော့ သူ့ ခြေလှမ်းများ နှေးသွား၏။ အိမ်ရှေ့ ပန်းခြံကလေးကို လမ်းဘေးမီးရောင်အောက်တွင် မထင်မရှားတွေ့ နေရ၏။ လမ်းနှင့် မလှမ်းတလှမ်းဖြစ်သဖြင့် အိမ်ကလေးကိုမူ အမှောင်ထဲ၌ သဲကွဲစွာမမြင်ရ။
အိမ်ကလေးရှေ့ တည့်တည့်တွင် သူ့ ခြေလှမ်းများ နှေးသထက် နှေးသွားရသည်။ ထိုအိမ်ကလေးတွင် လွန်ခဲ့သော တလအချိန်အထိ နေထိုင်သွားခဲ့သော အရက်ပျံစက်ရုံ အထက်တန်းစာရေး ကိုစိန်အောင်တို့ မိသားစုကို သူ တွေးသည်။ ကိုစိန်အောင်က စက်ရုံဝန်ထမ်းများ အနေနှင့် ပြီးခဲ့သော ရှစ်လေးလုံးဆန္ဒပြပွဲနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ထားရှိသည့်သဘောထားများကို မေးထားသည့် သဘောထားစစ်တမ်းတွင် သူယုံကြည်သလို ထည့်ပြီးရေးခဲ့၏။ ရှစ်လေးလုံးဆန္ဒပြပွဲမှာ ပြည်သူတွေ၏ အထွေထွေမကျေနပ်ချက်များကို ဖေါ်ပြသည့် ကိစ္စဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ လူထုခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ကြောင်း ရေးခဲ့၏။ ထိုနေ့ က အလုပ်မှထုတ်ပယ်ကြောင်းစာကို ညနေသုံးနာရီခွဲတွင် ဌါနမှူးက သူ့ ကိုလာပေးခဲ့၏။ လေးနာရီတွင် ကိုစိန်အောင် စိတ်ဆင်းရဲသောကနှင့် အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့သည်။ အိမ်ရောက်တော့ အိမ်ရှေ့ တွင် အိမ်ထောင်ပရိဘောဂများချကာ ထိုင်နေကြသည့် သူ့ မိသားစုကိုတွေ့ ရတော့၏။ နေ့ လည်ကတည်းက သူ့ မိသားစုကို ဝန်ထမ်းအိမ်ယာမှ ပြောင်းရွှေ့ ရနလာပြောသည့် စက်ရုံလုံခြုံရေးများက ပြောပြောဆိုဆို ပစ္စည်းများပါ ဆွဲချလိုက်ကြ၏။ မိသားစုက ကိုစိန်အောင်ပြန်ရောက်တဲ့အထိ စေါင့်ဖို့ ပြောသည်ကိုလည်း လက်မခံကြ။ ကိုစိန်အောင် စိတ်ထိခိုက်ရတော့သည်။ နောက်တနေ့ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်းအတွင်း ခေတ္တခိုလှုံနေကြသည့် သူ့ မိသားစုက ကိုစိန်အောင်ကို အိပ်ယာကနှိုးတော့ ကိုစိန်အောင်က မနိုးသောအိပ်ခြင်းဖြင့် အိပ်ယာထဲက မထတော့။ ကိုစိန်အောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပြီ။အခုတော့ ကျန်ရစ်သူ ကိုစိန်အောင်တို့ မိသားစု ဘယ်ဆီဘယ်နေရာတွင် ဘယ်လို နေထိုင်နေကြသည်ကို သူ မတွေးတတ်တော့။
အိမ်ကလေးရှေ့ ကကျော်လာသည့်တိုင် အိမ်ကလေးထဲတွင် ကိုစိန်အောင်တို့ မိသားစု ရှိနေသေးသလ်ို သူုတွေးမိသည်။ သို့ တည်းမဟုတ် တနေ့ သောအခါတွင် သည်အိမ်ကလေးဆီသို့ကိုစိန်အောင်တို့ မိသားစု ပြန်လည်ရောက်ရှိလာနိုင်ကောင်းရဲ့ဟု သူဆုတောင်းမိသည်။
“ ဟော ဟော မောင်ရေ မောင်ရေ ဟိုမှာ ဟိုမှာ ↔
သူ့ လက်တဖက်ကို ဆောင့်ဆွဲလိုက်သည့် မဒေဝီကို သူက ဖြတ်ကနဲ ပြန်ကြည့်သည်။ အတွေးလွန်နေသည့် သူ့ စိတ်က မဒေဝီရဲ့အော်သံကြောင့် တိကနဲပြတ်ကျသွားရ၏။
“ ဘာလဲ ဘာလဲ↔
“ ဟိုမှာ ဟိုမှာ ကြည့်လေကြည့်လေ ဟောဟော ဟိုဖက်ကိုင်းမှာလဲ ဟောဟော ပွင့်လာပြီ ပွင့်လာပြီ ပိတောက်တွေပွင့်လာပြီ ပိတောက်တွေပွင့်လာပြီး ဟေး ဟေး↔
မဒေဝီက သစ်ကိုင်းများကို လက်ညှိုးလိုက်ထိုးရင်း တဟေးဟေးနှင့်အော်နေသည်။ သူကလည်း မဒေဝီနောက်မှလိုက်ကာ ခုန်ပေါက်လုမတတ်ဖြစ်နေသည်။
လမ်းပေါ်တွင် သူတို့ နှစ်ဦးမှအပ မည်သူမျှမရှိ။ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ဖြစ်ကာ တဟေးဟေးနှင့်အော်ကာ သစ်ပင်သစ်ကိုင်းများကို လက်ညှိုးထိုးကာ သူတို့ နှစ်ဦးစလုံး ဆူညံနေတော့သည်။ အနီးဆုံးအိမ်တချို့ က မီးများလင်းလာကြသည်။ မလှမ်းမကမ်းမှ ခွေးဟောင်သံများထွက်ပေါ်လာသည်။ အိမ်တချို့ ဆီက ပြတင်းတံခါးဖွင့်သံများကြားလိုက်ရသည်။
ပိတောက်ပင်တပင်က သစ်ကိုင်းများမှာ ကြည့်နေရင်းမှပင် အဖြူရောင်လိုလို၊ အဝါရောင်လိုလို ပန်းပွင့်များပွင့်အာလာနေကြ၏။ သူတို့ က ဒီဖက်ကကိုင်းကိုမေါ့ကြည့်နေစဉ် ဟိုဖက်ကိုင်းပေါ်က ပန်းပွင့်များ အဆုပ်လိုက် အခိုင်လိုက် ဘွားကနဲပေါ်လာကြ၏။ သူတို့ နှစ်ယောက်အဖို့ ဘယ်လိုမှ စိတ်ကို မထိန်းနိုင်ကြတော့။ နှစ်ယောက်စလုံး ပိတောက်ပင်တန်းအောက်တွင် ကခုန်လုမတတ်ဖြစ်ကုန်သည်။ အသံတွေ ဆူညံလျက်။
“ ဟေ့ ဟေ့ မဖြစ်သေးဘူး၊ မဖြစ်သေးဘူး၊ လူတွေနိုးကုန်ပြီ၊ မောင်တို့ အော်သံတွေတော်တော်ဆူသွားတယ်၊ ဟေ့ တော်တော့ကွာ၊ တော်တော့၊ ဒီလောက်ဆို ကြေနပ်တော့၊ ပြန်ကြရအောင်၊ တော်တော်ကြာ ဒို့ ကို အရူးတွေလို့ ထင်ကုန်တော့မယ်၊ အားနာဖို့ လည်းကောင်းတယ်↔
သူက မဒေဝီရဲ့လက်ကို လိုက်ဆွဲကာ ပါးစပ်ကလည်း တတွတ်တွတ်တားမြစ်နေမိသည်။ မဒေဝီကမူ ရုတ်တရက် အရှိန်မသပ်နိုင်သေး။အသံမပြုတော့သည့်တိုင် လမ်းမပေါ်တွင် ပိတောက်ကိုင်းများကို လက်ညှိုးလိုက်ထိုးနေသေး၏။
သူတို့ နှစ်ယောက် ပိတောက်ပင်တန်းလမ်းထဲက ပြန်လာတော့ ဇေယျဝတီမြို့ ကလေးမှာ နိုးထစပြုပြီဖြစ်သည်။ မြို့ ထဲသို့ ဝင်ရာ လမ်းပေါ်တွင် လူတယောက်တလေကို တွေ့ လာရ၏။ သကြားစက်ဝန်းကြီးထဲက ကင်းသံချောင်းခေါက်သံကိုကြားလိုက်ရသည်။ နေရောင်ကို မတွေ့ ရသေးသော်လည်း ဈေးဆိုင်တချို့ တံခါးတွေဖွင့်နေကြပြီ။
စာအုပ်ဆိုင်ကလေးဘေးက မြေစိုက်ခုံတန်းကလေးပေါ်တွင် သူတို့ နှစ်ယောက် အမေါပြေထိုင်ကြသည်။ မဒေဝီရဲ့အသက်ရှူသံကို သူကြားနေရသည်။ မဒေဝီဆီက သနပ်ခါးနံ့ သင်းသင်းကို သူ ရှူရှိုက်မိသည်။ အိပ်တန်းဆင်းငှက်သံများကို ကြားရသည်။ အထူးသဖြင့် စာကလေးငှက်ကလေးများက သူ့ စာအုပ်ဆိုင်ကလေးနှင့် လမ်း၏တဖက် မျက်စေါင်းထိုး ကုလားလဘက်ရည်ဆိုင်ကလေးကို ကူးချည်သန်းချည်လုပ်နေကြသည်။ ခုံတန်းကလေးပေါ် ထိုင်နေသည်မှာ အတန်ငယ်ကြာသည့်တိုင် မဒေဝီက စကားမပြောနိုင်သေး။ အိမ်ပြန်ဖို့ စကား မဟနိုင်သေး။ သူကမူ မဒေဝီနှင့် ခန္ဒာကိုယ်ချင်းထိကပ်ကာ ငြိမ်သက်နေမိသည်။
“ မောင် သဘောတူပြီမို့ လား ↔
မဒေဝီရဲ့စကားကြောင့် သူက ဇဝေဇဝါနှင့် မဒေဝီဘက်ကို လှည့်လိုက်သည်။
မဒေဝီဆီက ရုတ်တရက် ဘာစကားမျှ မကြားရ။ နှစ်ယောက်သား အတန်ငယ်တိတ်ဆိတ်သွားရသည်။
“အော် မိုးတပေါက်နဲ့ လဲ ပိတောက်ပွင့်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့စကားကို မောင် သဘောတူပြီလား လက်ခံပြီလားဆိုတာ မေးလိုက်တာပါ↔
သူက ရှေ့ ကိုပြန်လှည့်ပြီးထိုင်လိုက်သည်။ မဒေဝီကို မည်သို့ မျှစကားပြန်ပြီးမပြောတော့။
ဇေယျဝတီမြို့ ကလေးအဖို့ ဒီကနေ့ မနက်မှာတော့ပိတောက်ပန်းတွေနဲ့ ဝေနေတော့မှာကိုတွေးပြီး ကျေနပ်နေမိ၏။ ။
(ဒီဝတ္ထုတိုလေးကတော့ ဧရာဝတီ အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်က တင်ထားခဲ့ပြီးတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးဖြစ်ပါတယ်။)
Posted by ငြိမ်းဝေ at 8:30 PM No comments: Links to this post
Labels: နိုင်ငံတကာကဗျာ မိတ်ဆက်, ဝတ္ထုတို
အိမ်အပြင်ဖက်မှာ လရောင်တွေ ခြေတဖက်ချလိုက်ပြီထင်ပါရဲ့။
စားပွဲမှာ သူ စာထိုင်ရေးနေခဲ့သလား။ သူ့ ကိုယ်သူ ပြန်ငုံ့ ကြည့်တယ်။လက်ထဲမှာ စာရွက်တရွက်။ စာရွက်ပေါ်မှာ လက်ရေးသေးသေးလေးတွေ။ ကွေးကွေးကောက်ကောက် တွန့် လိမ်နေတဲ့ အက္ခရာ အမှတ်အသားတွေ။ သူကတော့ ကဗျာတပုဒ်အဖြစ်ချရေးလိုက်တာပဲ။ အဲဒါ ကဗျာတပုဒ်များလား။ သူက ကဗျာစာသားတွေကို သံသယနဲ့ အသံထွက်ပြီးဖတ်တယ်။ သူ့ အသံကို သူ ပြန်ပြီးနားထောင်တယ်။ ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်နေတဲ့ သက်ရှိသတ္တဝါတကောင်ကောင်ရဲ့ ညည်းငြူသံကို ကြားလိုက်ရသလိုပဲ။
သူ့ အသံကိုသူ ပြန်ပြီးနားထောင်ရင်းက တခြားအသံတခုကို ကြားလိုက်ရတယ်။ သေသေချာချာ အသံကိုစစ်ထုတ်ပြီးနားစိုက်တော့ တကယ့်ကို ခွေးအတကောင်ရဲ့ ခြောက်သွေ့ တွန့် လိမ်နေတဲ့ အူသံတခု။ သေသေချာချာထပ်ပြီး နားစွင့်တယ်။ သူ့ စိတ်ထဲမှာ အသေအချာကြားလိုက်ရတဲ့ ခွေးအအူသံက ပျောက်သွားပြန်တယ်။ သူက သက်ရှူမှုကို အောင့်ထားလိုက်တယ်။ အခန်းကလေးထဲ ဘာသံမှမကြားရတော့။ မဟုတ်ဘူး။ ဘာသံမှ မကြားရတော့ဘူးလို့ သူထင်တာ။ ဒါပေမယ့် သစ်ရွက်ခြောက်တချို့ အပေါ် သစ်ကိုင်းခြောက်တခုအပေါ် နင်းချလာနေတဲ့ ခြေသံတခု။ သူ့ အိမ်ကလေးဆီ ဦးတည်လာနေတဲ့အသံ။ သူ့ အနားကို နီးကပ်လာနေတဲ့အသံ။ သူ့ ဘေးနားမှာလာပြီးမှ ရပ်တန့် လိုက်တဲ့အသံ။ အမှောင်ထုထဲကတဆင့် လရောင်တွေကို ကြိတ်ပြီး စုတ်ယူမြိုချနေတဲ့ အသံ။
သူက စားပွဲဘေးမှာ ထရပ်လိုက်တယ်။ ရေးလက်စ ကဗျာစာရွက်က စားပွဲပေါ်က လျောကျသွားတယ်။ တံခါးမကြီးဆီ လျောက်လာလိုက်တယ်။ တံခါးမကြီးကို ဖွင့်လိုက်တယ်။ အိမ်တံစက်မြိတ် အမှောင်ထဲမှာပဲ ရပ်နေလိုက်တယ်။ လရောင်တွေလား...။ သူ့ အိမ်ကလေးပေါ်၊ အိမ်ကလေးနဲ့ တောအုပ်ကလေးကို အသက်ဆက်ပေးနေတဲ့ လမ်းကလေးပေါ်။ ပြီးတော့ ဘယ်တော့မှ ခြုံစေါင်အမည်းကို ခွါမချတတ်တဲ့ တောအုပ်ကလေးပေါ် လရောင်တွေနီရဲစီးမျောကျနေလိုက်တာ။ လရောင်တွေက သူရပ်နေရာ အိမ်တံစက်မြိတ်အနားကိုရောက်တော့ ရပ်တန့် သွားပြန်တယ်။ သူ့ ကို ချစ်ခင်စွာ ပူးကပ်ချော့မြူလိုက်တယ်။ သူ့ အနားမှာ ရစ်ဝဲပြီး ဝေ့ဝဲနေလိုက်တယ်။ အနီရောင် လရောင်တွေက သူ့ အိမ်ကလေးတဝိုက် လေချွန်သံတွေ ခတ်တိုးတိုးတီးခတ်ရင်း ဝေးသွားလိုက် နီးလာလိုက်။
ငါသည် ဇာတ်ခုံပေါ်၌ ရှိနေသည်
ရှေ့ မှာ ငါ ဘာဖြစ်ဦးမလဲ...။
( ပတ်စတာညက်ရဲ့ “ ရွာကလေး သို့ မဟုတ် လူ့ လောကဇာတ်ခုံ” ကဗျာမှ )
သူက အိမ်တံစက်မြိတ်အမှောင်ရိပ်ထဲမှာပဲ တုတ်တုတ်မျှမလှုပ်ပဲ ရပ်နေတယ်။ သူ့ အသံကို သူပြန်ပြီးနားထောင်တော့ တိတ်ဆိတ်လွန်းတဲ့ဆူညံသံတွေကို ကြားနေရတယ်။ လရောင်များကမူ သူ့ ကိုမတွေ့ ။ သူ့ အနားအထိရောက်လာနေသည့်တိုင် လရောင်တွေက သူ့ ကိုမတွေ့ ။ ဒါမှမဟုတ် မတွေ့ ချင်ယောင် ဆောင်လိုက်ကြတာလား။ သူကမူ လရောင်များကို တွေ့ နေရတယ်။ အနီရောင်လရောင်များ။
တောအုပ်တောတန်းကလေးအစပ်ဆီက သက်ရှိသတ္တဝါတခုခုရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို သူတွေ့ လိုက်ရတယ်။ သူမျှော်လင့်ထားတဲ့ အရာတခုပေပဲ။ ထိုအရာက တောအုပ်အစပ်မှထွက်လာကာ လရောင်အောက်မှာ ရပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ နောက်က နောက်ထပ်တခြားသက်ရှိသတ္တဝါ သုံးလေးခု။ ထိုအရာအားလုံး လရောင်အောက် ထွက်ပြီး ရပ်နေကြတယ်။ လမင်းကြီးကို မေါ့ကြည့်နေကြတယ်။ ပြီးတော့ လည်တိုင်တွေကို ယိမ်းကသလို ဆန့် ထားကြတယ်။ အပြာရောင် ခွေးအအူသံများ တောအုပ်အစပ်မှ ဟူးဟူးရားရား ထပြီး တောက်လောင်လိုက်ကြတယ်။ တောအုပ်ကလေးကလည်း အပြာရောင်ခွေးအအူသံများ နောက်မှ ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်ပြီးအပြာရောင်သန်းတယ်။ သစ်ရွက်တွေက အနီရောင်လရောင်တွေကို ခွါချလိုက်ကြတယ်။ သစ်ကိုင်းတွေပေါ်မှာ လရောင်တွေ အပြာရောင်သန်းကုန်တယ်။ တောအုပ်နဲ့ သူ့ အိမ်ကလေး အသက်ဆက်ပေးရာ လူသွားလမ်းကလေးပေါ်မှာတော့ လရောင်တွေ ယိမ်းကနေကြဆဲ။ အပြာရောင်နဲ့ အနီရောင်တွေ တခုနဲ့ တခု တွန်းကန်ဖက်တွယ်ထားနေကြတဲ့ လရောင်များ။
ည၏အမှောင်သည် ငါ့ကို ဖုံးလွှမ်းထား၏
အော်ပရာ မှန်ပြောင်းများကဲ့သို့ 
အမှောင်ထုအားလုံးသည် ငါ့ကို ချိန်ရွယ်ထား၏
အို ...အဖ ဘုရားသခင်
တတ်နိုင်လျင် ဒီတခါတော့ အကျွန်ုပ်အား သနားတော်မူပါ။
( ပတ်စတာညက်ရဲ့ “ရွာကလေးဇနပုဒ် သို့ မဟုတ် လူ့ လောက ဇာတ်ခုံ” ကဗျာမှ... )
သူက သူ့ ရဲ့ “ ဒေါက်တာဇီးဗားဂိုး ” ဝတ္ထုကြီးထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းတခန်းကို ပြန်တွေးနေမိပြန်တာပါ။ ဒီတုန်းက တော်လှန်ရေးကြီးရဲ့ နှလုံးသားမှာ ဒီလိုပဲ လရောင်တွေ အနီရောင်နဲ့ အပြာရောင် သွန်းခတ်ထားခဲ့တာပဲ။ အဲဒီလရောင်တွေအောက်မှာ သူ့ ကဗျာစာရွက်တွေ စားပွဲပေါ်က လွင့်ကျသွားကုန်တာပဲ။ ခွေးအအူသံတွေကို သူ့ အမွေခံအိမ်ကြီးထဲကထွက်ပြီး နားထောင်ခဲ့တာပဲ။ နှင်းတွေက ကမ္ဘာလောကကြီးတခုလုံးကို အဖြူနဲ့ အမဲ နှစ်ရောင်ထဲပဲ လိမ်းကျံလိုက်တာပဲ။ သူက တောအုပ်ကလေးရဲ့ အစပ် လမင်းကြီးကို မေါ့ကြည့်ရင်း အူသံတွေပေးနေတဲ့ ခွေးအတွေကို သည်လိုပဲ ရပ်ကြည့်ခဲ့တာပဲ။ ပြီးတော့ ခွေးအတွေကို လေသံတိုးတိုးနဲ့ လက်တဖက်မြှောက်အသံပြုပြီး တောအုပ်ထဲကို ပြန်မောင်းခဲ့တာပဲ။ ခွေးအတွေကလည်း တောအုပ်ထဲကို အသာအယာ ပြန်ဝင်သွားကြတာပဲ။ အဲဒီအချိန်တုန်းကများ လရောင်တွေက အနီရောင်ကိုချွတ်ချလိုက်ကြဖို့ ကြိုးစားနေကြတာ။ အပြာရောင်နဲ့ အစိမ်းရောင်။ ပြီးတော့ လစိမ်း။နှင်းစိမ်း။ လမ်းသွယ်အစိမ်း။
သူက ဦးထုပ်ကို တစေါင်းတရွဲ့ ဆောင်းလျက် သွားနေခဲ့တယ်
အဝါရောင်လရောင်တွေက အရိပ်တွေကို ကြည့်လျက်။
( အက်ခ်မာတော်ဗါရဲ့ “ နိဒါန်း ” ကဗျာမှ...)
သူက “ အက်ခ်မာတော်ဗါ ” ရဲ့ ကဗျာတပိုဒ်ကို စိတ်ထဲက ရွတ်ဆိုနေမိတယ်။ အခုလို သားရဲတိရစ္ဆာန်တွေ ခြောင်းမြောင်းစေါင့်ကြည့်တာခံရတဲ့အခိုက် အက်ခ်မာတော်ဗါရဲ့ အထီးကျန်ခြင်းကို ကိုင်းကူးကြည့်တယ်။ ဒါပေမယ့် မတူပါဘူး။ အက်ခ်မာတော်ဗါက လူတွေအများကြီးကြားထဲမှာ ထိုင်နေရင်းက အထီးကျန်ဖြစ်ခဲ့တာ။ သူကတော့ မော်စကိုမြို့ နဲ့ မနီးမဝေး ရွာကလေးတရွာရဲ့ထိပ် တောအုပ်ကလေးတခုဘေးက ထင်းရှူးအိမ်ကလေးထဲမှာ တယောက်ထဲ။
အထီးကျန်ခြင်းကို ရေးဖွဲ့ တဲ့အခါ တချိန်တုန်းကတော့ သူက သင်္ကေတဝါဒီတွေကို သိတ် သဘောကျတာပေါ့။ သင်္ကေတတွေထဲကတဆင့် အထီးကျန်မှုကို တူးယူရတာ တကယ့်ကို ရသမြောက်တယ်လို့့ထင်ခဲ့တာ။ တခါတလေ သင်္ကေတဝါဒနဲ့ အနာဂါတ်ဝါဒကြား ဗျာများနေတတ်တဲ့ “ မာယာကော်စကီး ” ရဲ့ ကဗျာတွေထဲမှာ အထီးကျန်မှုကို သင်္ကေတတွေနဲ့ ဖေါ်ပြထားတာ သူ ဖတ်ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် “ မာယာကော်စကီး ” က အထီးကျန်ခြင်းကို အလံတော်တခုအောက်မှာရပ်ပြီးမှ ရေးဖွဲ့ ခဲ့တာပဲ။ဒါလည်း သူ့ ရဲ့အထီးကျန်ခြင်းတမျိုးပဲဖြစ်ပေမပေါ့လို့ သူတွေးခဲ့ဖူးတယ်။ မာယာကော်စကီးဆိုတာက အထီးကျန် ရဲဘော်ကြီးပေါ့။ ပစ္စည်းမဲ့ အထီးကျန်ရဲဘော်ကြီးပေါ့။
ကဗျာဆရာမ အက်ခ်မာတော်ဗါ ကတော့ ဘဝနဲ့ ရင်းပြီးမှ ရလိုက်တဲ့ အထီးကျန်ခြင်းကို သင်္ကေတတွေ နိမိတ်ပုံတွေနဲ့ အားမယူပဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ ရေးပြလိုက်တယ်လေ။ ဒီတော့မှပဲ နိမိတ်ပုံနဲ့ အထီးကျန်ခြင်းကိုဖွဲ့ ရင် တခါတလေ ရိုးဂုဏ်ပျောက်သလိုဖြစ်တာကို သူ ဒက်ကနဲ သိလိုက်ရတယ်။ ဒါကြောင့် အခုလို အထီးကျန်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက် အက်ခ်မာတော်ဗါရဲ့ကဗျာတပိုဒ်ကို သူ ပိုပြီးခံစားလို့ ရနေတာများလား။ အေးလေ..။ အက်ခ်မာတော်ဗါရဲ့ ခင်ပွန်းက အုတ်နံရံတခုကို ကြောပေးပြီးရပ်နေတဲ့ အလုပ်သမား ၁၆ ယောက်ထဲက လူတယောက်ပေပဲ။ ရင်ဝကို သေနတ်ကျည်ဆံတွေ ဖေါက်ဝင်သွားခံရတဲ့ လူတယောက်ပေပဲ။ သားဖြစ်သူကတော့ မိဘမဲ့ခလေးဂေဟာတခုမှာ အငတ်ဘေးဆိုက်ပြီး သေဆုံးခဲ့ရတာပဲ။
သူ့ ကြတော့ အက်ခ်မာတော်ဗါနဲ့ မတူတဲ့အချက်က တိုင်းပြည်လည်းဆုံး ဘဝလည်း ဆုံးတဲ့သဘောများလား။သူ့ ကို တိုင်းပြည်က လက်မခံတော့ဘူးလို့ ပြောနေတာတွေဟာ တကယ်ပဲလား။ ဒီလိုဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လား။ ဖြစ်ကော ဖြစ်သင့်ရဲ့လား။
တခြားနေရာမှာတော့ အလင်းရောင်တွေ လူတွေ
ငါမှာတော့ နောက်ကလိုက်နေတဲ့အသံတွေ ကြားရ
(ပတ်စတာညက်ရဲ့ “ နိုဗယ်ဆု ” ကဗျာမှ...။)
အစ်စဗက်ရှားသတင်းစာထဲမှာ သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သတင်း။ လူ (၁၅၀၀၀) ကျော်တက်တဲ့ လူထုအခမ်းအနားမှာ သူ့ ကို လူတွေတယောက်ပြီးတယောက်စင်ပေါ်တက် ရှုံ့ ချခဲ့ကြတယ်ဆိုပဲ။ ကွန်မြူနစ်လူငယ်အဖွဲ့ ဝင်လူငယ်တယောက်က သူ့ ကို ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ဆိုပဲ။ ဆိုဗီယက်စာရေးဆရာများသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူး “အလက်ဇီ စာခေါ့↔ကဆိုရင် သူ့ ကို “ပတ်စတာညက်ဟာ ကျနော့်ရဲ့ အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာ ရန်သူဖြစ်တယ်” ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းမျိုးကို သုံးပြီးမှ ရန်လုပ်ခဲ့တာပဲ။ သတင်းစာတွေထဲမှာ သူ့ ကို “ ကိုယ်အစာစားတဲ့နေရာကို ညစ်ပတ်စေတဲ့ ဝက်မျိုး ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ ဆောင်းပါးတွေ ဆက်တိုက်ပါနေခဲ့တာပဲ။
ဆိုဗီယက်ကမ္ဘာမှာ လူထုအခန်းအနားတွေလုပ်တာ မဆန်းပါဘူး။ နယ်ချဲ့ သမား အရင်းရှင်ကမ္ဘာ ကို မရေမတွက်နိုင်တဲ့ လူထုအခန်းအနားတွေနဲ့ ဟောပြောရှုံ့ ချကြတဲ့ကိစ္စက သတင်းမှမဟုတ်တာပဲ။ အခုလည်းပဲ အရင်းရှင်ကမ္ဘာရဲ့ပဉ္စမံတဦးအဖြစ် သူ့ ကို ဆန့် ကျင်ရှုံ့ ချတဲ့ပွဲတွေကို ဆိုဗီယက်စာရေးဆရာများသမဂ္ဂက ဒါမှမဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာ ပါတီအာဏာပိုင်တွေက ကမကထလုပ်ပြီး ကျင်းပတာဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိနေလေတော့ သူက မချိပြုံး ပြုံးမိတော့တာပေါ့။ ပြီးတော့ အစ်စဗက်ရှားသတင်းစာထဲမှာ နေ့ စဉ်ရက်ဆက်ပါနေတဲ့ ဆောင်းပါးတွေက ကေဂျီဘီ စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေး ဌါနက ထောက်လှမ်းရေးတွေ နာမည်တမျိုးထဲသုံးပြီး အလှည့်ကျရေးနေကြတာပဲ ဆိုတာ သူသိနေတာပဲ။
မှန်တယ်။ စာပေနိုဗယ်ဆု သူ့ ကိုချီးမြှင့်တဲ့အကြောင်း “ဆွီဒင် နိုဗယ်ကော်မတီ↔က ကမ္ဘာကြီးကို ကြေညာလိုက်စဉ်တုန်းက သူက “ အလွန်အကျူးကျေးဇူးတင်၊ ဂုဏ်ယူအံ့သြဝမ်းမြောက်၊ တွေဝေစိတ်ရှုပ်ထွေး ” ဆိုတဲ့စကားကို ကြေးနန်းနဲ့ အကြောင်းပြန်ခဲ့တာ မှန်တယ်။ အဲဒီအကြောင်းပြန်စာထဲမှာ “ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်”ဆိုတဲ့ စကားအပြင် “တွေဝေ စိတ်ရှုပ်ထွေး”ဆိုတဲ့ စကား သူ အစေါကြီးကတည်းက ထည့်ပြောခဲ့တာပဲ။ သူ့ ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အသိက သူမမှားဘူးဆိုတဲ့အချက်။ ပြီးတော့ ဒီကိစ္စကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့ ဂယက်ကို သူ ခံစားနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်။ ဒီအချက်နှစ်ချက်ဟာ သူသေဆုံးသွားတဲ့အချိန်အထိ သယ်ဆောင်သွားရတော့မယ့် ရင်ထဲက အသိတွေပဲလေ။
သူ့ နားထဲ ခွေးအတွေရဲ့ခြေသံ ကြားလာရပြန်ပြီ။ အခန်းထဲမှာ တယောက်ထဲ လမ်းလျောက်ရင်း စားပွဲမှာထိုင်ရင်း အထီးကျန်ငှက်တကောင်ရဲ့ ဒဏ်ရာရပုံပြင်ကို သူ ပြန်လည်ခံစား နာကျင်နေခဲ့တာ အချိန်တွေဘယ်လောက်ကြာသွားခဲ့ပြီလဲ။ နားထဲမှာ ကြားလာရတဲ့ ခွေးအတွေရဲ့ခြေသံကြောင့် သူ့ အတွေးတွေ ရပ်တန့် သွားရပြန်တယ်။ သစ်ရွက်ခြောက်တွေ သစ်ကိုင်းခြောက်တွေပေါ် ဖိနင်းလျောက်လာနေတဲ့ ခွေးအတွေရဲ့ခြေသံတွေကို သူ ကောင်းကောင်းကြားနေရပြန်ပြီ။
အိမ်ကလေးရဲ့ အပြင်ဘက်မှာ လရောင်တွေ ကခုန်နေကြလောက်ရောပေါ့။ ဝက်သစ်ချတောအုပ်ကလေးထဲမှာ ခွေးအတွေ စုဝေးနေကြလောက်ရောပေါ့။ အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ခွေးအတွေရဲ့အသက်ရှူသံတွေ၊ သွားအချင်းချင်းကြိတ်ချေတဲ့အသံတွေ၊ လက်သည်းသွေးတဲ့အသံနဲ့ အမွေးခါတဲ့အသံတွေကို သူဘယ်နေရာရောက်ရောက် နားထဲမှာ ကြားနေခဲ့ရတယ်။ သူ့ နောက်က သစ်ပင်တပင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ၊ သူလမ်းလျောက်လာရာ လမ်းဘေးက အိမ်တအိမ်ရဲ့ မှန်ကာပြတင်းတခုရဲ့နောက်မှာ အရိပ်တွေ ရွေ့ လျားနေတာကိုလည်း သူ သတိမပြုပဲ နေလို့ မရလောက်အောင် ထင်ရှားသိသာလာနေခဲ့တယ်။ အခုလို လသာတဲ့ရက်တွေမှာ ခွေးအတွေရဲ့ခြေသံက အဝေးကြီးကတည်းက ကြားနိုင်တာပဲ။ အခုပဲ သစ်ကိုင်းခြောက်တခုကျိုးသွားတဲ့အသံ၊ သစ်ရွက်ခြောက်တခုကြေမွသွားတဲ့အသံကို သူကောင်းကောင်း ကြားလိုက်ရတာပဲ။ ဒါဆိုရင် သူ့ အဖို့အိမ်ကလေးရဲ့အပြင်ဖက်ကို ထွက်ရလိမ့်ဦးမယ်။ အိမ်ကလေးရဲ့တံစက်မြိတ်အောက် အမှောင်ရိပ်မှာ ရပ်နေရဦးမယ်။ ဝက်သစ်ချတောအုပ်ထဲက ထွက်လာကြတဲ့ ခွေးအတွေကို စေါင့်ကြည့်ရဦးမယ်။ ခွေးအတွေက လမင်းကြီးကို မေါ့ကြည့်ပြီး ဆွဲဆွဲငင်ငင် အူလိုက်တဲ့အသံတွေကို စေါင့်ကြည့်နားထောင်ရလိမ့်ဦးမယ်။ ပြီးတော့ သူက ခွေးအတွေကို မောင်းထုတ်ရပါလိမ့်ဦးမယ်။
မကောင်းမှု တခုခုကို ငါ ပြစ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့ပါသလား
ငါဟာ လူသတ်သမားလား လူဆိုးလား
ဘာ့ကြောင့်လဲဆို ငါဟာ ကမ္ဘာကြီးတခုလုံးကို ငိုစေခဲ့ပြီ
ငါ့တိုင်းပြည်မှာ လှပတဲ့အကြောင်း ရေသားတင်ပြခဲ့လို့ ပဲပေါ့။
(ပတ်စတာညက် ရဲ့ “နိုဗယ်ဆု” ကဗျာမှ...)
အခန်းထဲမှာ စန္ဒယားသံသဲ့သဲ့ကြားနေရတယ်။ ဒါဟာ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ ရင်ခုန်သံပဲ။ မိခင်ရဲ့စန္ဒယားလက်သံဟာ တကယ်တော့ သူ့ ရဲ့ကမ္ဘာဦးဂီတပဲ။ ဒီကမ္ဘာဦးဂီတနဲ့ သူ ကခုန်ခွင့်မရတော့တာ ကြာခဲ့ပြီလေ။ နောင်မှာကော ကခုန်ခွင့် ရနိုင်ပါဦးမလား။
မိခင်ကတော့ စန္ဒယားကို လက်နဲ့ တီးခတ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ စိတ်နဲ့ တီးခတ်နေတာ။ စိတ်နဲ့ လက်ကွက်တွေ စမ်းနေတာ။ မျက်ရည်တွေကို စန္ဒယားသံနဲ့ ရောဖျော်နေတာ။ ပေါက်ကွဲမှုတွေကို စန္ဒယားသံနဲ့ထုပ်ပိုးနေတာ။ မိခင်ရဲ့နောက်က တကောက်ကောက်လိုက်ပါရင်း အော်ပရာကဇာတ်ရုံကြီးတခုရဲ့ ထိုင်ခုံတခုပေါ်မှာထိုင်ရင်း သူ့ အမေက သူ့ ကို စန္ဒယားလက်သံ နားထောင်နေစေခဲ့တာ။ ဒီလို အနုပညာဝတ်မှုန်ကူးမှုမျိုးကို သူက ငယ်စဉ်ကတည်းက ယဉ်ပါးခဲ့တာပဲ။ သူ့ လက်ထက်ကြမှ သူ့ မိခင်ထက်ပိုတဲ့ အားထုတ်ချက်က သူက ကဗျာတွေထဲမှာ ခေတ်ကြီးတခုလုံးထည့်ပြီး ဒွန်မြစ်ကြီးကို ပြောင်းပြန်လှော်ခတ်စုန်ဆင်းလိုက်တဲ့ အချက်ပါပဲ။ အခုလို အချိန်မျိုးမှာ သူ့ အပေါ် သူ့ အားထုတ်ချက်အပေါ် ကွက်တိနားလည်နိုင်သူ မိခင်ကို သူ တမ်းတနေမိတယ်လေ။ သူ့ မိခင်ကို သူ့ ကဗျာတွေဖတ်ပြပြီး ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အကျင်နာခမ်းခြောက်မှုကို သူက နာနာကျည်းကျည်း ရင်ဖွင့်ပြလိုက်ချင်တာပေါ့။
ငါဟာ သဘာဝတရားရဲ့ သနားဖွယ့်ပုဂ္ဂိုလ်
ငါဟာ ကောင်းကင်တော်ရဲ့ ဗလာကိုယ်တီး
သန်းခေါင်ငှက်ရဲ့မြည်သံနဲ့ တူတဲ့ သံစဉ်လှိုင်း...။
(အိုစစ်မင်ဒယ်လ်စတန်း ရဲ့ “တိတ်ဆိတ်ခြင်း” ကဗျာစုမှ...)
ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ကဗျာဆရာတွေဖြစ်ကြတဲ့ “အိုစစ် မင်ဒယ်လ်စတန်း” နဲ့ “မာရီနာ စဗက်ထရေဗါ” တို့ ကိုလည်း သူ အားကိုးအကြီး တမ်းတမိပြန်တယ်။
ဆိုက်ဗေးရီးယား မဲဇာတောကြီးကို ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်လာတဲ့ ရထားတစင်းပေါ်မှာ လူတယောက် အသက်ငင်နေတယ်။ သူ့ ဘေးမှာ အလုပ်ကြမ်းစခန်းကိုအပို့ ခံရတဲ့ အလုပ်သမားတွေ စက်ရုပ်တွေလို ဝိုင်းစုထိုင်ရင်း သူ့ ကို ငုံ့ ကြည့်နေကြတယ်။ အမိုးမပါတဲ့ ရထားတွဲပေါ်မှာ လေနဲ့ နှင်းက မြှားအစင်းပေါင်းများစွာနဲ့ ပစ်ခွင်းနေခဲ့တယ်။ လူတွေ တယောက်နဲ့ တယောက်တိုးကပ်ထားရင်း အစာငတ်ရေငတ်ဒဏ်ကို တောင့်ခံထားကြရတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ လူတယောက် သေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ လူတယောက်ရဲ့အလောင်းကို ရထားတွဲပေါ်က တွန်းချလိုက်ကြတယ်။ အရှိန်နဲ့ ပြေးနေတဲ့ ရထားတွဲတွေက နောက်ထပ်မသေမရှင် အသက်ငင်နေတဲ့ လူတွေကို သယ်ဆောင်ရင်း ထင်းရှူးတောတခုကို ဖြတ်မေါင်းသွားနေခဲ့တယ်။
“ မင်ဒယ်လ်စတန်း ရေ ကျနော်က ခင်ဗျားထက် ကံကောင်းတယ်လို့ ဆိုရမလား၊ ဘာပြုလို့ လည်းဆိုတော့ ခင်ဗျားက ရထားတွဲပေါ်မှာ အစာငတ်ရေငတ်ပြီး သေခဲ့ရတယ်။ ကျနော်ကတော့ ကျနော့်ရဲ့အိမ်ကလေးထဲမှာ ခွေးအတွေ စေါင့်ကြည့်တာခံရင်း ကျနော့်ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ကို စိတ်မရှည်နိုင်စွာ စေါင့်နေခဲ့ရတာ” ။
ကောင်းကင်တော်ရဲ့ ဧည့်သည်တစ်ဦးအဖြစ်နဲ့ 
သင့် နိုင်ငံကို အလည်ရောက်လာခဲ့
အိပ်စက်ခြင်းမရှိတဲ့ တောအုပ်များကို ငါတွေ့ ခဲ့
ကွင်းပြင်တွေထဲ ငါ အိပ်စက်ခဲ့။
(မာရီနာ စဗက်ထရေဗါ ရဲ့ “အင်ဆိုမီနာ” ကဗျာစုမှ...)
“ မာရီနာ စဗက်ထရေဗါ” ကတော့ ကျနော့်ကို နောင်ဘဝကနေ စေါင့်နေလောက်ရောပေါ့။ အဲဒီမနက်က ထုတ်တန်းပေါ် ကြိုးစကို ပစ်မတင်ခင်၊ ခင်ဗျားလည်း ကဗျာတွေ ရွတ်သွားခဲ့သေးတာပဲမို့ လား။ ခင်ဗျားရဲ့ အချစ်ဆုံးရန်သူဖြစ်တဲ့ မာယာကော်စကီးရဲ့ကဗျာတွေကို ခင်ဗျားတွေးနေခဲ့တာပဲမို့ လား။ ခင်ဗျားရယ် ကျနော်ရယ် အိုစစ်မင်ဒယ်လ်စတန်းရယ် ပြီးတော့ အက်ခ်မာတော်ဗါရယ် ကျနော်တို့ တယောက်နဲ့ တယောက် ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ နီးကပ်ခဲ့ကြသလဲ။ အက်ခ်မာတော်ဗါက “ကျမတို့ လေးယောက်” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုးနဲ့ ဆိုဗီယက်ကမ္ဘာကြီးထဲက “ ကြီးလေးကြီး” ကို ဟစ်ကြွေးဂုဏ်ပြုခဲ့တာ။ အခုတော့ စဗက်ထရေဗါရေ ကျနော်နဲ့ ခင်ဗျား ပြန်ဆုံကြအုံးစို့ ...။
ဘယ်အချိန်က စန္ဒယားသံတွေပျောက်ပြီး ခြေသံတချို့သူ့ အနားကို ရောက်လာခဲ့တာလဲဆိုတာ သူ သတိမပြုလိုက်နိုင်ဘူး။ သူ့ ညာဖက်ရင်အုံထဲက စူးစူးဝါးဝါးနာကျင်မှုက သူ့ ကို တန်ပေါင်းများစွာ လေးလံတဲ့ဖိအားနဲ့ နင်းဖိထားတာ ခံစားနေရပြန်တယ်။ သူက ညာဖက်လက်ကို ဆကြည့်တယ်။ လက်က ဆကြည့်လို့ မရတော့ဘူး။ သူက နှစ်မြို့ စွာ ပြုံးလိုက်မိပါတယ်။
ထိုစဉ်မှာပဲ သစ်ရွက်ခြောက်တချို့ ကြေမွသွားတဲ့အသံကို သူကြားရတယ်။ သစ်ကိုင်းခြောက်တခု ဖျောက်ကနဲ ကျိုးပဲ့သွားတဲ့အသံ သူကြားရတယ်။ ခွေးအတွေ သူ့ အိမ်ကလေးဆီ လာနေကြပြီလား။ ခြေသံတွေက နှေးကွေးလွန်းစွ။ လာကြလေ..။ ငါ မင်းတို့ ကို စေါင့်နေခဲ့တာပဲ။ ဒီတခါတော့ ငါ မင်းတို့ ကို မေါင်းမထုတ်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်....။
သူက အိပ်ယာပေါ်မှာ လဲလျောင်းရင်း မနိုးတဝက် နိုးတဝက် ဖြစ်နေတဲ့အချိန် အိမ်ကလေးရဲ့ အပြင်ဖက် မလှမ်းမကမ်း ဝက်သစ်ချတောအုပ်ကလေးထဲကတဆင့် ခွေးအတွေက တိတ်ဆိတ်စွာစေါင့်ကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်။
နှင်းတွေက တောအုပ်ကလေးပေါ် တဖွဲဖွဲ။ လရောင်တွေက အိမ်ကလေးရဲ့ ခေါင်မိုးပေါ် အိမ်ကလေးရဲ့ တံစက်မြိတ်ပေါ် အိမ်ကလေးရဲ့ ပြတင်းပေါက် ဘောင်တွေပေါ် ခြေသံဖွပြီး လမ်းလျောက်လာနေကြပါတယ်။
၁၉၆၀ ခု၊ မေလ ၃၀ ရက်...။
မြို့ တော် မော်စကိုနဲ့ မနီးမဝေး “ ပါရီ ဒယ်ခီနို ” ရွာကလေးမှာ လူတွေ လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေကြပါတယ်။
တကမ္ဘာလုံးက ရောက်လာတဲ့ ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း ကြေးနန်းစာတွေကို ကြေးနန်းစာရေးတယောက်က ပါရီ ဒယ်ခီနိုရွာကလေးဆီ အပြေးအလွှားလာပို့ နေပါတယ်။
ဆိုဗီယက်ယူနီယံကြီးရဲ့ စာပေနိုဗယ်ဆုရှင် ကဗျာဆရာ စာရေးဆရာ “ ဘောရစ်စ် ပတ်စတာညက် ” ဟာ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းမှာပဲ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ ရွာထိပ်က ဝက်သစ်ချအိမ်ကလေးဆီ ရွာသားတွေရောက်လာတော့ အိမ်နဲ့ မနီးမဝေးတောအုပ်ကလေးထဲက ခွေးအတွေက အစွယ်တဖွေးဖွေးနဲ့ မာန်ဖီပြီး စေါင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။
အိမ်ကလေးနဲ့ဝက်သစ်ချတောအုပ်ကလေး ဆက်သွယ်ထားတဲ့ လူသွားလမ်းကလေးပေါ် နှင်းတွေကတော့ ဖွဲဖွဲနွဲ့ နွဲ့ ကျနေဆဲပါပဲ။ ။
(၁) အမှတ် ၄၉၉ စာမျက်နှာ ၈၉၊ ရုပ်ရှင်အောင်လံမဂ္ဂဇင်း၊ ဒေါက်တာမောင်မောင်ညို ရဲ့ “ရုရှားစာရေးဆရာကြီး ဘောရစ်ပတ်စတာနတ်၏ ကဗျာများ” ဆောင်းပါး
(၂) ၂၀၁၀ ဖေဖေါ်ဝါရီလထုတ် ရနံ့ သစ်မဂ္ဂဇင်း၊ မင်းကျော်သက် ရဲ့ “ဒေါက်တာဇီးဗါးဂိုးနှင့်ခရူးရှက် မှတ်မိသမျှ ”ဆောင်းပါး
(၃) Selected Poems : Anna Akhmatova
(၄) Selected Poems : Marina Tsvetayeva
(၅) The Eyesight of Wasps : Osip Mandelstan
(၆) ဂူဂဲ ကမ္ဘ့ာ့အင်တာနက်သတင်းကွန်ယက်
Posted by ငြိမ်းဝေ at 7:14 AM No comments: Links to this post
Labels: နိုင်ငံတကာကဗျာ မိတ်ဆက်, ရသဆောင်းပါး
ထိုအခါမှစ၍ သူနှင့် မီးရထားရဲများ၊ ဂါတ်ဗိုလ်များ ဖော်ရွေစွာ ပြုံးကာ ရယ်ကာ ဆက်ဆံနေသည် ကို တွေ့ရလျှင် ကျနော်သည် မိမိနှင့် မည်သို့မျှ မပတ်သက်သလို နေနိုင်လာအောင် ကြိုးပမ်းနေခဲ့ရသည်။
သူသည် ဆုံးခန်းတိုင်အောင် ပျက်စီးနေသည့် တင်တင်၊ မအေးသွယ်တို့နှင့်လည်း ရောရောနှောနှော ပေါင်းသင်းနေရသည်။
ရံဖန်ရံခါတွင် မ်ိန်းမမှုပွေသူ ရဲသားတဦးဦး၊ ဂါတ်ဗိုလ်တဦးဦးက သူ့ အနားမှ မခွာဘဲ စကားစရှာပြီး ပြောဆို ရယ်မောနေလျှင် ကျနော်သည် ထို ရယ်သံမောသံ ပြောဆိုသံများကို မကြားချင် မမြင်ချင်တော့ပေ။ ထိုအခါ၌ ကျနော်သည် သူ့ကို လှည့်မကြည့် နှုတ်မဆက်ဘဲ သူ့ ရှေ့မှ ဖြတ်သွားသည်။
ကျနော် ထိုသို့ ပြုမူသည်ကို သူသည်လည်း စိတ်ထိခိုက်ကာ မျက်နှာကလေး သိမ်ငယ်နေပြန်သည်။
ထိုနေ့မျိုးတွင်ကား ကျနော်သည် သူရှိရာသို့ မသွားတော့။
“သူ့ ကို မလုပ်စေချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် သူ လုပ်ရမှာပေါ့လေ၊ ဒါဟာ ရေစီးကြောင်းဆိုရင် သူလဲ ရေဖြစ်တော့ ဒီရေစီးကြောင်းအတိုင်း မျှောရမှာပေါ့၊ ဒီလိုမှဘဲ သူတို့ မငတ်အောင် နေနိုင်မယ်၊ သူ့ အမေတွက် ဆေးဝယ်နိုင်မယ်၊ ခု သိပ်မကြာသေးဘူး၊ သူ့ နားပေါ်မှာ နားတောင်းကလေး ဖြစ်လာဘီ၊ သူ အဝတ်အစားကလေးတွေလဲ ပြိုးပြိုးပြက်ပြက် ဝတ်လာနိုင်ဘီ၊ သူ လုပ်တာ မှန်ပါတယ်၊ လုပ်ရမှာဘဲပေါ့”
ကျနော်ကား ဂါတ်တွဲနောက်ဖက် ဝရံတာတွင် ထွက်ရပ်ရင်း ထို အတွေးများကိုသာ ထပ်ကာ ပြန်ကာတွေးနေရ၏။ အရာရာကို ဦးနှောက် အလေးပေးကာ ပိုင်းဖြတ်နေရ၏။
“ရဲတွေကို ပိုက်ဆံပေးစရာရှိရင် မှန်မှန်ပေးနော်၊ ငွေတော့ရှော့မပေးနဲ့” ဟု ကျနော်သည် နှစ်ယောက်ကြားသာရုံ ပြောကာမပြတ် သတိပေးနေတတ်သည်။
ထိုအခါများတွင် သူသည် ကျနော် ဘာကြောင့်မေးနေသည်ကို သိကာ သူ့မျက်လုံး အရည်လဲ့လာလာ ကျနော့် ကို ငေးကြည့်နေသည်။ ခေါင်းကိုတချက် ဆတ်ကနဲညိတ်သည်။
သူ့ အသံမှာလည်း တိုးသက်နေသည်။
ကျနော်သည် မှောင်ရီရီထဲဝယ် သူ့ ကို ပြန်၍ ငေးကြည့်နေပြန်သည်။ သူသည် အဝတ်အစားသစ်များဖြင့် ပို၍ တောက်ပလာသည်။ ကျနော် လက်ဆောင်ပေးသည့် အကျီင်္နှင့် ထမီမှာ သူနှင့် ပို၍လိုက်ဖက်နေသည်ဟု ရင်ထဲတွင် အတိုင်းမရှိ ကြည်နူးလာပြန်သည်။ကျနော်သည် အမှောင်ကို အားကိုးကာ ထိုင်ခုံအပေါ်၌ ထောက်ထားသည့် သူ့ လက်အပေါ်သို့ ကျနော့် လက်ဖြင့် ဖိကာ ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်သည်။
သူသည်လည်း လက်ကို ပြန်မရုပ်သိမ်းဘဲ ငြိမ်သက်နေ၏။ အမှောင်ရိပ်ထဲ၌ သူ့ ထံမှ ပေါင်ဒါရနံ့၊ ဒေါနပန်း ရနံ့၊ နှုတ်ခမ်းဆိုးဆီရနံ့များကြောင့် စိတ်များ၌ ထုံယစ်လာနေရပြန်သည်။
“ပိုက်ဆံတော့ သူတို့မယူဘူးလို့ ဘယ်လောက်ငြင်းငြင်း ယူအောင်ပေးနော်၊ ပိုက်ဆံမယူရင် ထန်းညက်လဲ မတင်နဲ့ပေါ့”
ကျနော်သည် သူ့ အနားတိုးရွှေ့လိုက်၏။
“သူတို့နဲ့ စလိုက်စရောလဲ နေရမှာပေါ့ကွယ်၊ ဘယ်လောက်အထိ နေရမယ်ဆိုတဲ့ အတိုင်းအတာတော့ ရှိရမှာပေါ့၊ သူ့ စည်းကိုယ်စည်းရှိရမယ်၊ သူတို့ထဲမှာ ကိုထွန်းတင်တို့လို ကိုပျားတို့လို ကိုလော်လီ တို့လို တကယ့် လူရိုးလူကောင်းတွေလဲ ရှိပါတယ်၊ ထွန်းမောင် တို့လို လူယုတ်မာတွေလဲ ရှိတယ်၊ ဆက်ဆံရေးမှာ လိုအပ်တာလောက်တော့ လုပ်ပေါ့၊ ခု ကိုပြောနေတာ ကို သဝန်တိုလို့ ပြောနေတာလို့များ မင်း တွေးနေသလား၊ အင်း…. သဝန်တိုတာလဲ ဖြစ်ချင် ဖြစ်မှာပေါ့ကွယ်၊ မင်းကို ကို ချစ်တာကိုး၊ တနေ့ကျရင် ကို အတည်တကျယူမယ့် မိန်းကလေးကိုး၊ သဝန်တို တယ်ဆိုရင်လဲ ကို မှန်ပါတယ်၊ ကို အခု ပြောနေတာတွေဟာ အမှန်တော့ အမှန်တွေဘဲမှုတ်လား၊ ပြောသင့်တာတွေဘဲ မှုတ်လား၊ ကဲ…ကဲ…ဒီ အကြောင်း ပြောနေရတာ မောပါတယ်၊ ဒီပြင်အကြောင်း ပြောကြစို့ကွယ်၊ နေ့တိုင်း ဒါချည့် ပြောနေရတာ မောဘီ”
သူသည် ပင့်သက်ကို လေးလေးတွဲ့ တွဲ့ ချနေသည်။
“သူများ မအေးသွယ်လို ဈေးမဆစ်တတ်ဖူး၊ တင်တင်လိုလဲ ပိုက်ဆံမပေးဘဲ မတင်ဘူး၊ ပိုက်ဆံပေးစရာရှိရင် တောင်းသလောက် ပေးလိုက်တာဘဲ၊ ကို့ ဖို့ တပြားမှ ကျန်ကျန် …မကျန်ကျန်… ၊ ဒါမှ စိတ်ချမ်းသာရမယ်ဆိုတာ သိပါတယ်၊ စိတ်ချကွယ်”
ထိုစကားသံများသည် ကျနော့် ရင်ခွင်အတွင်းသို့ တိုးဝှေ့ ဝင်ရောက်လာကာ အသားကို ဖောက်ကာ စိမ့်ဆင်း သွားနေသည်။
နှစ်ယောက်စလုံး စကားများစွာ ပြောရန် ရှိသော်လည်း ပြောရမည့်စကားများကို ချုပ်တည်းထားကာ ငြိမ်သက်နေကြသည်။ ကျနော်ကား သူ့ အနား၌ တိတ်တဆိတ် ငြိမ်သက်စွာ ထိုင်နေရခြင်းကို ကြည်နူးနေခဲ့သည်။
များသောအားဖြင့် နေ့ခင်းဖက် အပြန်ခရီးတွင် ပင်းချောင်းသို့ မရောက်မီ ကျနော်သည် သူ့ အနားတွင်သွားထိုင်လေ့ မရှိ။
သွားထိုင်မိလျှင်လည်း ပင်းချောင်းနှင့်နီးကပ်လာချိန်၌ သူကြောက်ရံွ့ တုန်လှုပ်နေပုံကို မြင်တွေ့နေရသည်မှာ စိတ်ချမ်းသာ နိုင်ဖွယ်မရှိ။
ပင်းချောင်းနှင့် နီးကပ်လာလျှင် တဂျုံးးဂျုံး ခုတ်မောင်းလာသည့် ရထားကြီး၏တွဲများမှာ လူသံသူသံ ငြိမ်သက် လာသည်။ မှောင်ခိုသူများသည် တယောက်မျက်နှာကို တယောက် အားကိုးမဲ့စွာ ကြည့်နေကြသည်။ စကား တလုံးမျှ မပြော။ အသံမရှိ။ မည်သူမျှ သက်ပြင်းလည်း မချ။ သူတို့ မျက်လုံးများမှာ သူတို့ စိတ်အဆောက်အဦး များ၏ တံခါးပေါက်များ ဖြစ်ကြ သဖြင့်ရင်ထဲ၌ ဖြစ်ပေါ် ခံစားနေရသော ဝေဒနာ အစုစုသည် သူတို့မျက်လုံးများပေါ်၌ ထင်ရှားစွာ လာ၍ ဟပ်နေကြသည်။
ဤအချိန်တွင်ကား ညိုညိုသည် လူက နေရာတွင် ငြိမ်သက်စွာ ထိုင်နေသော်လည်း သူ့ မျက်လုံးများမှာ ကြောက်ရွံ့မှုတုန်လှုပ်မှုများဖြင့် အငြိမ်မနေ ပျာယာခတ် လှုပ်ရှားလာသည်။ ပလက်ဖေါင်းပေါ်၌ တန်းစီရပ်နေကြသော ရဲသားများကို မြင်တွေ့နေရလျှင် သူသည် အသက် ရှူနိုင်တော့မည် မဟုတ်။
ပင်းချောင်း၌ ရှာဖွေရေးများ ဖမ်းဆီး ထားလျှင် မအေးသွယ်၊ တင်တင် တို့ကဲသို့၊ မအေးရွှေ တို့ကဲသို့ မိန်းကလေးများသည် သူတို့ ပစ္စည်းများပြန်ရရေးအတွက် သူတို့ ကိုယ်ခန္ဒာများကို စွန့်ကျဲလှူဒါန်းရန် ရထားပေါ်မှ ဆင်းနေရစ်ခဲ့ကြ၏။
တင်တင်ကား ဘယ်ဆီက ဘယ်လိုရလိုက်မှန်းမသိသည့် ကိုယ်ဝန်တခုလည်း အမြတ်ရနေခဲ့ပြီ။ သူ့ ကိုယ်ဝန်မှာ မသိ မသာ ကလေးမျှသာ ရှိသေး၏။
ပင်းချောင်း၌ရထားကြီး အခွံချည်းသက်သက် လှိမ့်ထွက်လာသောအခါ….ကျနော်သည် လူစီးတွဲတခု၏ တနေရာ၌ ရပ်ကာ ပင်းချောင်းဘူတာကို ကျောပေးလိုက်ပါလာခဲ့သည်။ စိတ်အာရုံအမြင်၌မူ ဆင်းနေရစ်ခဲ့သော အမျိုးသမီးများ၏ အရှက် ကမ်းကုန်နေပြီဖြစ်သော၊ အဆီပြန်နေသော၊ နီမြန်းနေသော သားသမင်ကဲ့သို့ အပြစ်ကင်းစင်သည့် မျက်လုံးကလေးများရှိသော…. ထိုမျက်နှာများသည် တဝဲဝဲ ပါလာနေကြ၏။
မိန်းကလေးတယောက် ပျက်စီးတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ။
ဤ သူဆင်းရဲမကလေးများကား ပျက်စီးနေကြပြီလား။
ကျနော့် အမြင်အတွေးများကား “အခြေအနေကပေးသောအတွေ့အကြေုံ၊ ထိုအတွေ့အကြုံ၏ မူလဇစ်မြစ်ကို သစ္စာတရားဖြင့်ခွဲစိတ် ရှာဖွေလိုက်သောကြောင့်” ပြောင်းပြန် ပြောင်းလဲသွားကြသည်။
ဤ မိန်းကလေးများကို ပျက်စီးနေသော မိန်းကလေးများဟု ကျနော် မမြင်နိုင်။
တခါတရံ၌ လူစုမိကြသောအခါ တင်တင်၏ ကိုယ်ဝန်ကို လက်သည်ရှာဖွေကြရင်း ကျနော်တို့သည် လူ့ဘုံ လောက၏ အပေါ်ယံမှ ရယ်စရာများကိုသာ ရှပ်ကြည့်ကြကာ တကယ်ရယ်ချင်သည် မဟုတ်ဘဲ ရယ်မောခဲ့ကြ၏။
“တင်တင်တို့ကတော့ နမူနာဘဲ၊ သူများတွေ လင်မရှိဘဲဗိုက်ပေါ်လာရင် ဖျတ်ချရတာနဲ့ ဘာနဲ့၊ တင်တင် ကျတော့ ပြဿနာရှင်းလိုက်တာ၊ ဘယ်လောက်လွယ်သလဲ၊ ချွေးခံ အင်္ကျီ ဗိုက်ကျယ်သီးကလေးတွေ တလုံးပီး တလုံး ဖြုတ်လိုက်တာဘဲ ဘယ်ဝေနေယျသတ္တဝါတွေကိုမှ ဒုက္ခ မပေးတော့ဘူး၊ ခပ်တည်တည်နေလိုက်တာဘဲ၊ ဒါပေမယ့် ကျုပ်တို့ကတော့ ကြည့်မနေရက်ဖူးမှုတ်လား၊ တရားခံတွေ့အောင် ရှာကြရမယ်”
ရယ်စရာများကို ရှာကြံပြောတတ်သည့် ဂါတ်ဗိုလ် ကိုမောင်ရီသည် ဂါတ်တွဲထဲတွင် ရထား ခုတ်မောင်းနေစဉ်၌ ဟက်ဟက်ပက်ပက်ရယ်လိုက်ပြီး မှောင်ခိုကုန်သည် ဦးပေါ်လာကြီးကို လက်ညိုးထိုးပြနေသည်။
ဦးပေါ်လာသည် လူကြီးပီပီ ရှက်ရှက်ဖြင့် မျက်နှာကြီးနီမြန်းလာကာ ပြုံးနေခဲ့သည်။
“တရားခံ ဦးပေါ်လာ…၊ ဒါ မောင်မင်းကြီးဘဲ ဖြစ်ရမယ်၊ ကျနော် အခိုင်အမာ ပြောရဲတယ်ဗျာ၊ မယုံရင် တင်တင့် ခလေးမွေးလာတာ စောင့်ကြည့်၊ ဦးပေါ်လာနဲ့ ချွတ်စွပ်တူနေရမယ်၊ သွားမပါဘူးလေ…. သွားဖုံးကလေး တမြုံ့မြုံ့နဲ့”
“ဒီဆရာလေး လက်ချက်နေမှာပေါ့၊ တီဘီစီတွေဟာ လက်ကော ခြေကော အားလုံးကော သွက်ကြတာ” ဦးပေါ်လာသည် တဟဲဟဲရယ်ရင်း ကျနော့် အပေါ်လွှဲချနေပြန်သည်။
“ဟုတ်တယ်…. တီဘီစီကလေး မွေးလာမှာ” ဟု ကိုရွှေယောက်သည်လည်း ကျနော့် ကို လက်ညှိုး ထိုးပြောရင်း… တသောသောရယ်နေသည်။
ထိုအချိန်တွင်ကား ဤပြက်လုံးများမှာ ပွဲအကျဆုံးဖြစ်နေခဲ့သည်။
“မဟုတ်ဘူးဗျ၊ သူက ခင်ဗျားတုိ့ အချင်းချင်းတွေမှ ပိုပီးစေတနာထားတာ၊ မယုံရင် တင်တင် မွေးလာတာ စောင့်ကြည့် ကိုရွှေယောက် ဆံပင်လို နီကျင်ကျင် တွန့် ကောက်ကောက် ကလေးနေရမယ်”
“အေးဗျာ အနဲနဲ့ အများဆိုတာတော့ ပါမှာပေါ့၊ ကျနော် ရွှေယောက်လဲ ယောက်မိချင် ယောက်မိမှာပေါ့ဗျာ၊ ဟဲ…ဟဲ…အခုမှ သူတော်ကောင်းတွေ လုပ်မနေကြပါနဲ့၊ ဒါပေမယ့် တကယ့်တရားခံဟာကျနော်တို့အထဲက မဟုတ်ဘူး၊ ဒါဟာ ရဲသားတွေလက်ချက်ကော မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗျာ၊ ဒီကောင်မလေးက သူတို့နဲ့ ပိုပီး နီးနီးစပ်စပ်နေတာ”
“ဟာ … ဒါတော့ မှားတယ်ဗျို့၊ ဒီ ဃရာဝါသကိစ္စထဲ ဘယ့်နှယ်ကြောင့် သူတော်ကောင်းတွေ ဆွဲထဲ့ရတာလဲဗျာ”
ကိုမောင်ရီသည် အလံကို ယမ်းပြနေရင်း တသောသော ရယ်နေခဲ့သည်။
ကျနော့် စိတ်၌လည်း တင်တင့် အကြောင်းမှာ ဖြစ်ရုိုးဖြစ်စဉ် ကလေးအဖြစ်ဖြင့် ပေါ့ပေါ့ဆဆကဲ့သို့သာ တွေးနေခဲ့သည်။
ပြည့်တန်ဆာမကလေးများသည် ပြည့်တန်ဆာအလုပ်ကို သူတိုိ့ ဝမ်းရေးအတွက် အလုပ်တခုအဖြစ်ဖြင့် ရိုးသားစွာ လုပ်ကိုင်နေကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု တွေးလာမိသည်။
တခါတရံတွင်မူ “ညိုညိုသည်လည်း မှောင်ခိုသမ၊ တင်တင် လိုမိန်းကလေး၊ ထိုမှ ဖါဖြစ်သွားလျှင်” စသည့် အတွေးများကို ကျနော်သည် ရင်၌ တင်းကျပ် လေးလံစွာဖြင့် တွေးတော လာနေရပြန်သည်။
ကိုမောင်ရီကား ထိုသို့ ကျနော် မရယ်မပြုံး ဖြစ်နေသည်ကို မနှစ်သက်တတ်ပေ။
သူသည် ဂါတ်တွဲပေါ်တွင် သူနှင့် ကျနော် နှစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့ချိန်၌ ကျနော့် လည်ပင်းကို ဖက်ထားရင်း သူ့ ခံယူထားချက်များကို တဟားဟား ရယ်သံနှောကာ ပြောနေတတ်သည်။
“ရင်မောင်ရာ…. မင်းကို ငါကြည့်ကြည့်နေရတာ ငါ့စိတ်ထဲမှာ ဘုရားအလောင်းကလေးကို ဖူးမျှော်ကြည်ညိုနေရသလိုဘဲ၊ဟဲ…ဟဲ…၊ ရင်မောင်ရ သူတော်ကောင်းဆိုတာ မှတ်ထားကွ၊ ငတ်တာဘဲ၊ ငတ်တယ်၊ အေး…. မင်းက မှောင်ခိုတွေ တင်လာရင် စိတ်ညစ်လာကော၊ ဒါကို စိတ်ညစ်စရာလို့ မှတ်နေရင် ဒီအချိန် ဒီကာလမှာ ရဲဘော်ဟာ ဖေါက်ပြန်နေတဲ့ ရဲဘော်ဘဲ၊ ဒါကို ရဲဘော်တို့ ငါတို့အတွက် စိတ်ညစ်ရာကနေ ငွေတွေ ရွှေတွေ ဖြစ်လာအောင် ယုံကြည်ချက် ရှိ်ရမယ်…ခံယူလာတတ်ရမယ်…. ကျင့်သုံးလာတတ်ရမယ်၊ လချီးတဲ့….ဟား..ဟား..၊ ဟေ့.ရင်မောင်ရ ငါသာ တီဘီစီဆိုရင် ကားဝယ်စီးပလိုက်တာပေါ့ကွာ၊ ဆန်းသလား….။
“မှတ်ထားဟေ့၊ တားမြစ်ကုန်တွေ ရှိနေတုန်းမို့သာ ငါတို့တတွေ မျက်နှာပွင့်လန်းနေကြတာ၊ တော်ကြာ မရှိတော့ဘူးဆိုမှ ငါတို့ နောင်တရကြမှာ၊ အဲဒီကျတော့မှ လက်မှတ်မဲ့ ခရီးသည်ကလေးတွေဆီက တမူးတောင်းစားရ တပဲတောင်းစားရ၊ ရဲဘော်ရာ မဝေးလှတော့တဲ့ အနာဂါတ်ကာလမှာ ဒီမှောင်ခိုကုန်တွေ မရှိတော့ဘူးလို့ တွေးကြည့် လိုက်စမ်းပါ၊ ဘယ်လောက်များ စိတ်ထိခိုက်စရာ ကောင်းလိုက်ပါ့မလဲ၊ ဘယ်လောက်များကြေကွဲဖို့ ကောင်းလိုက်ကြမလဲ၊ ဒီ အကြောင်းသာ မြို့လုင် သ်ိန်းလွင်ကြီး သိရင် ဝတ္ထုတပုဒ်ရေးမှာ၊ အဲဒီငပေါကြီးအက်(စ) စီလုပ်ရတာ ထမင်းမဝတော့လို့ တဖက်တလမ်းက စာရေးဆရာလုပ်မယ်ဆိုပီး ဗလာစာအုပ်တအုပ်နဲ့ စာတွေ ထရေးနေတယ်ဆိုတာ မင်းမကြားမိဘူးလား၊ ဒီကောင်ကြီး ခုဆို ဝတ္ထုတွေ အုပ်နှစ်ဆယ်လောက်တောင် ဖတ်ဘူးနေဘီကွ”
အတော်ကြာ၍ ကိုမောင်ရီ၏ စကားများ အဆုံးသတ်သွားလျှင် ကျနော်သည် ဂါတ်တွဲနောက်ဖက် ဝရံတာသို့ ထွက်ရပ်ကာ ကျနော်၏ အစောက ရယ်မောလိုစိတ်များ အားလုံးသည်လည်း ကြက်သန်း ကြက်လှေးပျောက် တဖျတ်ဖျတ်ပျောက်ကွယ်သွားနေသည်။
ကျနော်သည် မှောင်ခို အရှုပ်အထွေးများကြား၌ ငြိတွယ်ကာ ပါနေရသူအဖြစ်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ပြန်၍မြင်နေရသည်။ ညိုညိုကိုယ်တိုင် မှောင်ခိုသူ ဖြစ်လာခဲ့ကာ သူ့ ကို မတားဆီး နိုင်တော့သဖြင့် အခြားသူများကို မဖမ်းဆီး လိုတော့သည့် စိတ်များမှာ တချိန်ထက် တချိန် ပို၍ ရင့်မာလာနေခဲ့သည်။ ညိုညို့ကို အကာအကွယ်ယူပြီး အခြား မှောင်ခိုသမားများသည်လည်း ပို၍ အတင့်ရဲလာနေကြ၏။
ဤအရှုပ်အထွေးများမှာ တခုနှင့်တခု လိန်ရှက်လာကြကာ ရှုပ်ထွေးသည်ထက် ပို၍ရှုပ်ထွေးလာနေသည်။
နောက်ပိုင်းရက်များတွင် သူတို့တတွေသံကုန်တွဲ တတွဲ ပေါ်၌ ထန်းလျက်များတင်ပြီး လိုက်ပါနေကြသည်ကို ကျနော်လည်း သတိမထားမိခဲ့။
နေပူပြင်းသည့် တနေ့လည် ကျောက်ပန်းတောင်းဘူတာတွင် ရထားရပ်စဉ်၊ ကျနော် ဂါတ်တွဲပေါ်တွင် တုံးလုံးလှဲနေစဉ်၊ သူတို့ အုပ်စုသည် ထန်းလျက်များကို သယ်လာကြပြီး သံကုန်တွဲပေါ်သို့ တင်ကြ၏။ ခရီးသည်များ မရောက်သေး။
ကျနော်တွေ့မြင်နေရသဖြင့် သူတို့ကို မတင်ကြပါရန် တောင်းပန်သည်။ သူတို့သည် ဆက်၍ တင်မြဲ တင်သည်။
ထိုနေ့က ကျောက်ပန်းတောင်းမှ ရထား ထွက်လာခဲ့သောအခါ သူတို့သည် သံကုန်တွဲ၏ တံခါးရွက် လေခို လေဝင်စေရန် ဖွင့်ပြီး ထန်းလျက်အိတ်များအပေါ်၌ ထိုင်ကာ လိုက်ပါလာခဲ့ကြသည်။်
ကျောက်ပန်းတောင်းနှင့် အင်တောကျယ်အကြား တနေရာ၌ ရထားဆောင့််သဖြင့် သူတို့ ကရော်ကမယ် ဖွင့်ထားသည့် သံတံခါးရွက်သည် ဝုန်းကနဲ ပစ်ရိုက်လိုက်၏။ အပေါက်အနီးရှိ ကိုးနှစ်အရွယ်ခန့် မိန်းကလေး နဖူးကို ရိုက်မိကာ ခလေးမကလေးလဲကျသွားသည်။ သူ့ ဖခင်သည် ခလေး မကလေးကို ရင်ခွင်အတွင်း၌ ပွေ့ပြီး နှာနှပ်နေသည်။
သံတံခါးရိုက်သံကြောင့် ကျနော်နှင့် ဂါတ်ဗိုလ်သည် ထွက်ကြည့်လိုက်ကြ၏။ လမ်းခုလတ်၌ ရထားကို ဘရိတ်ဆွဲအုပ်ကာ ရပ်လိုက်ရတော့သည်။
ရဲများအကူအညီဖြင့် သူ တို့ကို စစ်ဆေးရသည်။ ထန်းလျက်အိတ်များကို ပစ်ချ၊ လူများကို ဆင်းခိုင်းပြီး ရထားကြီးကို အလံသုတ်သုတ်ပြကာ ထွက်လာရသည်။
သူတို့ လူ တဆယ့် ငါးယောက်မျှသည် သံလမ်းနံဘေး ကန်ဘောင်ကြီးအပေါ်၌ တန်းစီရပ်နေကြ၏။ ကျနော် တို့ကိုရွံ့ရှာ စက်ဆုတ်သည့် မျက်လုံးများဖြင့် ကြည့်နေ၏။ ဒဏ်ရာရနေသည့် ခလေးမကလေးကို ပွေ့ ချီထားသည့် ဖခင်၏ မျက်လုံးများ၌ မျက်ရည်များ ပြည့်လာနေသည်။ ရထားထွက်လာသောအခါ သူသည် ကျနော့် နံမည်ခေါ်ပြီး လှမ်းဆဲနေခဲ့၏။
“ဟေ့…. မအေ=ရင်မောင်….၊ဒို့လဲ လူတွေပါကွ၊ မအေး =ရ၊ ဒို့ကျတော့ မတင်ရဘူးလားကွ၊ မင်းတို့ တရားတယ်ဟေ့၊ သိပ်တရားတဲ့လူတွေ၊ ငါ=မသားတွေ၊ ဒို့ ကို ဒီလို နှိပ်စက်နိုင်အောင် ကျန်းမာကြပါစေဗျာ ချမ်းသာကြပါစေဗျာ….ကြံတိုင်း အောင်လို့ ဆောင်တိုင်းမြောက်ကြပါစေ၊ လိုရာဆုနဲ့ တလုံးတဝထဲ ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ၊ သာဓုဗျာ… သာဓုဗျာ…သာဓုဗျာ”
ထိုအသံသည် ကျနော့် နောက်မှ အရိပ်ကဲ့သို့ ပြေးလိုက်လာနေသည်။
သူတို့ကို လှည့်မကြည့်တော့သော်လည်း ကျနော်၏ အမြင်မှတ်စိတ် အာရုံ၌ကား သူတို့ ကန်ဘောင်ကြီးနံဘေး၌ စုရပ်နေပုံပါလာနေသည်။ သူတို့ ကျောဘက်၌ သူတို့ကိုယ်ပေါ်သို့ အရိပ်ထိုးနေသော ညောင်ပင်ကြီးသည် အုပ်ဆိုင်းနေ၏။ ကန်အောက်၌ စိမ်းပြာနေသော ကန်ရေပြင်သည် အေးမြကာ မလှုပ်မရှား ငြိမ်သက်နေသည်။
သူတို့ကား လမ်းခုလတ်၌ မသန်းစွမ်းတော့သော ကိုယ်ခန္ဒာများကို သယ်ဆောင်ကာ၊ ထန်းလျက်အိတ်များကို ထမ်းပိုးကာ လူနာတယောက်ကို ပွေ့ယူကာ ဘယ်ဆီသို့ သွားကြမည်နည်း။
ရထားတစင်းလုံးမှ လူများသည် သူတို့ကို ထွက်ကြည့် နေကြ၏။ ကိုရွှေယောက် သားကလေး သုံးယောက်၏ မျက်လုံးအိမ်များ၌ လူသားတို့၏ မေတ္တာတရားကြောင့် မျက်ရည်များ ပိတ်ဖုံးလာနေကြသည်ကို နောက်တွဲမှပင် လှမ်းမြင်နေရ၏။ ညိုညိသည်လည်း ကျနော့်ကို လှမ်းကြည့်နေ၏။
“သူတို့လဲ လူတွေဘဲဗျာ၊ လူတွေဘဲ မှုတ်လား”
ကျနော့် နှလုံးသားများသည်လည်း ကျနော့် ဦးနှောက်များကို ထုိုမေးခွန်းများ ခွန်းဆင့်ခွန်းဆင့် မေးမြန်းနေသည်။
ကျနော်သည် ဂါတ်တွဲခုံတခုပေါ်၌ ကိုယ်ကို ပစ်လှဲ ထိုင်နေမိ၏။
“ဒီလိုလုပ်မှဘဲ ရင်မောင်ရေ့ …ဒီလိုမလုပ်ရင်လဲ မရတော့ဘူး” ဟု ဂါတ်ဗိုလိ ကိုမောင်ကိုကြီး က ကျနော့်ကို လှမ်းပြောနေသည်။
ဤသိြု့ပုလုပ်ခဲ့ခြင်းသာလျှင် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရာ၌ အမှန်ဆုံးဖြစ်သည်ဟု ကျနော်သည် အကြိမ်ကြိမ် သုံးသပ်နေမိ၏။
စစ်စစ် ပြဿနာတခုကို ဖြေရှင်းရာ၌ ကျနော်သည် မေတ္တာတရားဖြင့်သာလျှင် သိမ်မွေ့စွာ ဖြေးရှင်းလိုသူ၊ ကျနော်သည် လူသားအချင်းချင်း၏ မေတ္တာတရားကို အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူ။
ထိုနေ့က ကျနော်သည် စိတ်နှလုံး မကြည်လင်တော့သဖြင့် ဂါတ်တွဲပေါ်မှ မဆင်းတော့ဘဲ ငြိမ်သက်စွာ လိုက်ပါလာခဲ့၏။ လက်မှတ်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ မှောင်ခိုကုန်များကိုသော်လည်းကောင်း မရှာဖွေမစစ်ဆေးနိုင်တော့ပေ။ တန်ဆာမဲ့ ကုန်ပစ္စည်းများကို ကံထရိုက်ဘူတာကလေးများမှ ခရီးသည်များတင်ဆောင်ကြသော်လည်း ကျနော်သည် စစ်ဆေးပြီး တန်ဆာမလုပ်ပေး။ ညနေခင်းများ၌ ညိုညိုတို့တွဲသို့ ကူးသွားလေ့ရှိသော်လည်း ထိုညနေကမူ မသွားတော့ပေ။
မြို့သစ်မှ ထွက်လာခဲ့သောအခါ၌ ညိုညိုသည် ရထားသံခါးဝတွင် ထွက်ရပ်ပြီး ကျနော်ရှိရာ ဂါတ်တွဲသို့ လည်ပင်း တရှည်ရှည်ဖြင့် ကြည့်လာသည်။ သူသည် မှောင်မှောင်ရီရီ၌ အဝေးကပင် လှမ်းပြီး မသိ မသာ ပြုံးပြနေ၏။ သူက သူရှိရာ သို့ အကြောင်းတခုကြောင့် ကျနော့် ကို လာစေလိုသည် သိသော်လည်း ကျနော်သည် ဂါတ်တွဲပေါ်မှ မဆင်းချင် ဖြစ်လာခဲ့ရသည်။်
ဆဒ္ဒုံချောင်းသို့ ရထားဝင်ရောက်ဆိုက်ရပ်လိုက်လျှင် တောင်တွင်းကြီး အဝင်၌ ရှောင်တခင်လက်မှတ် စစ်ဆေးမည် ကိုကြောက်သဖြင့် လက်မှတ်မဲ့များနှင့် မှောင်ခို သမားများသည် သူတို့တွဲပေါ်မှ ပြေးဆင်းလာကြပြီး ကျနော် လက်မှတ်ရောင်းရာ ပလက်ဖေါင်းပေါ်တွင် လက်မှတ်များ (ဆဒ္ဒုံမှ တောင်တွင်းကြီး ပြားသုံးဆယ်) လာယူကြသည်။ သူတို့ထဲ၌ ညိုညိုလည်း ပါသည်။ ညိုညိုသည် ကျနော့် ကို စကားပြောရန်ရှိသဖြင့် လက်မှတ်ကို နောက်မှယူသည်။
ဤအချိန်ကား အမှောင်စိုးလာသဖြင့် မှောင်ခို ပစ္စည်းများ ဝှက်ရန် လွယ်ကူချိန် အခြားဘူတာ ဖမ်းဆီးရေးများမှ လွန်မြောက်လာချိန်ဖြစ်သဖြင့် မှောင်ရီရီထဲ၌ သူ့ မျက်နှာ ကလေးမှာလည်း ရွှင်လန်းတောက်ပစွာ ပြုံးရယ်ထားနိုင်သည်။ ကျနော့် ကို ကြည့်နေကြသော သူ့ မျက်လုံးများသည် ရွှန်းပြက်နေကြသည်။
“သူ လာမလားလို့ ….နတ် မောက် တုန်းက သမောသီးသုတ်ဝယ်ပီးစောင့်နေတာ၊ သူ မလာတာနဲ့ အကုန်စားပလိုက်ရတာဘဲ၊ ဘာပြုလို့ မလာတာလဲ”
သူသည် အသံကို ခပ်တိုးတိုးပြုကာ မေးနေသည်။
ကျနော်သည် လက်မှတ်ပေါ်တွင် နေ့စွဲတံဆိပ် တုံးကို ဖြည်းဖြည်းနှိပ်နေသည်။
“ချစ်တယ်ကွယ်” ဟု ပြောနေမိသည်။
“တော်စမ်း ပါ၊ မေးတာတေ့ာ မပြောဘူး၊ ကဲ လက်မှတ် သုတ်သုတ်ပေးစမ်းပါ၊ တော်ကြာ ရထားထွက်သွားမယ်”
ကျနော်သည် လက်မှတ်ပေးရင်း လက်မှတ်ကို မလွှတ်ပေးဘဲ သူ့ လက်ကို ဖမ်းဆုပ်ထားနေသည်။
ဂါတ်ဗိုလ် ကိုမောင်ကိုက ဂါတ်တွဲပေါ်မှ “ဟေ့ သုတ်သုတ်လုပ်၊ ဒီကိုလာခဲ့ပါလားကွ၊ ဒီမှာရောင်း↔ဟု လှမ်းအော်ပြီး နောက်နေသည်။
သူသည် ကျနော့်လက်ထဲမှလက်မှတ်ကို ဆတ်ကနဲဆွဲလုလိုက်ပြီး သူ့ တွဲသို့ ပြေးသွားသည်။
ရထားထွက်လာခဲ့သောအခါ ညိုညိုတို့ ကို အကာအကွယ်ပေးသောချစ်စရာလှပသည့် အမှောင်သည်လည်း ပို၍နက်ရှိုင်းလှပစွာ မှောင်လာနေသည်။
အပိုင်း (၁၁)သို့ ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန်....။
Posted by ငြိမ်းဝေ at 3:31 AM No comments: Links to this post